MUSLINKA IYO KRISTANKA
“…Ma dhibaato, mise cidhiidhi, mise silic, mise baahi, mise arrad, mise khatar, mise seef? Waayo, waxaan hubaa inaan dhimashada, ama nolosha, ama malaa’igaha, ama kuwa madaxda ah, ama waxyaalaha haatan jooga, ama waxyaalaha iman doona, ama kuwa xoogga leh, ama kor, ama hoos, ama uun kaleeto inaga sooci karin jacaylka Ilaah oo ku jira Rabbigeenna Ciise Masiix.”(Rooma 8:35, 38, 39)
DHIBAATOOYINKA NOLOSHA LAGALA KULMO
Isla sida aan nolosha caadiga ah dhibaatooyin u gala kulano ayaan dhibaatooyin ugala kulanaa nolosha ruuxa ama xiriirka cusub ee Ilaah lala yeesh`o. Markaan dhibaatooyin la kulmayno oo aan ka guulaysanayno waan barbaarnaa oo weliba waan sii xoogaysanaa, haddii ay dhibaatooyinka yihiin wax ku saabsan nolosha caadiga ah ama xagga ruuxaba. Intaan ku sii baranayno awoodda cusub, Ilaah baan saraysinaa intuu noo cadaynayo daacadnimadiisa oo uu noo bandhigayo in nimcadiisa ay dadka oo dhan u furantahay sida ku qoran Kitaabka qoduuska ah 2 Korintoos 12:9 oo leh sida tan, “Oo isagu wuxuu igu yidhi, Nimcadaydu way kugu filan tahay; maxaa yeelay, xooggaygu wuu ku dhan yahay itaaldarrada. Sidaa aawadeed anigoo faraxsan ayaan ku fanayaa itaaldarrooyinkayga in xoogga Masiixu igu soo dego.” Waxyaalaha aan buugan kaga hadlaya waxaa ka mid ah,
4. Sida doonista Ilaah loo ogaado
Qofka rumaysadka leh ama Masiixiga ah waa inuu iska jiraa Meelaha, Marxaladaha iyo weliba wakhtiyada uu kala kulmi karo jarabaadyada xun oo isaga dembi ku ridi karaan. Sida keliya oo jarabaadda looga hortegi karo waa in la noqdaa dad uu rumaysadkooda sii barbaaraya oo uu Ilaah hogaansanayo. Maskaxda waxyaalaha Ilaah ku fikirtaa suurtagal ma ahan inay haddana ku fikirto kuna ficil qaado waxyaalaha xun oo qofka ka fogaynayaan xiriirka uu Ilaah la leeyahay. Ma ahan inuu qofka toos Ilaah u adeeca uusan jarabaad la kulmaynin laakiin inkastoo uu jarrabaad la kulmaa wuxuu kaga guulaysanaya awoodda Ilaah. Tan iyo waxyaala badan ayaa ah waxyaalaha aad kala kulmaysid buugan. Dembiyada suurtagalka ah oo Ilaah laga dembaabo waxaa ugu daran kan uu qofka qasid u samaynayo. Waa dembigaan kan shaydaanka dembaajiyey sida qoran, “Xiddigta waaberiyow, inanka arooryaadow, sidee baad samada uga soo dhacday! Kaagan quruumaha taag yareeyeyow, sidee baa dhulka laguugu riday! Waxaad qalbigaaga iska tidhi, Aniguwaxaan kori doonaa samada, oo carshigaygana xiddigaha Ilaah waan ka sara marin doonaa, oo welliba waxaa ku fadhiisan doonaa buurta shirka ee darafka woqooyi ku taal. Waxaa kori doonaa daruuraha sare korkooda, oo waxaan noqon doonaa sida Ilaaha ugu sarreeya oo kale.” (Ishaacyaah 14:12-14)
Waana arinta Aadan iyo Xaawo dembaajisay sida qoran, “haddaba abeesadu way ugu qiyaano badnayd bahal kasta ee duurka jooga oo Rabbiga Ilaah ahu sameeyey. Oo waxay naagtii ku tidhi, Ilaah miyuu idinku yidhi, waa inaydnaan waxba ka cunin geed kasta oo beerta ku yaal? Naagtiina waxay abeesadii ku tidhi, Midhaha geedaha beerta waannu cuni karnaa; laakiinse midhaha geedka beerta dhexdeeda ku yaal, Ilaah wuxuu nagu yidhi, waa inaydnaan waxba ka cunin, ama aydnaan taaban, yaydnaan dhimanine. Abeesadiina waxay naagtii ku tidhi, Ma dhiman doontaan; waayo, Ilaah wuxuu og yahay in maalinta aad cuntaan ay indhihiinnu furmi doonaan, oo aad noqon doontaan sida Ilaah oo kale, idinkoo kala garanaya wanaagga iyo xumaanta. Oo markii naagtii aragtay in geedkii cunto ku wanaagsan yahay, oo indhaha u roon yahay, oo uu yahay geed loo doonayo in caqli lagu yeesho, ayay midho ka qaadatay, oo cuntay; ninkeedii la joogayn wax bay ka siisay, oo isagiina wuu cunay. Oo labadoodiiba indhahoodi way furmeen, oo waxay garteen inay qaawan yihiin; waxayna isku tosheen caleemo berde, oo ay gunti ka samaysteen.” (Bilawgii 3:1-7) Carruurta Ilaah waa inay doonista Ilaah ogaadaan kuna dhaqmaan. waxaa dhacdaa in doonista Ilaah la ogyahay aanan laakiin lagu ficilqaadin.
Haddii aan doonayno inaan shakinin oo aan rumaysadkeena xoojino, waa inaan fahanno oo aan ku dhaqannaa doonista Ilaah. Rasuul Bawlos wuxuu leeyahay, “Haddaba rumaysadku wuxuu ka yimadaa maqlidda, maqlidduna waxay ku timaadaa hadalka Masiixa.” (Rooma 10:17 ) Nafta dhabta Ilaah doonayso, Ruuxa qoduuska ah ee Ilaah baa runta ku toosinayaa. Ku barbaaridda erayga Ilaah waxay dhalisaa rumaysadka; akhriska iyo fahamka aan erayga Ilaah fahmayno waa sida abuurista midhaha rumaysadka oo qalbiyadeena lagu abuuray waxayna dhalayaan midh iimaan oo barbaarta. Rabbiga weligiis ma ceebayn doono kuwa magaciisa ku dhawaaqaan. “I bari , waanan kuu jawaabi doonaa, oo waxaan ku tusi doonaa waxyaalo waaweyn oo qarsoon oo aadan qoon.” (Yeremyaah 33:3aad ) Jacaylka aan Ilaah jeceylnahay oo aan isaga oo keliya aan isku halaynayno runtii Ilaah intaa in ka badan ayuu ina jeceylyahay oo wanaag weyn ayuu inoo samaynaya sida qoran, “waxyaalo aanay ishu arkin, oo aanay dhegtu maqlin, oo aan qalbiga dadka gelin, wax kastoo ay yihiinba, Ilaah baa u diyaariyey kuwa isaga jecel.” (1 Korintos 2:9).
Dembiga muxuu yahay?
“Xumaantayda iga wada maydh, oo iga nadiifi dembigayga.” Sabuurrada 51:2
Xumaan kastoo doonista Ilaah ka soo horjeedda waa dembi oo waxaa inagu qasab ah inaan Ilaah ka barino inuu inaga nadiifiyo. Haddii aan doonayno inaan dembiga ka hadalno waxay nagu qasbaysaa inaan horta dembiga macnayno. Wax aadan macnaheeda garanayn kama hadli kartid. Haddii su’aal la soo jeediyo ku saabsan waxa dembiga uu yahay waxaa jiraan fikirado badan oo la soo jeedinayo. Fikiradahaasi waxay u badan yihiin in dembiga uu yahay waxyaalaha uu qofka qalad u arko oo uu shaqsi ahaantiisa doonaynin in la suubiyo. Ilawse haddaan fiirino macnaha aad looga hadlo, dembiga wuxuu yahay gefka la gefo in lagu nolaado nolosha tan saxda loo yaqaano. Macnaha aan kor ka sheegnay haddii qumaati loo eego ma sheegayo dhabta ah in haddii dariiqa saxda ah laga leexdo dariiq kala lagu dhacayo. Waxay tan nagu qasbaysaa inaan macna kale sii raadino. “Kii kasta oo dembi falaa wuxuu falaa caasinimo; oo dembigu wuxuu yahay caasinimo.” (1Yooxanaa 3:4)
Micnayntan ma tix gelinayso sida loola dhaqmi lahaa waxyaalaha uu qoraalka ka hadlaynin oo ay ka tirsanyihiin waxyaalaha si joogta ah noolosha ugala kulanno. Waxaan odhan karnaa macnahaa naguma filno oo waxaan u baahannahay macna kale oo dheeraad sida tan, “Xaqdarrada oo dhammu waa dembi; oo waxaa jiraa dembi aan xagga dhimashada ahayn.” (Yooxanaa 5:17). Kitaabka wuxuu noo sheegaya inay xaqdarada oo dhan dembi tahay. Waxaa jiraan kuwa badan oo garanayaan inay wanaagsan tahay inay wanaag sameeyaan laakiin inta badan ma sameyaan. Qofkaas wanaagga kas uga soo leexday dembi bay u tahay waxa uu samaynaya (Yacquub 4:17aad). Way wanaagsan tahay inaanan ku dhaqmin wax alla wuxuu damiirkeena diidaya. Hadduusan rumaysad nagu jirin oo uu shaki noogu jiro aan ka fogaano waxaas. Waxaa qoran, “Laakiinse kii shakiya, hadduu cuno, waa xukuman yahay, maxaa yeelay, rumaysad wax kuma cuno, oo wax kasta oo rumaysad ka imaaninu waa dembi.” (Rooma 14:23aad)
Caasinimadana waa inaan ka fogaano waayo, waa dembi oo weliba kii wax quudhsadaana waa u karaahiyo dadka sida ku qoran, Maahmaahyadii 24:9aad. Dadka qaarkood way yasaan dembiga oo waxay inta badan iisu malayaan inay aad reer diimeed u yihiin oo waxyaalaha diinta ay xagga Ilaah kaga faa’idi doonaan maalinta xukunka. Ku dhaqanka sharciga waa uun wax xagga jidhka ah ama ay dadka kale qofka kaga war bixin karaan. Kitaabka qoduuska ah wuxuu cadaynaya in maalinta qiyaamaha ay dadka odhan doonaan, “Rabbiyo, Rabbiyow, miyaanan magacaada wax ku sii sheegin, miyaanan magacaada jinniyada ku saarin oo weliba miyaanan magacaada waxyaala la yaab le ku samayn? Laakiin Rabbiga wuxuu leeyahay waxaan uga wada jawaabi doonaa, anigu ma aanan idin aqoonin; iga taga, idinka ku dhaqantaan sharci xumada.” (Matayos 7:22, 23)
Dembiga waa ku dhaqanka sharci xumada iyo ka leexashada doonista Ilaah (Yooxanaha kowaad 3:10aad). Xaqdaro kasta waa dembi oo ma jiro dembi aan ugu dambaysta qof dhimashada ku ridi doonin haddaan durbaba la qiranin oo aan laga toobad keenin (Yooxanaha kowaad 5:17aad). Rumaysad la’aantuna waa dembi (Yooxanaa 16:8, 9). Haddii aad samaynin xaqa waxaad tahay dembiile ama qof kasta oo aan dantiisa ka soo bixin waa dembiile (Yaacquub 4:17aad). Haddii aad ku dhaqmin qoolka lagaa doonaya iyadana waa dembi (Rooma 3:23aad). Kuligeenba waan wada dembaabnay, mana jiro hal ruux oo xaqnimo ku dhaqmaya ruuxna. Waa inaan ogolaana inaan dembiilayaal nahay oo aan Ilaah hortiisa waxba ku lahayn haddaanan dembiyadeena ka toobad keenin. Waxa aad shakiga lagu sameeyana waa dembi sida ku qoran Rooma 14:23aad iyo aayada kale.
Dembiile kasta wuxuu dembiyadiisa laha u geesan doonaa inuu maalinta qiyaamaha Ilaah uga jawaabo sababta uu u samayay dembiga sidaa daraaddeed dembi kastoo aad samaysid runtii nabad ma heleysid haddaadan Ilaah u qiranin intaad nooshahay oo aad ka toobad keenin maxaa yeelay, Kitaabka qoduuska ah ayaa sheegaya (Ishacyaah 48:22aad iyo Ishacyaah 59:2aad) Dembiga ayaa kala soocay Ilaah iyo baniaadmiga. Dembi kasta waa mid jannada ku gin karo (Rooma 6:23). Addeecista diinta aan lagu heleynin janna hadduusan qofka Ilaah shaqsi ahaan xiriir saafi ah la lahayn. Haddii diinta jannada lagu gelaya, Rasuul Bawlos ayaa ku farxi lahaa oo jannada ku geli lahaa. Ilawse Rasuul Bawlos waxyaalaha ay diinta ka balan qaadday oo dhan inuu ka tegay ayuu goostay inuu Ciise Masiix raaco sida ku qoran, Galatiya 1:14; Filiboy 3:6 iyo Timoteyoska kowaad 1:13, 15. Korneliyas wuxuu ka tirsanaa culumada diinta laakiin wuxuu fahmay inuusan jannada ku geleynin sharciyada diinta wuxuuna ugu dambaysta raacay Ciise Masiix si uusan jannada u gefin (Falimaha Rasuullada 11:14aad).
Dembiga muxuu samayaa?
Dembiga xumaan mooyaane wax wanaag ah uu baniaadmiga u keenaya ma jirto. Wuxuu doonaya inuu dadka iyo Ilaah kala weji qariyo oo maalinta ugu dambaysana ay naarta isaga la galaan taa oo ah ka dhimashada weligeed ah oo ay dadka Ilaah kaga dhimanayaan xagga ruuxa. “Aadanna wuxuu ku yidhi, codkii naagtaadaad maqashay oo waxaad wax ka cuntay geedkii aan kuugu amray, anigoo leh, waa inaadan waxba ka cunin, sidaas daraaddeed dhulku waa habaaran yahay adiga aawadaa; maalmaha cimrigaaga oo dhanna dhibaataad kaga wax kaga cuni doontaa. Qodxan iyo yamaaruugna waa kaaga soo bixi doonaan, waxaanad cuni doontaa geedaha yaryar oo duurka. Wejigaagoo dhedidsan baad wax cuni doontaa, ilaa aad dhulka ku noqotid; maxaa yeelay, dhulkaa lagaa qaaday; waayo, ciid baad tahay, ciid baadna ku noqon doontaa.” (Bilowgii 3:17-19) “Waxaa lagu ciqaabi doonaa halaag weligiis ah, oo waxaa laga gooyn doonaa Rabbiga hortiisa iyo ammaanta xooggiisa.” (Tesaloniikaha 2aad 1:9aad) Sabuurrada 59:2aadna waxay leedahay sida tan, “…xumaantooyinkiinnaa idin kala soocay idinka iyo Ilaahiinna oo demibyadiinnaa wejigiisa idinka qariyey, oo saasuusan idiin maqlin.”
Dembiga yaraan ma lahaan oo sidaa daraaddeed dhibaato la’aan ma noqon karo – kala soocnaan buu u keenaa xiriirka Ilaah iyo dadka u dhaxeyo oo ka soocmada Ilaah laga soocmayo waa dhimasho laga dhimanayo xagga Ilaah waayo, ku alla kii aanan doonista Ilaah ku socon waxaa lagu xisaabaa mid dhintay. Si aan nolosha weligeed ah ku helno waxaa nagu waajib ah inaan wanaagga falno oo aan xumaanta ka dheeraano si ay ciqaabta weligeed ah ee Ilaah ay noo helin oo ay weliba xumaantooyinkeena ay wejiga Ilaah nooga hor staagin. Haddii aan Kitaabka Qoduuska ah ka akhrino, Ilaah wuxuu awowgeen Aadan ku yidhi ‘haddii aan ka cuntid geedka wax garashada ee xumaanta iyo wanaaga waad dhiman doontaa’ (Bil. 3:3) oo Aadan geedkii uu Ilaah ka seeray buu wax ka cunay oo isla markiiba sidii uu Ilaah yidhi bay noqotay oo wuu ka dhintay xagga xiriirkii hore uu Ilaah la lahaani jiray ee wanaagsanaa waayo, ruuxiisa wuu ka soocmay Ilaah oo tan iyada ahuna waxay sii dhalisay inuu xataa xagga jidhka dhimasha maanta loo yaqaano tan caadiga ah inuu ka dhinto.
Imaashada uu shaydaanka dhulka yimid waxay la timid dhimasho taa oo aan ka heleyno Rooma 5:12; 6:23. Marka haddii la yidhaahdo baniaadmiga waa dembiile waxaa cadaynayaa dhimasha uu dhimanayo ee loo yaqaano dhimashada caadiga ah ee ay nafta dadka ka baxdo oo sida keliya uu bani-aadmiga taan iida ah ku saxi karo waa uun inuu Ilaah la yeesho xiriir kale oo cusub waayo, xiriirkii hore waa burburay. Meesha su’aal baa ka soo dhalan kartaa oo ah laakiin sidee baa xiriirkan cuseb lagu heli karaa? Tan waa su’aal aad muhim u ah waayo hadduuba xiriirkii hore burburay kan cusub sidee baa lagu heli karaa runtii? Waa uun in Ciise Masiix la rumaysto kan u dhintay dembiyada burburka keena oo nagu qasbay inaan maanta noqono kuwa aan dhimashada ka fakani kerin oo ay qasab ku tahay inay dhintaan oo bedelkii aan dhimasho joogta ah dhiman lahayn Ciise daraaddiis baan dhimasho mudo ah u dhimanaynaa haddii aan isaga rumaysano oo aan addeecno isaga.
Laakiin si qalad ah ha u fahmin oo ha u malaynin in kuwa dhintaan dhimashada caadiga ah oo dhan ay yihiin kuwa aan isaga rumaysan waayo, runtii waan wada dhimanaynaa dhimashada caadiga. Kuwa Masiixa aaminsan tan waxay u tahay jid ay Ilaah kula kulmayaan si ay u helaan nolosha da’imiska ah waayo, noloshaan aan dhimashada caadiga ah uga dhimanayno ma ahan mid weligeed ah laakiin waxaan heli doonaa mid ay dhimasho iyo wax u eg ay ku jiri doonin. “Waayo, hadaynu rumaysan nahay in Ciise dhintay oo haddana soo sara kacay, de sidaas oo kalaa kuwii Ciise rumaysnaa oo dhintay la keeni doonaa isaga. Waayo, tan waxaanu idiinku leenahay hadalka Rabbiga, sinaba ugama hor mari doonno kuwii dhintay. Maxaa yeelay, Rabbigaqudhiisu samaduu kala soo degi doonaa qaylo iyo codka malaa’igta sare iyo buunka Ilaah, kolkaasay kueii Masiixa rumaysnaa oo dhintay horta soo kici doonaan, dabadeedna kuweenna nool oo hadha ayaa iyaga kor loola qaadi doonaa daruuraha dhexdooda inaynu Rabbiga hawada kula kulanno, oo sidaasaynu Rabbiga weligeen ula joogi doonnaa. Sidaas daraaddeed hadalladan midkiinba midka kale ha ugu qalbi qabowjiyo.” (1 Thesalonika 4:14-18)
Midda kale oo ah inaan ogaano waxay tahay inaan u malaysanin in kuwa Masiixa rumaysteen oo Masixiinta ah ay dembaabin ama ay jarrabaadda dembiga ay soo maraynin taa iida ah waa fikirad qaldan maxaa yeelay, Masiixa wuu dembaabaa laakiin midda aan qofka Masiixiga ah laga filanaynin waa inuu si joogta ah nolol dembi leh ku jirin. Marka uu qofka Masiixa rumaysto ayey ugu dhibaato badan tahay waayo, marka iida ah shaydaanka ma doonayo inuu la dagaalo kuwa dembiilayaasha ah maadama ay ja yihiin kuwa isaga addeeco oo Ilaah ka soo horjeedo laakiin wuxuu u baahan yahay inuu la dagaalo uu rumaysadka kuwa Ilaah aaminsan uu burburiyo si ay Ilaah macaarad ugu noqdaan oo ay demiilayaal u noqdaan si ay uga tirsanadaan boqortooyadiisa dhamaan doonto. Laakiin rumaystayaasha waxay haystaan awood qaas ah taa oo ah ruuxa qoduuska ah ee Ilaah inuu iyaga xoojinayo oo in kasta oo ay jarrabaadda timaado ay u jilecsanaanin oo ay kaga hortagaan magaca Eebbe, oo laakiin haddii ay lacala dhacdo inuu shaydaanka duufsado waxaa jirtaa wax looga baahan yahay inuu kan rumaystaha ah sameeyo taa oo aan haatan u jeesanayno.
Sidee baa dembiga looga hortagaa?
“Dembigaygii adigaan kuu qirtay, oo xumaantaydiina ma aan qarin, waxaan dihi, xadgudubkayga waxaan u qiranayaa Rabbiga, oo adna waad iga cafiday xumaanta demmbigayga.” (Sabuurrada 32:5) Qofka dhabtii Ilaah rumaysan ma ahan inuu dembiyadiisa cudurdaar u yeelo laakiin waxaa jiraan laba shey oo looga baahan yahay inuu sameeyo labada shey oo ah,
§ Waa inuu dembiga uu falay uu ka toobad keeno ama uu Ilaah u qirto uuna ka fogaado uusan mar dambe isla arintaa uu ku noqon maxaa yeelay, way ka sii darnaan doontaa xaaladda aad ku jirtay haddii aad markii aad toobad keentay kaddib ay haddana dembaabtid. “Jinniga wasakhda leh goortuu ninka ka baxo, wuxuu maraa meelo aan biyo lahayn, isagoo nasasho doonaya, oo markuu heli waayo, wuxuu yidhaahdaa, waxaan ku noqonayaa gurigaygii aan ka baxay. Oo goortuu yimaado wuxuu helaa isagoo xaaqan oo hagaagsan. Markaasuu tagaa oo wuxuu wataa toddobo jinni oo kale oo ka xunxun isaga, wayna galaan oo halkaas joogaan. Ninkaas wakhtigiisa dambe ayaa ka darnaanda wakhtiga hore.” (Luukos 11aad: 24aad-26aad)
Tan waa arin uu Kitaabka qoduuska ah uu nagu dhiiri gelinayo waayo, waxaa jirtaa marxalado taariq ah oo la soo gudboonaadeen dadkii hore uu Ilaah adeegsaday oo dembiilayaal ahayeen laakiin haddii aan Kitaabka qoduuska ah ka akhrino tusaalo waxaa inoo ah nebi Daa’uud oo dembiyadiisa Ilaah ku hor qirtay oo Ilaahna wuu u cafiyey isaga haddana waxaa jirtaa qayb kala oo Kitaabka ka tirsan oo naga balan qaadayso in Ilaah uu noo cafinayo dembiyadeena haddii aan isaga u qirano. “Haddaynu dembiyadeenna qirano, isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo, oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan.” (1 Yooxanaa 1:9) Qirashadu waa cadayn cadaynayso inaad ogolaatay in waxa demmbiga ah uu Ilaah kuu cadayey inay dembi yihiin aad ogoshahay in runtii aad dembaabtay si uu Ilaah kuu cafiyo. Haduu qofka daacad isku noqdo Ilaah intaa ka badan buu daacad iyo caadil baniaadmiga ku yahay oo runtii wuu u cafinayaa ku alla kii demibyadiisa qirta oo haddana midda kale waxay tahay waa inaanan wax dembi ah yaraysan oo aan wada qirano waayo, Ilaah hortiisa dembi kasta waa dembi oo ma jiro dembi yar.
§ Arinta labaad oo qofka rumaysadka leh looga baahanyahay inuu samayo markuu dembaabo waxay tahay inuu toobad keeno kana fogaado wax alla wixii dembi ah oo uu noloshiisa Ilaah ugu adeego. Waxaa cad in hadduu qofka daacadnimo dembiyadiisa ku qirto uu xiriirkii hore uu baniaadmiga Ilaah la lahaani jiray uu soo celinayo.
Jarrabaadda ay dunida dadka jaraabto
“Dunida iyo waxyaalaha dunida ku jira toona ha jeclaanin. Qof uun hadduu dunida jeclaado, jacaylka Aabbuhu kuma jiro isaga.” (1 Yooxanaa 2:15) Erayga duni macnahiisa guud ma ahan dunida uu Ilaah uumay ee ay wax kasta ku jiraan keliya laakiin wuxuu leeyahay macna kale. Inta badan Kitaabka wuxuu dunida ku macnayaa dadka dembiilaha ah kaa oo ka leexday doonista Ilaah sida aan uga aragnay aayada aan haatan akhrinay haddana dunida waa wax kasta oo aan ahayn doonista Ilaah laakiin ku eg farxadda dunidan uu Ilaah uumay keliya. Maadama ay dunida Ilaah ka soo horjeedo, waxay qaymaysaa waxyaalaha doonista Ilaah ka soo horjeedaan: sida stareexa jidhka, waxyaalaha aragga u roon iyo kibirka nolosha taa oo aad haddii aad doonaysid inaad si dheeraad ah u baratid aad ka akhrin kartid 1 Yooxanaa 2:16. Waxyaalaha aan halkaan ka soo jeediyey jarabaad weyn bay baniaadmiga ku hayaan oo laba weji bay leeyihiin,
§ Jacayl - doonista qalbiga
§ Kibirka - doonista qofka
Duufsiga ay dunida baniaamiga duufsanayso waxaa xoojinayaa shaydaanka kan ah hogaamiyaha dunida sharka leh. Waxaa jiraan waxyaalo lagu ogaani karo qofka ay jarabaadda dunida duufsatay kuwa oo ay ka mid yihiin,
v Baniaadanka dunida jacayl wuu ka leexdaa shaqada Ilaah iyo wada jirka kuwa Ilaah aaminsan oo dhan maxaa yeelay, damiirkiisa ayaa u sheegaya inuu dembiile yahay waayo dembi iyo qoduusnimo isku meel ma wada joogi karaan. “Waayo, Deemaas intuu dunidan haatan la joogo jeclaaday ayuu iga tegey, oo wuxuu aaday Tesaloniika; Kereeskeesna wuxuu aaday Galatiya; Tiitosna wuxuu aaday Dalmatiya.” (2 Timoteyos 4:10aad)
v Baniaadanka dunida iyo shuquladeeda jacayl aad buu Ilaah uga dheraadaa maxaa yeelay, dunida waxay leedahay waxyaala fara badan oo isha dadka u roon oo ay kuwa aan Ilaah aqoonin durbaba u go’I karaan inay dunida adeegsato bedelkii uu Ilaah adeegsan lahaa. “Dhillayo iyo dhillooyin yahow, miyeydnaan garanayn inay saaxiibnimada dunidu Ilaah la col tahay? Sidaas daraaddeed kii kasta oo doonaya inuu saaxib la ahaado dunida, Ilaah buu la col noqday.” (Yaquub 4:4aad) Marka yay nagu waajib tahay inaan u adeegno oo aan adeecno ma kii na uumay baa mise waxyaalaha uu uumay?
v Baniaadanka dunida jacayl wuxuu samayaa dembiyada ugu daran oo aad doonaynin inay dhegtaada maqasho ama ay ishaada aragto laakiin kan samaynaya waxba lama ahan waayo, waa mid Ilaah ka goostay. “Wuxuu kuwaas inagu siiyey ballamadiisa qaaliga ah oo aad iyo aad u waaweyn, inaad kuwaas ku noqotaan kuwo ka qayb qaata dabiicadda Ilaah, idinkoo ka baxsaday kharribaadda dunida ku jirta ee ku timid damaca jidhka.” (2 Butros 1:4aad) “Dunida iyo waxyaalaha dunida ku jira toona ha jeclaanina. Qof uun hadduu dunida jeclado, jacaylka Aabbuhu kuma jiro isaga. Maxaa yeelay, waxaa dunida ku jira oo dhan oo ah damaca jidhka, iyo damaca indhaha, iyo faanka nolosha, xagga Aabbaha kama yimaadaan ee waxay ka yimaadaan xagga dunida. Oo duniduna way idlaanaysaa, iyo damaceeduba; laakiin kan doonista Ilaah yeelaa wuu jirayaa weligiis.” (1 Yooxanaa 2:15-17aad) Marka tee noo roon ma inaan Ilaah adeecno in kasta oo ay dhib nagu tahay laakiin aan helnaa nolosha weligeed ah mise inaan dunida ku istareexno oo aan muddo yar kaddibna aan heleyno nolol dab olol ah oo aan weligeed dhamaanaynin? Waa mid u taalo nafsi kasta.
v Baniaadmiga dunida iyo shuquladeeda jacayl durbaba waxay racaan maclimiinta beenta ah ama culumada diinta hab qaloocan u fasiraan. “Gacaliyaalow, ha rumaysanina ruux walba, laakiin ruuxyada tijaabiya si aad u hubsataan inay kuwa Ilaah yihiin; waayo, nebiyo badan oo been ah ayaa u soo baxay dunida.” (1 Yooxanaa 4:1aad) Sida keliya oo looga hor tegi karo jacaylka dunida waa in Ilaah inta dunida la jacaylyahay ka badan la jeclaado sidaanba uga akhrinay 1 Yooxanaa 2:15 oo haddana waxaan ognayhay in kan Ilaah jacayl oo markasta doonista Ilaah ku socdaa oo na weligii ku dadaalo, jarrabaadda dunida kama hor timaado oo wuxuu ugu guulaystaa awooda uu Ilaah isaga siinayo maadama uu isaguba Ilaah daacad ku yahay.
“Soo jeeda oo tukada inaydnaan jirrabaadka gelin.” (Markos 14:38)
Markaan ka hadlayno erayga jidh macna dheeraad ah buu ka leeyahay Kitaabka oo kuma eko keliya jidhka baniaadmiga. Waxaa loo yaqanaa nafta baniaadmiga ku jirto oo dembiga leh oo na doonista Ilaah ka soo hor jeeddo taa oo aan ka akhrin karno Kitaabka Rooma 8:7. Waxyaalaha jidhka ka dhashaa waa jidh si wanaagsan buu Kitaabka u sii macnayey haddii aan akhrino Galatiya 5:19-21 waxaana ka mid ah sinada, wasakhda, nacaybka, xanaaqa, diinta beenta ah, xaasidnimo, sakhraannimo, rabshooyin iyo waxyaalo la mid ah. Qofka ay waxyaalahan ku jiraan is kuuguma yeedhi karo mid Ilaah addeecan ama mid Masiixa ah oo wuxuu hoos jooga inkaarta Ilaah.
Walaal ogaanteeda lahaw oo kuwa Ilaah addeecsanna ama Masixiintana kama baxsano waxyaalaha jidhka ee waxay wada samaynaysaa baniaadmiga oo dhan laakiin kuwa uu Ruuxa Ilaah hogaamiyo ma ahan inay addeecaan jidhka laakiin waa inay wax alla wixii shar ah ay ka fogadaan. Kitaabka Rooma 7:15-25aad ayaa tan noo sharaxaya waayo, wuxuu leeyahay sida tan, “Haddaba maxaynu nidhaahnaa? Sharcigu ma dembi baa? Ma suurtowdo! Hase ahaatee, dembi ma aanan garteen, sharcigaan ku gartay mooyaane, damaca xun ma aanan garteen haddaan sharcigtu I odhan, waa inaan wax damcin. Dembigu isagoo wakhti helay, ayuu amarka dhexdayda kaga falay damac xun oo kasta; waayyo, sharciga la’aantis dembigu waa meyd. Waa baan noolaa sharciga la’aantis laakiin markii amarku yimid, dembigu waa soo noolaaday, aniguna waan dhintay. Amarkii nolosha ii geeyn lahaa, waxaan gartay inuu dhimasho I geeynayo. Waayo, dembigu, isagoo wakhti helay, ayuu amarka igu khiyaaneeyey, wuuna igu dilay. Haddabase sharcigu waa qoduus, amarkuna waa qoduus, waana xaq, wuuna wanaagsan yahay. Haddaba wixii wanaagsanaa miyey dhimasho ii noqdeen? Ma suurtowdo! Laakiin dembigu, inuu muuqdo inuu dembi yahay, ayuu wax wanaagsan igaga dhex shaqeeyey oo dhimasho ii keenay, in dembigu amarka ku noqdo dembi miidhan.
Waayo, waxaynu og nahay in sharcigu ku saabsan yahay ruuxa, laakiinse anigu waxaan ahay mid jidhka raaca oo laga iibiyey dembiga hoostiisa. Waayo, waxaan samaynayo garan maayo, maxaa yeelay, ma sameeyo wixii aan doonayo, laakiin waxaan sameeya wixii aan necebahay. Laakiin haddaan sameeyo waxa aanan doonayn, de markaas heshiis baan kula ahay sharciga inuu wanaagsan yahay. Haddabase haatan ma aha aniga kan waxaa sameeya, laakiinse waa dembiga igu dhex jira. Waayo, waan ogahay inaan wax wanaagsanu igu dhex jirin, taas waxaan ula jeedaa, jidhkaygu wax wanaagsanu kuma jiraan, waayo, waan ku tala jiraa inaan waxa wanaagsan sameeyo, laakiin ma sameeyo. Waayo, waxa wanaagsan oo aan doonayo inaan falo, ma sameeyo, laakiinse waxa sharka ah oo aanan doonaynin inaan falo, ayaan sameeyaa. Laakiin haddaan sameeyo wixii aanan doonaynin inaan falo, de haatan ma aha aniga kan sameeya laakiinse waa dembiga igu dhex jira. Haddee waxaan arkaa qaynuunka in shar ila jiro in kastoo aan doonayo inaan wax wanaagsan sameeyo. Waayo, sharciga Ilaah ayaan kaga farxaa ninka gudaha ah. Laakiin waxaan xubnahayga ka arkaa qaynuun kale, isagoo la dagaallamaya qaynuunka maankayga oo maxbuus iiga dhigaya qaynuunka dembiga oo xubnahayga ku jira. Nin belaysan baan ahay. Yaa iga furan doona jidhkan dhimashada leh? Waxaan Ilaah ugu mahad naqayaa inuu Rabbigeen Ciise Masiix igu furan doono. Sidaas daraaddeed aniga qudhaydu waxaan maankayga ugu adeegaa sharciga Ilaah; laakiinse waxaan jidhka ugu adeegaa qaynuunka dembiga.”
Kan Ilaah addeecsan oo rumaysan wuxuu leeyahay uun cusub uu Ruuxa Qoduuska ah ee Ilaah uu hogaaminayo. Maadama uu jidhka iyo Ruuxaba ay wada jiraan kii uu qofka u ogolaado inuu raaco ayaa hogaanka qabsanayaa waayo, labadooda isku meel kama wada shaqayn karaan. Jawaabta waxyaalaha jidhka waa Ciise Masiix kan waxyaalahas oo dhan iskutallaabta uga guulaystay.
“Sidaas oo kalena idinku isku tiriya inaad dembiga u tihin kuwo dhintay, oo aad Ilaah u tihiin kuwo nool xagga Ciise Masiix.” (Rooma 6:11) Waa inaan ku noolaano doonista Ruuxa qoduuska ah ee Ilaah laakiin ma ahan inaan goosano inaan raacno waxyaalaha jidhka ka farxiya oo aan hadhowtana aan xagga Ilaah aan waxba kala dhaxli doonin Ciise Masiix. “Laakiin waxaan idin leeyahay, Ruuxa ku socda, kolkaas aydnaan damaca jidhka yeelayne.” (Galatiya 5:16) Arinta hogaanka Ruuxa ku saabsan waa mid ka timaaddo cuskashada uu qofka ku cuskanayo Erayga Ilaah wuxuu leeyahay waana mid tartiib ku timaado oo ma ahan wax hal mar ku noqonayo oo saa ku sii soconayo. Marka waa inuu qofka ruuxa qoduuska ah iisu dhiibo uu na ku ficil bixiyo waxyaalahaas oo dhan maxaa yeelay, inta badan aqoonta arinta loo leeyahay way ka duwan tahay ku ficil qaadidda arinta iyada ah. Inteena badan waan og nahay in dembigu uu ahayn doonista Ilaah laakiin haddii aan sida aan u ognahay aan dembiga uga fogaanayn de maxaa faa’ido ah ay leedahay inaan ogaano inuu dembiga xunyahay?
“Haddaba shaydaan baa ku kacay reer binu Israa’iil oo wuxuu Daa’uud ku dhaqaajiyey inuu reer binu Israa’iil tiriyo.” (Taarikhdii Kowaad 21:1) Culayska iyo uu shaydaanka baniaadmiga ku hayo iyo macnaha shaydaanka waxaa lagu soo gebgebayey erayga shaydaan taa oo ay macnaheedu tahay Mucaarad marka waxa uu dunida ku hayo oo dhan wuxuu ugu suubinayaa mucaaridnimo oo kuma jiraan wax wanaag ah uu ka doonayo inuu baniaadmiga ka faa’ido. Haddana shaydaanka waxaa lagu magacaabay garwate oo weligiiba wuu isla quman yahay kaa oo ah Iblis oo wax kasta iskiiga keen dhigi karo oo wuxuu ka soo horjeedaa hawl kasta oo Ilaah qusayso oo dhan. Cadaynta waxa aan ku hadlayno waxaad ka akhrin kartaa Kitaabka qoduuska ah oo hawlaha shaydaanka inooga sheekeynayo taa oo aan qaas ahaan uga akhrin karno, “Waa kuwan kuwii jidka yiil meeshii hadalka lagu beeray, oo goortay maqlaan, Shaydaan baa kolkiiba yimada oo ka qaada hadalkii lagu beeray iyaga.” Markos 4:15a. Haddana haddii aan ka sii akhrino ku saabsan shaydaanka waxaa qoran sida sida tan, “Markaasaa Shaydaan wuxuu Rabbiga ugu jawaabay, Haragba harag baa loo baxshaa, oo nin wuxuu haysto oo dhan ayuu naftiisa u baxshaa. Laakiinse bal haatan gacantaada soo fidi, oo lafihiisa iyo jidhkiisa taabo, oo isna markaasuu hortaada wax xun kaaga sheegi doonaa.” (Ayuub 2:4-5)
Tan waxay noo cadaynaysaa in Shaydaanku uusan waxba lahayn xaata waxyaalaha dunidan uu ku faanaya isaga iskama lahan waayo, wuu ka tegi doonaa ugu dambaysta maxaa yeelay, intaanay waxba jirin Ilaah baa jiray Ilaah ayaana wax kasta aasaasay wuxuuna u aasaasay inay farxaddiisa ahaato inay wax kasta isaga caabudaan. Marka shaydaanka madaama uu waxba lahayn wuxuu doonaya uun wax uu burburiyo oo uu dariiqa quman ka leexiyo waana in layska jiro. Kitaabka qoduuska ah wuxuu isaga ku sii sheegaya inuu yahay mid doonaya wuxuu ku ciil baxo uu burburiyo meel walbuuna joogaa isagoo sida libaaxa u ciyaya laakiin waa inaan ogaano Ilaaha noo yeedhay inuu yahay mid aamin ah oo isaga na uuntay ayaa na siinaya awoodda aan uga hor tegeyno jirrabaaddiisa oo weliba wuu na adkayn doonaa mar alla markuu shaydaanka doonaya inuu na dhuufsado sida aan uga akhrinayno erayga waxaana qoran sida tan, “Feeyignaada oo soo jeeda, waayo, cadowgiinna Ibliiska ahu sida libaax ciyaya ayuu u wareegaa oo u doondoonaa cid uu liqo. Isaga hor joogsada idinkoo iimaankiina ku adag, oo garanaya in isla dhibaatooyinkaasu ay ku dhacaan walaalahyiinna dunida ku jira. Haddaba Ilaaha leh nimcada dhan oo idinku yeedhay amaantiisa daa’imkaa oo Masiixa ku jirta, markii aad in yar xanuunsataan ka dib isagu wuu idin kaamili doonaa, oo idin adkayn doonaa, oo idin xogayn doonaa.” Butroska Kowaad 5:8aad
Marka haddii aan niraahno shaydaanka waa garwate ma ahan wax aan iska samaysanayno laakiin waa wax jiraan amaba run ah waayo, isagu wuu isla quman yahay oo wuxuu uun doonaya sida isaga la quman inuu suubiyo laakiin Ilaah uma uusan ogolaanayo inuu kuwa isaga addeecsan uu shaydaanka wuxuu doono ku samayo laakiin wuu xoojinaya iyaga si ay uga hor yimadaan jarabaadiisa oo isagu waa mid macaaradnimo ku shaqaynayo. Shaydaanka wuxuu ka mid ahaani jiray qoduusiinta carshiga Ilaah ag fadhiyaan laakiin waxaa dhacday inuu mar dembaabay taa oo isaga ku qasabtay inuusan mar dambe Ilaah carshigiisa ag joogin laakiin laga soo dejiyo janada waayo, Ilaah iyo dembi waa laba aan laysku ag dhoweynaynin waayo, Ilaah waa qoduus oo isaga waa nuur oo mugdi uma dhowaado taa iida ahna waxaan ka akhrinaynaa Kitaabka Ayuub 1:6. Waxaa jireen malaa’igo badan oo shaydaanka la safteen oo iyaguna waxay noqdeen jiniyada aan Kitaabka ka akhrinayno. “Laakiin Farisiintu goortay maqleen, waxay yidhaahdeen, kanu jinniyada wax kale kuma saaro Be’elsebu oo ah madaxda jinniyada maahee.” Matayos 12:24; Muujintii 12:7. “Markaasaa samada waxaa ka dhacay dagaal, oo Mikaa’iil iyo malaa’igihiisii waxay u soo baxeen inay la diriraan masduulaagii; oo masduulaagii iyo malaa’igihiisiina way la dirireen…”(Muujintii 12:7)
Yooxanaa 16:11 waxaan arkaynaa in boqortooyada shaydaanka uu Ciise Masiix burburiyey oo haatan boqortooyada Ciise baa haystaa laakiin shaydaanku weli wuu degaalamaya ilaa isaga iyo malaa’igahiisa badda debka ololayo loogu ridayo sida aan Kitaabka uga akhrinayno qaas ahaan Muujintii 20:10 oo qorayso sida tan, “Oo Ibliiska iyaga khiyaanayn jirayna waxaa lagu dhex tuuray baddii dabka iyo baaruudda ahayd, halkaas oo ay ku jiraan bahalkii iyo nebigii beenta ahaa, oo iyaga waxaa la cadaabi doonaa habeen iyo maalinba weligood iyo weligoodba.” Kuwa aan Ilaah u go’in shaydaanku wax weyn buu ku hayaa taa oo ay ka mid yihiin sida uu Kitaabka sheegayo; wuxuu dedaa qalbiyada dadka si aynan u maqlin erayga Ilaah oo ay doonistiisa u samayn sida aan uga akhrinayno 2 Korintos 4:4 waxaana qoran sida tan, “Ilaaha wakhtigani wuxuu ka indho tiray maanka kuwa aan rumaysanaynin, inaan iftiinka injiilka ee ammaanta Masiix, kan ah u-ekaanta Ilaah, uu ifin iyaga.” Luukos 8:12 waxaa qoran sida tan, “Kuwii jidka yiil waa kuwii maqla, markaasaa Ibliisku yimaadaa, oo hadalka ayuu qalbigooda ka qaadaa, si aanay u rumaysan oo aanay u badbaadin.”
Runtii Shaydaanka ama Ibliiska ma doonaya dad dembiga ka badbaadaan maxaa yeelay, wuxuu hubaa in maalinta ugu dambayso uusan lahayn wax rajo ah uu xagga Ilaah wanaag kaga sugaya sidaa daraaddeed wuxuu doonaya wax uu la naf go’o si uu keligiis u ahaan maalinta iyada ah. Waxaan Ilaah ka baryaynaa inuu noo indho furo si aan u aragno waxa ay tahay doonistisa si aan u noqon kuwa inkaartiisa ay ku dhici doonto maalinta ugu dambaysaa gefka aan ka galnay oo aan isaga rumaysan waynay daraaddiis. Shaydaanka wuxuu xukumaa kuwa aan weli Ilaah u go’in ama kuwa dib uga soo noqdeen doonista Ilaah. “Laakiin waxaa iyagii ka hor istaagay saaxirka Elumas (oo sidaas magaciisa loo fasiri jiray), oo wuxuu isku deyayay inuu taliyihii ka leexiyo iimaanka.” (Falimaha Rasuullada 13:8aad) Garwataha kaa oo ah Shaydaanka wuu ishtakayaa wuuna ishtakayn doonaa kuwa aan Ilaah aaminsanayn. “Oo haddana waxaan samada ka maqlay cod weyn oo samada oo leh, Haatan waxaa yimid badbaadadii, iyo xooggii, iyo boqortooyadii Ilaaheenna, iyo amarkii Masiixiisa; maxaa yeelay, kii walaalaheen dacweyn jiray hoos baa loo tuuray, kaasoo iyaga ku dacweyn jiray Ilaaheenna hortiisa habeen iyo maalinba.” (Muujintii 12:10aad)
Shaydaanka wuu burburin doonaa maragfur kasta oo ay Masixiinta u marag furayaan Masiixa.
“Feeyignaada o soo jeeda, waayo, cadowgiinna Ibliiska ahu sida libaax ciyaya ayuu u wareegaa oo u doondoonaa cid uu liqo.” (1 Butros 5:8) Waa inaan ka fiirsanaa wax yaalaha uu noogu soo gaban karo maxaa yeelay, isagu iskama yimaado laakiin wuxuu noogu soo gabanaya waxyaalaha aan aad u jecaylnahay si uu noogu dhigo kuwa dunida jacayl oo tan Ilaah aan ka fikirin maxaa yeelay, wuxuu og yahay hadduu toos u yimaado iyadoo la og yahay isagu waa sheydaan in laga wada carari doono uuna wayni doono wax uu dhuufsado. Marka waa inaan is weydino maxay yihiin waxyaalaha aad u jeclahay oo aan Ilaah kaga dembaabo waana inaad ogaatid waa habka ama sheyga uu sheydaanka istecmaalaya si uu Ilaah kaaga fogayo.
Shaydaanka wuxuu siri doonaa kuwa aanan isaga u adeegeynin oo dembiilayaasha ahayn.
“Oo la-yaab ma leh, waayo, Shaydaanka qudhiisu wuxuu isu ekaysiiyaa malaa’igta iftiinka.” (2 Korintos 11:14). Shaydaanka shaqada Masixiinta oo dhan oo ku saabsan faafinta warka badbaadiyaheena Ciise Masiix iyo boqortooyada Ilaah wuu hor istaagi doonaa. “Waayo, waannu jecelaan lahayn inaannu idiin nimaadno, anigoo Bawlos ah mar iyo lababa waan jeclaa, laakiinse, Shaydaan baa naga hor joogsaday.” (1 Tesaloniika 2:18) Wuxuu kuwa Masixiinta ah ku jaraabi doonaa dembiga sida sinada iyo wax alaate wixii uu arkay inay dadka jacayl yihiin oo lagu dhuufsan karo. “Ha is diidina, wakhti aad ku heshiisaan inaad soon iyo tukasho u goosataan mooyaane, oo aad haddana isu timaadaan, si aan Shaydaanku idiin duufin iscelin-la’aantiinna aawadeed.” 1 Korintos 7:5. Ilaahna Shaydaanka wuu u fasaxi doonaa si uu Masixiinta ku edbiyo. “waa inaad kaas oo kale shaydaanka u dhiibtaan in jidhku baaba’o, Ruuxuse badbaado maalinta Rabbiga.” 1 Korintos 5:5 Aayad kalena waxay leedahay, “Inaanan isu sarraysiin waxyaalaha lay muujiyey weynaantooda dheer aawadeed, waxaa lay siiyey wax jidhkayga mudoa oo ah mid Shaydaan u soo diray inuu I kadeedo si aanan isu sarraysiin.”
“Waayo, haddii ay doonista Ilaah tahay, waxaa ka wanaagsan inaad samafalidda u xanuunsataan intii aad xunuunsan lahaydeen sharfalidda.” 1 Butros 3:17 Waxaa jiraan saddex nooc oo silac oo kuligood xanuun iyo stareex la’aan bay baniaadmiga ku hayaan oo weliba waxaa silaca ugu badan kuwa Ilaah rumaysan oo addeecaan.
a) Silcinta jidhka – tan waa midda jidhka ku dhacdaa oo runtii baniaadmi kasta wuu la kulmaa. Waxaa dhacdaa in jidhka uu jareexoobo ama qayb jidhka ka tirsan ay qumaati shaqadeeda uga soo bixi wayso. Maxaa keenaa silaca jidhka? Waxaa silaca jidhka ka dambeeyaan waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin:
- u dhalashada silaca -
“Ciise intuu socday wuxuu arkay nin indho la’aan ku dhashay.” Yooxanaa 9:1aad
- shil lama filaan ah ama taxdir darro ayaa keeni kartaa silaca -
“Yoonaataan ina Saa’uul wuxuu lahaa wiil curyaan ah. Oo isagu shan jir buu ahaa markii war ku saabsan Saa’uul iyo Yoonaataan Yesre’eel laga keenay, ee ay naagtii isaga dhawraysay kor u qaadatay, oo carartay. Oo intay ku degdegaysay inay cararto ayuu ka dhacay, oo markaasuu curyaan noqday. Oo magiciisuna wuxuu ahaa Mefiiboshet.” 2 Samuel 4:4aad
- Waxaa kale oo ay silcinta ka imaani kartaa waxyaalaha jidhka ku jiraan iyo waxyaalo la mid ah ama ka duwan. “Naag laba iyo taban sannadood dhiigibixid qabtay, oo wixii ay ku noolaan lahayd oo dhan dhaqtarro ku bixisay, oo ku bogsan weyday, midna xaggiisa.” Luukos 8:43
- Ugu dambaysta waxaan odhan karnaa silaca jidhka waxaa sababaa ama sababi karaa shaydaanka.
“Oo isagu wuxuu soo koriyey Hadasaah, taasoo ahayd ina-adeertiis Esteer, waayo, iyadu aabbe iyo hooyo toona ma ay lahayn; oo markii aabbahayd iyo hooyadeed dhinteen ayaa Mordekay qaatay oo sidii gabadhiisii ka dhigtay.” (Ayuub 2:7) Luukos 13:16 waxaa qoran sida tan, “Oo naagtan oo ina Ibraahim ah oo Shaydaanku siddeed iyo toban sannadood xidhay, miyaanay lahayn in maalinta sabtida ah laga fura xidhmadaas?”
b) Silaca laga silco xagga caqliga – silaca xagga caqliga laga silco oo ay weliba si kasta oo ay noqotaba ugu dhibaatada badan tan jidhka wuxuu ku imaani karaa waxyaalaha sida:
- Fikirka uu qofka waxyaabo fara badan ka fikirayo oo ka dhigayso qofka inuu ka liito xagga caqliga oo Kitaabka qoduuska ahna way ku jirta waayo, waxaan ka akhrinaynaa aayadaha ay ka mid yihiin, “Oo waxaan idinkula joogay itaaldarro, iyo cabsi, iyo gariir badan.” 1 Korintos 2:3aad “Laakiin sida uu Ilaah aamin u yahay, hadalkayagu xaggiinna ma aha, Haah, iyo Maya.” (2 Korintos 1:18) “Waayo, dhib badan iyo silica qalbiga ayaan idinku soo qoray anigoo aad u ilmaynaya, oo ma aha inaad calool xumaataan, laakiin inaad garataan jacaylka aad u sii badan ee aan idiin qabo.” (2 Korintos 2:4,13) “Waayo, markaan Makedoniya nimid jidhkayagu ma nasan, laakiin wax kasta waannu ku dhibtoonnay. Xagga dibadda waxaa jiray dagaallo, xagga gudahana waxaa jirtay cabsi.” 2 Korintos 7:5aad
c) Silaca laga helo xagga xiriirka Ilaah lala leeyahay – silcinta noocan ah waxay ka imaani kartaa:
- Xagga dunida - “Dunida iyo waxyaalaha dunida ku jira toona ha jeclaanina. Qof uun hadduu dunida jeclaado, jacaylka Aabbuhu kuma jiro isaga. Maxaa yeelay, waxa dunida ku jira oo dhan oo ah damaca jidhka, iyo damaca indhaha, iyo faanka nolosha, xagga Aabbaha kama yimaadaan ee waxay ka yimaadaan xagga dunida. Oo dunidu way idlaanaysaa, iyo damcaceeduba; laakiin kan doonista Ilaah yeelaa wuu jirayaa weligiisba.” 1 Yooxanaa 2:15-17
- Wuxuu ka imaani karaa xagga jidhka - “Waayo, waan ogahay inaan wax wanaagsanu igu dhex jirin, taas waxaan ula jeedaa, jidhkayga wax wanaagsanu kuma jiraan, waayo, waan ku tala jiraa inaan waxa wanaagsan sameeyo, laakiin ma sameeyo, laakiinse waxa sharka ah oo aanan doonayn inaan falo, ayaan sameeyaa. Laakiin haddaan sameeyo wixii aanan doonayn inaan falo, de haatan ma aha aniga kan sameeya, laakiinse waa dembiga igu dhex jira. Haddee waxaan arkaa qaynuunka in shar ila jiro in kastoo aan doonayo inaan waxa wanaagsan sameeyo. Waayo, sharciga Ilaah ayaan kaga farxaa ninka gudaha ah. Laakiin waxaan xubnahayga ka arkaa qaynuun kale, isagoo la dagaallamaya qaynunka maankayga oo maxbuus iiga dhigaya qaynuunka dembiga oo xubnahayga ku jira. Nin belaysan baan ahay. Yaa iga furan doona jidhkan dhimashada leh?” Rooma 7:18-24aad
- Laakiin inta badan wuxuu ka imaani karaa xagga shaydaanka maxaa yeelay, isagu weligiisba kuma uusan fikirin inuu wax wanaagsan ku tillaabo qaado waayo, xaata waxyaalaha uu Ilaah wanaag ugu tallagalay isagu wuxuu doonaya inuu maroojiyo si uu baniaadmiga xumaan uga dhaadhiciyo. Nolosha Ayuub ayaan tusaalahan ka heli karnaa.
Maxay tahay sababta loo silcayo?’ Ayuub 2:7 wuxuu leeyahay, “Markaasaa Shaydaan Rabbiga hortiisa ka tegey, oo wuxuu Ayuub tin iyo cidhib ku dhuftay boogo xunxun.” Waxaa laga yaabaa in su’aasha ugu weyn ee ay rumaystayaasha weydiyaan ay tahay, ‘maxay tahay sababta loo silcayo?’
Waa maxay sababta uu Ilaaha jacaylka badan uu fursad u bixinayo inay carruurtiisa silcaan?
Sababta uu Ilaah u fasaxayo inay rumaystayaasha isaga aaminsan u silcaan waxaa ka mid ah, wuxuu doonaya inay rumaystayaasha dhalaan midh wanaagsan. Haddii aan isku deyno inuu silaca dantiisa bogto runtii waxay keenaysaa adkaysi badan oo aan u adkaysani karno wax alla wixii nala soo gudboonaado oo dhib ah taa oo aan ka akhrinayno Cibraaniyada 10:36aad waxayna leedahay sida tan, “Waayo, waxaad dulqaadasho ugu baahan tihiin si aad u qaadataan wixii laydiin ballan qaaday markaad doonista Ilaah samaysaan dabadeed.” Aayad kalena waxay dhigaysaa sida tan, “Walaalayalow, kolkaad jirrabaaddo kala cayncayn ah kala kulantaan , kulli farxad u tirsada, idinkoo og tijaabinta rumaysadkiinnu inay dulqaadasho keento.” (Yacquub 1:2-3)
Inkastoo aan silcid weyn na soo gaartay sida aan uga akhrinayno Sabuurrada 30:5 oo dhigan sida tan, “Waayo, cadhadiisu waa mid daqiiqad keliya, laakiinse raallinimadiisu waa cimriga, habeenka waxaa jirta oohin, laakiinse aroorta farxad baa timaada. Aayad kalena waxay leedahay sida tan iyaduna taa oo aan ka akhrinayno 126:6, “Kii iska taga isagoo ooyaya oo abuurkiisa sita, wuxuu soo noqon doonaa isagoo faraxsan oo xidhmooyinkiisa sita.” Haddana waxaa jirtaa in wax garad dheeraad ah oo jarabaadda nooga imanayso xagga silaca taa oo aan ka akhrinayno Sabuurrada 94:12-15 taa oo dhigan sidanayto, “Rabbiyow, waxaa barakadaysan ninkii aad edbiso, oo aad sharcigaaga wax ka barto, si aad uga nasiso maalmaha belaayada inta kan sharka lahaa godka loo qodayo. Waayo, Rabbigu dadkiisa xoori maayo, oo dhaxalkiisana dayrin maayo. Waayo, garsooriddu waxay ku soo noqon doontaa xaqnimada, oo inta qalbigoodu qumman yahay oo dhammuna way raaci doonaan.” Weliba silaca waan ku barbaaraynaa haddii aan ku sii adkaysano doonista Ilaah in kastoo aan silcayno. Erayga Ilaah wuxuu leeyahay sida tan, “Haddaba Ilaaha leh nimcada oo dhan oo idiinku yeedhay amaantiisa daa’imkaa oo Masiixa ku jirta, markii aad in yar xanuunsataan ka dib isagu wuu idin kaamili doonaa, oo idin adkayn doonaa, oo idin xoogayn doonaa.” (1 Butros 5:10)
Ilaah wuxuu doonaya inuu Shaydaanka ku cebeyo markuu fasaxayo inay kuwa isaga rumaysan silcayaan waayo, wuxuu ogyahay inuusan ku sii deyn doonin in Shaydaanka uu dadkiisa ka adkaado oo wuu xoojinayaa iyaga si aanay xaggisa u gudbin oo ay u noqoto in isaga uu ceboobo uu u arko inuusan ka tabar badnayn Ilaah. Mar waxaa jirtay uu Shaydaanka inuu Ilaah u tegey uu Ayuub ku edeeyey oo wuxuu Ilaah ku yidhi Ayuub wuxuu uun kuu addeecsanyahay sababta oo ah waxaad siisay wax alla wuxuu dunida uga baahnaa oo dhan. Laakiin Ilaah wuxuu Shaydaanka u ogolaaday inuu Ayuub siduu doono yeelo si un ugu cadeyo in Ayuub uu Ilaah u addeecsanaa Ilaah kan uu yahay daraaddeed laakiin aysan ahayn waxa uu Ilaah ka helay daraaddeed sida maalka dunida loogu istareexayoo weliba ma ahan wuxuu Ilaah ka heli lahaa hadduu adeeco. Erayga Ilaah ayaa tan xoojinaya markuu leeyahay, “Markaasaa Shaydaan Rabbiga u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, bal Ayuub ma waxtarla’aan buu Ilaah uga cabsadaa? Sow deyr kuma aad wareejin isaga, iyo reerkiisa, iyo waxa uu haysto oo dhanba? Shuqulkii gacmahiisaad barakadaysay, oo xoolihiisiina dhulkay aad ugu bateen. Laakiinse haddaba bal gacantaada soo fidi, oo wuxuu haysto oo dhan taabo, oo isna sida runta ah, hortaada wax xun buu kaaga sheegi doonaa. Markaasa Rabbigu wuxuu Shaydaanka ku yidhi, bal eeg, wuxuu haysto oo dhammu gacantaaday ku jiraan, laakiinse isaga nafsaddiisa waa inaadan far saarin. Markaasaa Shaydaanka Rabbiga hortiisii ka tegey.” (Ayuub 1:9-12)
Ayuub 2:3-7 waxaa qoran sida tan, “Markaasaa Rabbigu wuxuu Shaydaanka ku yidhi, addoonkayga Ayuub ma ka fikirtay? Maxaa yeelay, isaga oo kale dhulka m ajoogo, waayo, isagu waa nin qumman oo toosan, oo ah mid Ilaah ka cabsada oo sharka k afogaada. Oo weliba isagu daacadnimadiisii wuu sii haystaa, in kastoo aad igu dirtay, si aan isaga sababla’aan ugu halligo. Markaasaa Shaydaanka wuxuu Rabbiga ugu jawaabay, Haragba harag baa loo baxshaa, oo nin wuxuu haysto oo dhan ayuu naftiisa u baxshaa. Laakiinse bal haatan gacantaada soo fidi, oo lafihiisa iyo jidhkisa taabo, oo isna markaasuu hortaada wax xun kaaga sheegi doonaa. Markaasaa Rabbigu wuxuu Shaydaanka ku yidhi, bal eeg, gacantaaduu ku jiraa, waxaadse u daysaa naftiisa. Markaasaa Shaydaanka Rabbiga hortiisii ka tegey, oo wuxuu Ayuub tin iyo cidhib ku dhuftay boogo xunxun.”
Ilaah wuxuu silcinta ugu ogolaanayaa shaydaanka inuu rumaystayaasha silciyo si uu u sii amaanaado weligiiba waayo, isagu waa Ilaah wuxuuna ka awood badan yahay wax kasta oo dunida ku nool oo dhan taana waa mid uu baniaadmi kasta oo Ilaah ka baqaya aan looga sheekeyneynin waayo, wuu og yahay dhabta Ilaah iyo kan uu yahayba waxaana ka akhrin karnaa tan iida ah Yooxanaa 9:1-3 waxaana qoran, “Ciise intuu socday, wuxuu arkay nin indhala’aan ku dhashay. Xertiisu waxay weydiyeen oo ku yidhaahdeen, macallimow, yaa dembaabay, ma kan baa mise waa waalidkiis, inuu indhala’aan ku dhasho? Ciise ayaa u jawaabay, ninkan iyo waalidkiis midna ma dembaabin, laakiin waa in shuqullada Ilaah lagu muujiyo isaga.” “Waxaa jiray nin buka oo ah Laasaro reer Beytaniya ee joogay tuulada Maryan iyo walaasheed Maarta. Maryantaasu waxay ahayd tii Rabbiga cadar marisay oo cagihiisa timaheeda ku tirtirtay, oo walaalkeed Laasaros bukay. Sidaa aawadeed walaalihii farriin bay Rabbiga u direen iyagoo leh, Sayidow, ogow, kii aad jeclayd waa bukaa e. Laakiin Ciise markuu taas maqlay wuxuu yidhi, Bukaankanu kan dhimashada ma ahaa, laakiin ammaanta Ilaah aawadeed in Wiilka Ilaah lagu ammaano.” (Yooxanaa 11:1-4) Ilaah wuxuu doonayaa inaan Ciise Masiix u ekaano maxaa yeelay, hadduu silec na gaaray runtii nama gaarin mid ka weyn kan Ciise Masiix gaaray oo isla sida uu uga guulaystay ayaan annaga isaga rumaysan uga guurlaysan doonaa oo sidaa daraaddeed isagaan u ekaanaynaa. In kastoo silaca geeri na gaarsiyo waxaan hubnaa inaan geeriduba ka xoog badin doono maxaa yeelay, kan aan adeecayno oo aan doonayno inaan u ekaano ayaa ka sarakacay geerida. Erayga Ilaah ayaa dhigaya, “Inaan ogaado isaga iyo xoogga sarakiciddiisa iyo wadawadaagidda xanuunsigiisa, anigoo isaga xagga dhimashadiisa ugu ekaanaya.” (Filiboy 3:10)
Silaca wuxuu noogu yimaadaa si aan u ogaano inaan Ilaah la’aantis aan waxba samayn karin oo ay jirin wakhti haba yaraatee aan la’aantis ahaani karno meel alaate meesha aan joognaba maxaa yeelay, isagu wuxuu noo uumay inaan isaga caabudno oo aan weliba isaga uun adeecno nolosheena oo dhanba, waayo, xaata nolosha aan hadhow markay dunida dhamaato aan filanayno waa mid ay waajib nagu tahay inaan bilawno intaan noolnahay. Sidaa daraaddeed Ilaah la’aantis waa geeri taa oo aan ka akhrin karno 2 Korintos 12:1-10 waxayna dhigaysaa sida tan, “Waa inaan faano in kastoo aanay waxtar lahayn, laakiin waxaan gaadhi doonaa riyooyin iyo waxa Rabbigu muujiyo. Waxaan garanayaa nin Masiix ku jira oo afar iyo toban sannadood ka hor kor loo qaaday ilaa samada saddexaad. Inuu jidhka ku jiray iyo inaanu jidhka ku jirin garan maayo, Ilaah baase garan. Oo waxaan garanayaa ninkaas, laakiin inuu jidhka ku jiray iyo inaanu jidhka ku jirin garan maayo, Ilaah baase garan. Isaga kor baa loogu qaaday Firdooska, oo wuxuu maqla erayo aan lagu hadlin oo aan nin loo idmin inuu ku hadlo. Kaasoo kale xaggiisa waan ku faani doonaa, laakiin xaggayga kuma faani doono, itaaldarradayda mooyaane. Waayo, haddaan dooni lahaa inaan faano, doqon ma ahaan doono, waayo, runtaan ku hadli doonaa; laakiin waan iska celiyaa inaanu qofna ii malayn mid ka weyn wuxuu igu arko ama iga maqlo.
Inaanan isu sarrayysiin waxyaalaha lay muujiyey weynaantooda dheer aawadee, waxaa lay siiyey wax jidhkayga muda oo ah mid Shaydaan uu soo diray inuu I kadeedo, si aanan isu sarraysiin. Waxaas aawadiis saddex goor ayaaan Rabbiga ka baryay in waxaasi iga fogaado. Oo isagu wuxuu igu yidhi, Nimcadaydu way kugu filan tahay; maxaa yeelay, xooggaygu wuu ku dhan yahay itaaldarrada. Sidaa aawadeed anigoo faraxsan ayaan ku faanayaa itaaldarrooyinkayga in xoogga Masiixu igu soo dego. Sidaas aawadeed waxaan ku farxaa itaaldarrooyin iyo hadallo cay ah iyo baahiyo iyo silecyo iyo dhibaatooyin Masiix aawadiis, waayo, markaan itaal daranahay, ayaan xoog badanahay.” Ilaah wuxuu doonaya in nolosha rumaystayaasha ay u noqoto mid dhab ah markay ka gulaystaan jarabaadda silaca sida. “Waayo, Ilaahow, adigu waad na intixaantay, oo waxaad noo tijaabisay sida lacagta loo tijaabiyo. Waxaad na gelisay shabagga dabinka ah, oo waxaad simaha naga saartay culaab weyn. Dad baad madaxa naga saarta, oo waxaannu dhex galnay dab iyo biyo, laakiinse ugudambaysta waxaad na keentay meel barwaaqo ah.” (Sabuurrada 66:10-12). Maahmaahyada 17:3aadna waxay leedahay sida tan, “Weelka lacagta lagu safeeyo lacagtaa iska leh, oo foornadana dahabkaa iska leh, laakiinse Rabbigu qalbiyaduu imtixaamaa.”
1 Butros 1:6-7 oo leh sida tan, “Taas waad ku faraxsan tihiin in kastoo, haddii ay waajib tahay, aad haatan wakhti yar ku murugootaan jirrabaaddo badan oo kala cayncayn ah. Waa in la tijaabiyo rumaysadkiinna, oo aad uga sii qaalisan dahabka oo ah wax baaba’a in kastoo dadb lagu tijaabiyo. Markaasaa laga helayaa mahad iyo ammaan iyo ciso markii Ciise Masiix la muujiyo.” Ilaah wuxuu doonaya inuu dembiyadeena noo cadeyo si aan u ahaano kuwa mar kastaba ka toobad keenaan gef kooda mar alla markay fahmaan inay Ilaah ka dembaabeen oo ku dadaalaan wanaagga mar kastaba. “Markii aad dembaabtaan, oo laydiin garaaco, haddii aad u dulqaadataan, maxay ammaan leedahay? Laakiinse markaad wanaag fashaan oo aad xanuunsataan, haddii aad u dulqaadataan, taasu waa wax Ilaah u bogo.” (1 Butros 2:20) 1 Butros 3:17 waxaa qoran sida tan, “Waayo, haddii ay doonista Ilaah tahay, waxaa ka wanaagsan inaad samafalidda u xanuunsataan intii aad u xanuunsan lahaydeen sharfalidda.”
Waxaan Ilaah ka baryaya inuu naga dhigo kuwa wanaagga iyo doonistiisa ku xanuunsadaan laakiin aan sharka ku xanuunsanin. Waa sida uu aabbaha dunida carruurtiisa u edbiyo si ay u ogaadaan waxyaabaha qaladka ah si ay mar dambe ugu dhaqmin oo Ilaahna sidaa buu nagu samaynayaa isagoo ah Aabbahayna janada ku jira sida aanba uga akhrinayno Cibraaniyada 12:5-9 oo sida tan u dhigan,
“Waxaad illowdeen waanada idiinla hadasha sida wiilal oo kale. Wiilkeygiyow, ha fududaysan Rabbiga edbintiisa, hana itaal beelin kolkuu ku canaanto. Waayo, ka uu Rabbigu jecel yahay ayuu edbiyaa, wuuna karbaashaa wiil kasta oo uu aqbalo. U adkaysta edbinta. Ilaah wuxuu idiinla macaamiloodaa sida wiilal oo kale; waayo, waa wiilkee kan aanu aabbihii edbin? Laakiin haddaan laydinku edbin edbinta laga wada qayb galo, haddaba waxaad tihiin garacyo, oo wiilashiisii ma ihidin. Oo weliba waxaynu lahayn aabbayaal xagga jidhka ah, oo ina edbiyey, oo waynu maamuusnay. Miyeynaan intaas in ka badan ka dambaynayn Aabbaha ruuxyada oo aynaan noolaannayn? Ilaah wuxuu naga doonaya inaan hooshiisa dad badan sii gaarsino waayo Rabbigeena Ciise Masiix markuu dunida kaga ambabaxayay jidh ahaan erayada ugu dambayeen waxay ahayeen, “Haddaba taga, oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga, oo ku baabtiisa magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Qoduuskaa, oo bara inay dhawraan wax walba oo aan idinku amray, oo bal eega had iyo goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado.” (Matayos 28:19-20) Haddii aan ka sii akhrino 2 Korintos 1:3-7 waxaa qoraysa, “Waxaa baraka leh Ilaaha ah Aabbaha Rabbigeena Ciise Masiix, oo ah Aabbaha naxariista leh iyo Ilaaha gargaarka oo dhan, kan naga gargaara dhibtayada oo dhan inaannu kuwa dhib kasta ku jira ugu gargaari karno gargaarka Ilaah nagu gargaaray. Waayo, sida xanuunsigii Masiixu uu noogu badan yahay, sidaas oo kalena gargaarkayagu xagga Masiix wuu noogu badan yahay. Haddii lana dhibo waa gargaarkiinna iyo badbaadintiinna aawadood; haddii lana gargaarona waa gargaarkiinna aawadiis kaasoo yeesha dulqaadashada aannu ku dulqaadanno isku xanuunsiga aannu annaguna ku xanuunsanno. Oo rajadayada aannu idiin qabnaa waa hubaal, annagoo garanayna inaad tihiin kuwo xanuunsiga qayb ku leh, sidaas oo kalena waxaad tihiin kuwo gargaarka qayb ku leh.”
4. SIDA SILACA LOOLA MACAAMILOODO
Ayuub 1:21 waxaa qoran, “oo wuxuu yidhi anigoo qaawan baan uurkii hooyaday ka soo baxay, oo haddana anigoo qaawan baan halkaas ku noqon doonaa. Rabbigaa wax I siiyey, oo haddana Rabbiga ayaa iga qaatay, ammaan waxaa leh magaca Rabbiga.” Qofka rumaysadka leh markuu silcayo waa inuu horta oo dhan is weydiyaa su’aasha ah, ‘waa maxay sababta aan u silcayo?’ Qofka wuxuu u silci karaa sabab uu iisu geystay sida aan uga akhrinayno 1 Butros 2:18-19 oo leh sida tan, Midiidinyadow, ka cabsada oo ka dambeeya sayiyadiinna, mana aha kuwa wanaagsan oo idiin roon oo keliya, laakiinse xataa kuwa qalloocan. Waayo, tanu waa wax loo bogo haddii nin niyada xagga Ilaah uga adkaysto dhibaatooyinka, isagoo xaqdarro ku xanuunsanaya.” Silaca waa laba nooc waana muhim inaan tan ogaano dabadeedna waxaan eegeyna sida loola dhaqmi lahaa silaca waayo, wax aadan garanaynin nooca ay yihiin kama hor tegi kartid labadana waxaa ka mid ah,
i. Waxay noqon kartaa mid uu Ilaah raali ka yahay oo uu doonayo inuu jidka saxda ah nagu toosiyo taa oo aan ka akhrin karno Bilowgii 22:1,2,15-18 waxaana qoran sida tan, “Oo waxaa dhacay waxyaalahas ka dib, in Ilaah tijaabiyey Ibraahim, oo uu ku yidhi, Ibraahimow. Isna wuxuu yidhi, waa I kan . Markaasuu ku yidhi, Hadda kaxee wiilkaaga keligiis ah, kan aad jeceshahay, oo ah Isxaaq, oo u kac dalka Moriyaah; oo halkaas isaga sida allabari la gubo ku dul bixi buuraha middood oo aan kuu sheegi doono…Kolkaasaa mar labaad malaa’igtii Rabbigu Ibraahim samada uga yeedhay, oo waxay ku tidhi, Rabbigu wuxuu yidhi, waxan aad samaysay aawadood, iyo wiilkaaga aadan iga lexejeclaysan, kaas oo ah wiilkaaga keligiis ah aawadiis ayaan nafsaddayda ku dhaartay inaan barako ku barakadayn doono, oo aan farcankaa u tarmin doono sida xiddigaha cirka, iyo sida cammuudda taal badda xeebteeda; oo uu farcnkaaguna hantiyi doono cadaawayaashiisa iriddooda; oo ay quruumaha dunida oo dhammu ku barakoobi doonaan farcankaaga, maxaa yeelay, codkaygaad addeecday.” Cibraaniyada 11:17 waxayna leedahay sida tan, “Ibraahim kolkii la jirrabay, rumaysad buu Isxaaq allbari ahaan ugu bixiyey. Kii ballamada aqbalay ayaa wuxuu bixinayay wiilkiisii keliyaha, in kastoo lagu yidhi, kuwa Isxaaq ka farcama ayaa farcankaaga loogu yeedhi doonaa.” Ilaah wuxuu doonaya inaan isaga siino ama aan isaga daraaddiis u gefno waxa aan dunida ugu jacaylnahay oo dhan isla sida uu Ibraahim oo aan weligiis dhalin cunug xalaal ah lagu jirrabay inuu kii uu dhalay allabari u bixiyo. Ilaah wuxuu naga doonaya nolosha noocaas ah oo aan Ilaah daraaddiis wax kasta u beeleyno. Haddana waa inaan ogaano inay tahay jirrabaadda Ilaah inuu ogaado inaan runtii isaga wax kasta ka jacaylnahay iyo in kale waana su’aal u taalo baniaadmi kasta.
ii. Midda labaad waxay noqon kartaa isla silacaas inuu Shaydaanka doonayo in uu xumaan nooga dhaliyo sida aan uga akhrinayno Yaquub 1:13-14 oo dhigan sida tan, “midna yuu odhanin kolkii la jirrabo, xagga Ilaah baa layga jirrabay. Waayo, Ilaah laguma jirrabo shar, isaguna midna ma jirrabo. Mid kasta waxaa jarraba damaciisa sharka ah isagoo la jiidanayo oo la sasabayo.” Ugu dambaysta waxaan arkaynaa saddex hab uu qofka rumaysadka leh kula macaamilmi karo silaca taa oo ay ka mid yihiin,
i. Yarayso oo ula dhaqan sida ugu daran sida uu Esau ula dhaqmay sida aan uga akhrinayno Cibraaniyada 12:5, 6 waxaana dhigan sida tan, “Sidaas oo kale Masiixu isma amaanin inuu noqdo wadaad sare, laakiin waxaa doortay kan ku yidhi, Adigu waxaad tahay wiilkayga, maantaan ku dhalay. Meel kalena wuxuu ka yidhi, Adigu weligaaba wadaad baad tahay sidii derejadii malkisadaq.”
ii. Ku hoos suux silaca oo si daran iskiiga xaji isla sida aan uga akhrinay Cibraaniyada 12:5aad.
iii. Silaca ha kuugu ciyaaro oo siduu kula rabo raac. Tan ayaa ah habka uu Ilaah uga baahanyahay rumaystayaasha waana waxa uu erayga Ilaah noo faraya. Cibraaniyada 12:11-13 ayaa tan sheegeysa waayo waxaa qoran, “Waxaanu haysanna waxyaalo badan oo aannu kaga hadalno, laakiin waa fasir adag yahay dhegaculayskiinna aawadiis. Wakhtigii aad macallimmo noqon lahaydeen ayaad haddana u baahan tihiin in laydin baro waxyaalaha ugu horreeya ee hadallada Ilaah, oo waxaad noqoteen sidii kuwa caano u baahan ee aan cunto adag u baahnayn.”
Wakhtiyadaan daran markay nala soo gudboonadaan Butros iyo Bawlos waxay Qoraalka noogala talinayaan inaan xanuunkeena iyo silacaba aan ula jeesano oo ma ahan inaan isku deyno inaan la xarbino waayo, ma awoodno laakiin waa inaan ogaano kan awoodda leh inuu yahay Ilaah keliya Rooma 8:28 waxaa qoran, “oo waxaanu og nahay in wax waliba ay wanaag ugu wada shayqayaan kuwa Ilaah jecel, xataa kuwa qasdigiisa loogu yeedhay.” Haddana isla arintaan waxaan Butroska kowaad 4:19 ka akhrinaynaa inuu na leeyahay, “sidaas daraaddeed kuwa doonista Ilaah u xunuunsada, iyagoo sama falaya, naftooda ammaano ha ugu dhiibeen Abuuraha aaminka ah.” Kitaabka wuxuu noo sheegaya in marxaladdas aan ku tirino farxad sida ku dhigan Yaaquub 1:2 oo leh sida tan, “walaalahayow, kolkaad jirrabaaddo kala caycayn ah kala kulantaan, kulli farxad u tirsada…” Silac intee la eg ayaa kaa dhigi karaa mid Ilaah ku caasiyo? Ayuub 2:3, 9 iyo 10 waxaa qoran sida tan, “Markaasaa Rabbigu wuxuu shaydaan ku yidhi, Addoonkayga Ayuub ma ka fikiratay? Maxaa yeelay, isaga oo kale dhulka ma joogo, waayo, isagu waa nin qumman oo toosan, oo ah mid Ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada. Oo weliba isagu daacadnimadiisii wuu sii haystaa, in kastoo aad igu dirtay, si aan isaga sababla’aan ugu halligo. Markaasaa naagtiisii waxay ku tidhi, war ma weli baad daacadnimadaadii sii haysanaysaa? War hoy, Ilaah wax xun ka sheeg, oo iska dhimo. Laakiinse wuxuu iyadii ku yidhi, waxaad u hadlaysaa sida naagaha nacaysyada ah middood. Naa waa sidee? Ilaah gacantiisa intaynu samaan ka qaadanno, miyaynaan xumaanna ka qaadanayn? Oo in kastoo waxyaalahaas oo dhammu ay ku dheceen Ayuub innaba afkiisa kuma dembaabin.” Waa maxay waxa ka weyn tan Ayuub qabsatay oo maanta kaa dhigi kartaa inaad Ilaah ka danaysatid?
5. TUSAALOOYINKA SILACA
Yeremyaah 37:15 oo leh sida tan, “Amiradiina Yeremyaah bay u cadhoodeen, oo intay garaaceen ayay gurigii Yoonaataan oo karaanigii ahaa ku xabbiseen, waayo, kaasay xabsi ka dhigeen.” Erayga Ilaah wuxuu noo sheegaya afar tusaalo oo ku saabsan rumaystayaasha u silcay daacadnimada ay Ilaah hortiisa kula noolayeen augeed. Waxaana ka mid ah Yuusuf, Ayuub, Yeremyaah iyo Bawlos. Bal aan hal hal u eegno sida uu midkood kasta u silcay anagoo soo koobayno marxaladda ay mareen afartaan nin:
i. Silicii uu Yuusuf silcay
– Waxay ku dhacday walaalihiis oo isaga la dhasheen oo isaga nacay sida ku dhigan Bilowgii 37:4,5,8 waxaana dhigan sidan, “Markaasaa walaalihiis arkeen in aabbahood ka jecelyahay isaga walaalihiis oo dhan; kolkaasay nebcaadeen isagii, wayna kari waayeen inay isaga si nabad ah ula hadlaan. Yuusufna wuu riyooday, markaasuu riyadiisii u sheegay walaalihiis, iyana aad bay u sii nebcaadeen…Markaasaa walaalihiis ku yidhaahdeen, ma annagaad na xukumi doontaa? Amase noo talin doontaa? Markaasay aad iyo aad ugu sii nebcaadeen riyooyinkiisii iyo hadalladiisii aawadood.”
– Waxay ka gadeen kuwa addoomaha iibsanayaan taa oo aan ka akhrin karno Bilowgii 37:28aad waxaana qoran sida tan, “Oo waxaa ag maray niman reer Midyaan ah, oo baayacmushtariyaal ah. Markaasay Yuusuf soo jiideen oo ceelkii ka soo bixiyeen, oo waxay Yuusuf kuwii reer Ismaaciil kaga iibiyeen labaatan xabbadood oo lacag ah. Oo iyana Yuusuf waxay keeneen Masar.”
– Aad baa jarrabaad loo geliyey Yuusuf taa oo aan iyaduna ka akhrin karno isla Bilowgaas 39:7aad waxaana qoran sida tan, “Oo waxay noqotay waxyaalahaas ka dib in naagtii sayidkiisu ay fiirisay Yuusuf, oo ay ku tidhi, kaalay ila jiifso.”
Bal ka waran adigoo laguugu qabtay naagta sayidkaaga iyadoo aad la sinaysanaysid dhimasho mooyaane wax kaleba uma dhinayn Yuusuf sida aan u malaynaya oo mid jarrabaadda ka xun ma jiri lahayn.
– Oo Yuusuf waa la xabisay maxaa yeelay, naagtii ayaa ku nabtay inuu la saxday. Bilowgii 39:20 ayaan ka akhrinaynaa sida tan, “Markaasaa Yuusuf sayidkiisii qabtay isagii, oo wuxuu geliyey xabsigii ahaa meeshii maxaabiista boqorku ku xidhnaayeen; oo isna halkaasuu ku jiray xabsigii gudihiisa.” Yuusuf cil uma dhinayn maxaa yeelay, naagta ayaa ku nabtay mooyaane wax uu samayey oo uu u mutay inuu xabsi galo ma jirin. Tan waa mid maanta qabsan kartaa qof kasta maxaa yeelay, haddii runta ama ka cabsashada dembiga daraaddiis laguu dilayo waxaa laguu qaatay in lagu dilo bedelkii aad dembaabi lahayd. Dadka dunidan waxay dilayaan oo keliya ama ay silcinayaan jidhkeena laakiin xagga ruuxa waxba kama bedeli karaan maxaa yeelay, erayga Ilaah ayaa noo sheegaya oo wuxuu leeyahay, “Ha ka baqina kuwa jidhka dila, laakiin aan karin inay nafta dilaan, waxaadse ka baqdaan kan jahannamada ku hallayn kara nafta iyo jidhkaba.” Matayos 10:28aad
ii. Silaca Ayuub
- Dad iyo duunyaba wuxuu lahaa oo dhan way baaba’een sida aan dhabta arinta uga akhrin karno Ayuub 1:14,15 oo dhigayso sida tan, “Waxaa Ayuub u yimid mid wargeeye ah oo wuxuu ku yidhi, iyadoo dibidii ay beerta jeexayaan oo dameerihiina ay agtooda daaqayaan ayaa waxaa na soo wareeray reer Shebaa, oo waxay dheceen xoolihii, oo weliba midiidinnadiina seef bay ku laayeen, oo anigoo keliya ayaa ka soo baxsaday inaan warka kuu soo sheego.”
- Idahiisi iyo kuwii dhaqaalaynayeen oo dhan dab baa wada gubay sida ku qoran Ayuub 1:16 waxayna leedahay sida tan, “Oo weliba intii kaasu sii hadlayay ayuu mid kale yimid, oo wuxuu yidhi, Ilaah dabkiisii ayaa samada ka soo dhacay, oo wuxuu wada gubay oo baabiiyey idihii iyo midiidinnadii la jirayba, oo anigoo keliya ayaa ka soo baxsaday inaan warka kuu soo sheego.”
- Geelisa waa la xaday oo kuwii lajirayna waa lawada dilay sida ku dhigan Ayuub 1:17 waxayna leedahay sida tan, “Oo weliba intii kaasu sii hadlayay ayuu mid kale yimid, oo wuxuu yidhi, Reer Kaldayiiin oo saddex koox ah ayaa geeli soo weeraray, oo dhammaantiisna way dheceen, oo weliba midiidinnadiina seef bay ku laayeen, oo anigoo keliya ayaa ka soo baxsaday inaan warka kuu soo sheego.”
- Wiilashiisa iyo gabdhahiisa waxay ku dhinteen duufaan xoog leh sida ku dhigan Ayuub 1:18,19 waxayna leedahay sida tan, “Oo weliba intii kaas sii hadlayay ayuu mid kale yimid, oo wuxuu yidhi, wiilashaadii iyo gabdhahaadgii waxay wax ku cunayeen oo khamri ku cabbayeen gurigii walaalkooda ugu weyn, oo bal eeg, waxaa cidlada ka timid dabayl weyn, oo gurigii afrtiisa rukun bay ku dhufatay, kokaasuu ku dumay raggii dhallinyarada ahaa, oo dhammaantood way dhinteen, anigoo keliya ayaa ka soo baxsaday inaan warka kuu soo sheego.”
- Ugu dambaystiina isaguna ma uusan badbaadin oo jidhkiisa oo dhan waxaa ka soo baxay boogo xunxun oo xanuun badan sida ku dhigan Kitaabka qoduuska ah qaas ahaan Ayuub 2:7aad waxayna leedahay sida tan, “Markaasaa Shaydaanka Rabbiga hortiisa ka tegay, oo wuxuu Ayuub tin iyo cidhib ku dhuftay boogo xunxun.”
iii. Silaca Yeremyaah
- Kuwii uu dhalay uun baa isaga silciyeen oo munaafaqnimo u galeen isaga maxaa yeelay, Kitaabka waxaan ka akhrinaynaa haddii aan qaasatan akhrino Yeremyaah 12:6aad waxaana qoran sida tan,
“Waayo, xataa walaalaha iyo reerkii aabbahaaba khiyaano bay kugula macaamiloodeen, oo weliba aad bay kaaga soo daba qayliyeen. In kastoo ay erayo wanaagsan kugula hadlaan, ha rumaysan.”
- Arinta waxay gaartay heer ay magaaladiisi isaga shirqool u dhigtay sida aan erayada Kitaabka uga akhrinayno qaas ahaan Yeremyaah 11: 18-23aad waxaana qoran sida tan, “Oo Rabbigu taas wuu I ogaysiyey, waanan ogaaday, markaasaad falimahooda I tustay. Laakiinse anigu waxaan la mid ahaa neef baraar ah oo loo soo kexeeyo in la gowraco, oo mana aan ogayn inay sirqool ii hindiseen, oo ay yidhaahdeen, Geedka iyo midhihiisaba aynu wada baabi’inno, oo aynu isaga ka gooyno dadlka kuwa nool, si aan magiciisa mar dambe loo soo xusuusan. Laakiinse Rabbiga ciddammadow, adigoo si caddaalad ah wax u xukumow, oo kelyaha iyo qalbigaba intixaamow, haddaba bal aargoosashadaada iyaga ku kor dhacaysa aan arekee, waayo, dacwadaydii adigaan ku soo ban dhigay. Sidaas daraaddeed Rabbigu wuxuu ka leeyahay dadka Canaatoot oo doondoonaya inay naftaada kaa qaadaan, oo kugu yidhaahda, Yaadan gacantayada ku dhimanine Rabbiga magiciisa waxba ha ku sii sheegin, Rabbiga ciidammadu wuxuu leeeyahay, Bal ogow, Iyagaan ciqaabi doonaa. Barbaarradu seef bay ku dhiman doonaan, oo wiilashooda iyo gabdhahooduba abaar bay ku dhiman doonaan. Oo innaba iyaga midna kama hadhi doono, waayo, dadka Canaatoot masiibaan ku soo dayn doonaa sannadda ciqaabiddooda.”
- Kuwii ay diinta iskula jireen baa isaga ka soo hor jeestay maxaa yeelay, ma ay ogoleen sida uu Ilaah u caabudayay sida aan erayga Ilaah uga akhrinayno Kitaabka qoduuska ah qaasatan Yeremyaah 20:1-3, 7-9aad waxaana qoran sida tan, “Haddaba Fashxuur ina Immeer oo ahaa wadaadkii iyo taliyihii sare ee guriga Rabbiga ayaa maqlay Yeremyaah oo waxyaalahaas sii sheeegaya. Markaasaa Fashxuur garaacay Yeremyaah, oo wuxuu geliyey jeebbooyinkii ku yiil iridda sare oo reer Benyaamiin, oo ku tiil guriga Rabbiga. Oo maalintii dambe Fashxuur ayaa Yeremyaah jeebooyinkii ka soo bixiyey. Maraasaa Yeremyaah isagii ku yidhi, Rabbigu magacaaga uguma yeedhin Fashxuur, laakiinse wuxuu kugu magacaabay *Maagoor Misaabiib (cabsi baa dhan kasta jirta). Rabbiyow, waad I qiyaanaysay, oo waa lay khiyaaneeyey, adigu waad iga xoog badan tahay, oo waad iga adkaatay. Maalin kasta waa laygu qoslaa, oo mid kastaaba waa I yaraystaa. Waayo, mar alla markaan hadlaba waa qayliyaa, oo waxaan ku dhawaaqaa, waa dulmi iyo kharribaad, maxaa yeelay, eraygii Rabbigu wuxuu ii noqday sabab ay maalinta oo dhan igu caayaan oo iigu qoslaan. Oo haddaan idhaahdo, Isaga ka hadli maayo, oo mar dambe magiciisa wax ku sheegi maayo, waxaa qalbigayga ku jira wax dab ololaya la moodo oo lafahayga ku dheggan, oo waxaan la daalay hadalka.”
- Si iyadoon intaa ay waxba ka tarin, waa la qabtay, la karbaashay oo dil baa lagu xukumay isaga sida uu erayga Rabbiga nooga sheegaya Yer. 37:11-16 waxaana qoran iyaduna sida tan, “Oo markii ciidankii reer Kaldayiin ay Yeruusaalem uga kala tageen cabsi ay ka qabaan ciidankii Firxoon aawadiis ayaa Yeremyaah Yerrusaalem ka baxay oo wuxuu galay dadlkii reer Benyaamiin si uu meeshaas qaybtiisa dadka uga dhex helo. Oo markuu iriddii reer benyaamiin joogay waxaa isna halkaas joogay sirkaal waardiyayaasha madax u ahaa, oo magiciisa la odhan jiray Yiriyaah ina Shelemyaah, oo ahaa ina Xananyaah, oo isna Yeremyaah buu qabtay oo wuxuu ku yidhi, Adigu waxaad u gelaysaa reer Kaldayiin. Markaas Yeremyaah wuxuu ku yidhi, Taasu waa been, anigu reer Kaldayiin u geli maayo, laakiinse isagu innaba ma uu dhegaysan, sidaas daraaddeed Yiriyaah wuxuu soo qabtay Yeremyaah, oo amiirradi u keenay. Amiirradiina Yeremyaah bay u cadhoodeen, oo intay garaaceen ayay gurigii Yoonaataan oo karraanigii ahaa ku xabbiseen, waayo, kaasay xabsi ka dhigeen. Markii Yeremyaah uu gurigii godka ahaa galay iyo weliba qolalkii hoose, oo uu halkaas mamo badan ku jiray.”
iv. Silaca Bawlos
Rasuul Bawlos waa nin kale oo tusaale noo ahaani karo oo silec geri gaartay soo mary oo runtii haddii aan eegno sida uu u adkaystay Rabbiga aawadiis uguna guulaystay dhiiri gal weyn ayay noo ahaani kartaa kuweena maanta nool oo silcayaan waxaanna ogaanaynaa inay kuwa Rabbiga daraaddiis u dhiboodaan ay haddiyad farxad leh ay u dambayso.
– Sirqool baa loo dhigay Bawlos sida aan aayadahan uga akhrinaynaba haddii aan ku bilawno Falimaha Rasuullada 21:30 waxaa qoran sida tan, “Markaasaa magaaladii oo dhammu kacday, dadkuna waa isku soo yaacay; kolkaasay Bawlos qabteen oo macbudka ka jiideen; oo markiiba albaabbadii waa la xidhay.” Aayad kale oo isla arintaan ka sii hadlayso waa tan iyaduna Falimaha Rasuullada 20:3aad waxaana qoran sida tan, “Oo markuu saddex bilood meeshaas joogay, oo Yuhuuddu sirqool u dhigtay, markuu u dhowaa inuu Suuriya u dhoofo, ayuu wuxuu goostay inuu Makedoniya ku soo dhex noqdo.” Aayada kaloo fara badan ayaa arintaan ka sheekeynaysaa laakiin tusaaladayda waxaan ku daraya hal aayad taa oo ah iyaduna Falimaha Rasuullada 25:2-3aad oo dhigan sida tan, “Markaasaa wadaaddadii sare iyo raggii Yuhuudda u waaweynaa waxay isagii u sheegeen wax bawlos ka gees ah, wayna baryeen oo axsaan ka weydiisteen inuu isaga Yerruusaalem u soo diro; iyagoo sirqool u dhigaya inay jidka ku dilaan.”
– Rasuul Bawlos waa la dhagaxyey oo dhimasha buu gaaray sida aan uga akhrinayno Kitaabka qoduuska ah qaas ahaan Falimaha Rasuullada 14:19aad waxaana dhigan sida tan, “Laakiin waxaa Antiyokh iyo Ikoniyon ka yimid Yuhuud, oo markay dadkii badnaa yeelsiiyeen, ayay bawlos dhagxiyeen, oo magaaladii ka jiideen, iyagoo u malaynaya inuu dhintay.”
– Wuxuu u gacan galay Sheydaanka maxaa yeelay, sidaan horey u sheegnayba Shaydaanka ma doonayo in qof Ilaah adeecsan uu sii waara sida aan uga akhrinayno 1 Tesaloniika 2:18 waxaana qoran sida tan, “Waayo, waannu jecelaan lahayn inaannu idiin nimaadno, anigoo Bawlos ah mar iyo lababa waan jeclaa, laakiinse Shaydaan baa naga hor joogsaday.” Waxyaala badan oo waxaa jiraan wanaag ah uu Ilaah noogu talagalay laakiin sheydaanka ayaa naga hor taagan si ay jawaabta noo soo gaarin. Xataa baryada aan barino sheydaanka maraha qaarkood wuxuu la fadhiisan karaan jawaabteena sida aan uga akhrin karno buugga Danyeel 10:12, 13 waxaana qoran sida tan, “Markaasuu igu yidhi, ha cabsan, Daanyeelow, waayo, maalintii ugu horraysay oo aad qalbigaaga gelisay inaad wax garato oo aad isku hoosaysiiso Ilaah hortiis ayaa erayadaadii la maqlay, oo anigu waxaan u imid erayadaadii aawadood. Laakiinse boqortooyada Faaris amiirkeedii ayaa kow iyo labaatan maalmod iga hor joogsaday, laakiinse Mikaa’iil, oo ah amiirrada sare midkood, ayaa ii yimid inuu I caawiyo, oo halkaasaan kula hadhay boqorradii reer Faaris.”
Baryada dhabta ah ee qalbigga nadiifka ah ka soo baxdaa sheydaanka ma hor staagi karo laakiin tan aan daacadda ahayn waxay noqonaysa sida mid derbi ku dhacday waayo, Sheydaanka wuxuu ka helaa baryada noocaas ah ee ay daacanimada ku jirin. Cutubkan 10aad oo dhan ee Danyeel haddii aad akhrinsatid waad fahmaysa waxa aan ka hadlaya.
– Waa la dilay oo xabis baa lagu riday sida aan uga akhrinayno Falimaha Rasuullada 16:19-24 waxaana qoran sida tan, “Laakiin sayidyadeedii, markay arkeen in rajadii faa’iidadoodu dhammaatay, ayay bawlos iyo Silas qabteen, oo waxay u jiideen suuqa, taliyayaasha hortooda, oo markay xaakinnnadana u keeneen, waxay yidhaahdee, Nimankanu iyagoo Yuhuud ah ayay si weyn magaaladayada u dhibayaan, oo waxay na barayaan caadooyin aan noo xalaal ahayn inaannu aqbalno oo yeelno annagoo reer Rooma ah. Markaasaa dadkii badnaa ku wada kaceen; oo xaakinnadiina dharkoodii bay ka jeexeen, waxayna ku amreen in la uleeyo, oo markay ulo badan ku dhufteen, ayay xabsiga ku rideen iyagoo ku amraya xabsihayihii inuu aad u ilaaliyo; isaguna markuu amar caynkaas ah helay, wuxuu iyagii ku riday xabsigii ugu hoooseeyey, cagahoodana qori buu aad ugu xidhay.”
– Waa lagu jesjeesay isaga oo weliba wax alla wuxuu sheegay oo dhan ayaa ahaayeen wax lagu yaso isaga sida aan uga akhrinayno Falimaha Rasuullada 26:24 waxaana qoran sida tan, “Oo intuu saas isu daafacayay, ayaa Feestos cod weyn ku dhawaaqay oo yidhi, Bawlosow, waad waalan tahay. Barashadaadii badnayd ayaa waalli kuu beddeshay.” “Haddaba Bawlos intuu Ateenay ku sugayay iyagii, ruuxiisu waa kacay markuu arkay magaalada oo sanamyo ka buuxaan. Saas daraaddeed ayuu Yuhuuddii iyo nimankii cibaadaysnaa kula xaajooday sunagogga, suuqa,dhexdiisana ayuu maalin walba kula xaajooday kuwii kula kulmayba. Waxaana la kulmay isagii kuwo ka mid ah filosoofiinta Ebikuriyiin iyo Stoo’ikiin ah. Qaar baa waxay yidhaahdeen, Ninkan dawdarka ihi muxuu odhan doonaa? Qaar kalena waxay yidhaahdeen, wuxuu u eg yahay ini ilaahyo qalaad wax ka sheega; maxaa yelay, wuxuu dadkii ku wacdiyey Ciise iyo sarakicidda.” (Falimaha Rasuullada 17:16-18)
– Been baa laga sheegay isaga si ay dantooda u buuxsanto uu isaga loo silciyo maxaa yeelay, wax allaate wuxuu barayay kuma ay faraxsanayn sida ku taalo Falimaha Rasuullada 21:21, 28 waxaana qoran sidan, “Iyagana waa loo sheegay wax kugu saabsan inaad Yuhuudda quruumaha ku dhex jirta bartid inay Muuse ka tagaan adigoo u sheegaya inaanay carruurtooda gudin oo aanay caadooyinka ku socon. Iyagoo qaylinaya oo leh, Nimankii reer bini Israa’iilow, na caawiya. Kanu waa ninka bara dadka oo dhan oo meel kasta jooga ina ka gees noqdaan ddka iyo sharciga iyo meeshan. Weliba wuxuu macbudka keenay dad Griig ah, meeshan qoduuska ahna xaaraan buu ka dhigay.”
Aayada kalena waa kuwan aan ka akhrinayno Falimaha Rasuullada 24:5-9 oo dhigayaan sida tan, “Maxaa yeelay, waxaannu aragnay in ninkanu yahay nin baas oo fidmad ka dhex kiciya Yuhuudda dunida joogta oo dhan, waana kan horgalaha u ah dariiqada Naasaraaniyiinta; oo wuxuu aad ugu dadaalay inuu macbudka nijaaseeyo; oo weliba annagu waa soo qabannay isagii, oo waxaannu ku xukumi lahayn wax sharcigayaga ku saabsan. Laakiin waxaa yimid sirkaalkii sare oo Lusiyas la yidhaahdo, oo gacantayada xoog kaga baxshay isagii, oo wuxuukuwii soo dacwaynayay ku amray inay hortaada yimaadaan. Isaga markaad adiga qudhaadu imtixaantid waad ka ogaan kari doontaa waxyaalahan aanu isaga ku dacsaynayno oo dhan. Oo Yuhuuddiina way ku darmadeen dacwadii iyagoo adkaynaya in waxyaalahaasu saas yihiin.”
– Wuxuu u dulqaatay dhibaatooyin badan oo xagga badda ka soo gaareen sida aan uga akhrinayno Kitaabka qoduuska ah gaar ahaan 2 Kor. 11:25 waxaana qoran sida tan, “Saddex goorna ulaa laygu dhuftay, marna waa lay dhagxiyey, saddex goor doonni baa ila jabtay, habeen iyo maalinna waxaan ku jiray badda.” Aayado kalena waxay leeyihiin haddii aan ka akhrino Falimaha Rasuullada 27:14-20 sida tan, “Laakiin wakhti aan dheerayn dabadeed ayaa waxa ka soo kacay duufaan weyn oo magiciisa la yidhaahdo Yurokludoon; oo markii doonnidii la qabsaday oo ay wejiga siin kari weyday dabaysha, ayaannu iska dhiibnay, kolkaasay na kaxaysatay. Oo waxaannu ku orodnay gasiirad yar oo Kalawda la yidhaahdo dugsigeed, oo annagoo aad u dhibtoonnay ayaan waxaan awood u helnay inaan huurigii aad u xidhno; oo kolkii ay kor u soo bixiyeen ayay waxay ku istecmaaleen xadhko wax tara oo doonnidiinna way adkeeyeen, oo iyagoo ka cabsanaya inay Suurtis oo bacaad ah ku dhacaan, ayay waxay dejiyeen shiraaqii, oo sidaasaa loo kaxaystay. Oo sidii aannu duufaankii aad ugu hawshoonaynay, ayay saddexaadna waxay gacmahoodii ku tuureen alaabtii doonnida. Oo markii intii maalmo badan ah ayan qorraxdii iyo xiddigihii toona ifin, oo duufaan aan yaraynuna uu nagu dhacayay, ayaa rajadii aannu badbaado ku rajaynaynay oo dhan nalaga qaaday.”
– Bahal baa qiniinay isaga sida aan uga akhrinayno Falimaha Rasuullada 28:3-4aad waxaana dhigan sida tan, “Laakii Bawlos ayaa soo ururshay xaabo badan, oo wuxuu saaray dabka, kolkaasaa kulaylka daraaddiis waxaa soo baxay jilbis oo gacantiisuu ku dhegay. Oo barbariyiintiina markay arkeen bahalkii gacantiisa ka laalaaday ayaa midkoodba wuxuu mid kale ku yidhi, Shaki la’aan ninkanu waa nin dhiig qaba, waayo, in katoo uu baddii nabdoonnaan kaga baxsaday, haddana xaqnimadu uma oggolaan inuu sii noolaado.”
– Wuxuu noqday mid ay dadka oo dhan diidaan maxaa yeelay, haddiiba ay madaxda kaa soo hor jeestaan runtii ma jiro qof kale oo sahal kuu ogolaan doono maxaa yeelay, qof walba wuxuu ka baqaya in xiriirka aad qofka isaga ah la leedahay daraaddiis adiguna lagula edbin doono isaga sida aan uga akhrinayno 2 Timoteyos 4:10,16 waxaa noo cad inay dadka oo dhan isaga cadow ku noqdeen waxaana qoran sida tan, “Waayo, Deemaas intuu dunidan haatan la joogo jeclaaday ayuu iga tegey, oo wuxuu aaday Tesaloniika; Kereeskeesna wuxuu aaday Galatiya; Tiitosna wuxuu aaday Dalmatiya. Isdaafacaaddaydii hore ninna isma kay garab taagin, laakiinse kulli wa layga wada tegey. Taas yaan dushooda laga dhigin.”
6. SIDA DOONISTA ILAAH LOO OGAADO
Boqorradii labaad 23:3 oo leh sida tan, “Markaasaa boqorkii istaagay tiirka agtiisii, oo wuxuu Rabbiga hortiisa axdi ugu maray inuu Rabbiga raaco oo uu qalbigiisa oo dhan iyo naftiisa oo dhan ku dhawro amarradiisa, iyo markhaatiyaalkiisa, iyo qaynuunadiisa, Kitaabkan ku qornaa, oo dadkii oo dhammuna axdigii bay aqbaleen oo u istaageen.” Aan isweydinee, Maxay tahay macnaha ‘doonista Ilaah?’ Doonista Ilaah waa inaan aad iyo aad ugu ekaano inankiisa Ciise Masiix taa oo ah u ekaanta xagga qoduusnimada.
– Doonista Ilaah ee dhabta ah shaki kuma jiro oo waxaan ka heleynaa Kitaabka qoduuska ah haddii aan u leexano.
– Ilaah cod dheer nagula ma hadlo oo wuxuu nagula hadlaa eraygiisa kaa oo aan ka heleyno Kitaabka.
– Qoraalka wuxuu cadaynayaa in Ilaah uu leeyahay qorshaha weligii raaga uu noo hayo taa oo aan ka heleyno Sabuurrada 37:23 oo ay ku dhigan tahay sida tan, “Dadka socodkiisa waxaa hagaajiyaa Rabbiga, oo jidkiisuu ku farxaa.”
– Ilaah keliya ayaan og sida aan ku socon lahayn iyo dariiqa saxda ah maxaa yeelay, waxaan tan iida ah ka akhrinaynaa Sabuurrada 32:8 waxayna leedahay, “waan ku hanuunin doonaa oo waxaan ku bari doonaa jidka aad ku socon lahayd, oo waxaan kula tlain donaa iyadoo ay ishaydu kula jirto.”
– Ilaah wuxuu doonaya inaan ogaano doonista uu noo leeyahay annaga baniaadmiga ah maxaa yeelay, Kitaabkiisa ayaa noo sheegaya tan iida ah haddii aan ka akhrino Efesos 5:17 waxaana qoran sida tan, “sidaas daraaddeed nacasyo ha ahaanina, laakiinse garta waxa ay doonista Rabbigu tahay.”
– Doonistiisa waa mid joogta ah. Ilaah doonis buu u leeyahay baniaadmiga oo dhan sida aan uga akhrinayno Ishacyaah 58:11 laakiin baniaadmigay waajib ku tahay inay Rabbiga ka codsadaan waxa ay tahay doonistiisa nolosha uu na siiyey waana inaan ku dhaqano doonistiisa. “Oo Rabbiguna had iyo goorba wuu ku hoggaamin doonaa, oo iyadoo abaar ah ayuu naftaada dherjin doonaa, lafahaagana wuu adkayn doonaa, oo adna waxaad noqon doontaa sida beer la waraabiyey, iyo sida il biya ah oo aan innaba biyeheedu gudhin.” Ishacyaah 58:11
– Miyaad og tahay in doonista Ilaah ay tahay mid qaas ah? Haddaadan ogayn runtii waxaad ka heli kartaa balanta ama dhabta iyada ah erayga Ilaah taa oo aad ka akhrisan kartid Ishacyaah 30:21 waxaana qoran sida tan, “Oo markaad midigta u leexataan iyo markaad bisixda u leexataanba waxaad xagga dambe ka maqli doontaa eray leh, Jidkii waa kan ee ku socda.” Oo weliba Ilaah dariiqa kuwa xaqa ah wuu balaariyaa sida aan uga akhrinayno Maahmaahyadii 15:19 waxayna leedahay haddii aad doonaysid inaad dhabteeda ogaato sida tan, “Ninkii caajis ah jidkiisu waa sida meel qodxan leh oo kale, laakiinse kii xaq ah jidkiisu waa dariiq bannaan.”
– Doonista Ilaah faa’ido weyn baa lagu helaa haddii Ilaah lagula macaamilmo sida doonistiisa ay tahay sida aan uga akhrinayno Yashuuca 1:8 waxaana qoran sida tan, “Kitaabkan sharcigu waa inaanu afkaaga ka tegin, laakiisne waa inaad u fiirsataa habeen iyo maalinba, si aad u dhawrtid wax alla waxa ku qoran oo dhan, waayo, markaasaad jidkaaga ku barwaaqoobi doontaa, waanad liibaani doontaa.”
“Waxaa barakadaysan ninkii aan ku socon talada kuwa sharka leh, oo aan istaagin jidka dembiilayaasha, oo aan ku fadhiisan kursiga kuwa wax quudhsada. Laakiinse waxaa isaga ka farxiya sharciga Rabbiga, oo habeen iyo maalinba sharcigiisuu ka fikiraa. Oo wuxuu ahaan doonaa sida geed lagu beeray durdurrada biyaha agtooda, oo midhiihiisa dhala xilligooda, oo aan caleentiisuna engegin. Oo wax alla wuxuu sameeyoba wuu ku liibaani doonaa.” (Sabuurrada 1:1-3)
Maxay tahay doonista uu Ilaah inoo leeyahay?
Sida aan u soo aragnayba doonista Ilaah waxay badnaanteedu gaaraysaa inta isaga rumaysatay oo aduunka ku nolaadeen ama ku nool ama ku nolaan doonaan laakiin waxaa jiraan afar arimood oo ah in laga fiiriyo doonista Ilaah taa oo aad ugu bannaan rumaystayaasha oo ay ka mid yihiin kuwan,
I. Doonistiisa waa inaan wax badan oo isaga ku saabsan ka baranaa sida aan uga akhrinayno Kolosay 1:9 waxayna leedahay sida tan, “Sababtaas daraaddeed tan iyo maalintii aannu taas maqalnay ma aannu joojin inaannu idiin soo ducayno. Waxaannu Ilaah idiin baryaynaa inay idinka buuxsanto aqoonta doonistiisa xagga xigmadda iyo waxgarashada Ruuxa oo dhan.”
II. Waa doonista Ilaah inaan nimcadiisa ku barbaarno laakiin ma ahan inaan ku dhaqano waxyaala isaga nebciyaan socodkeena intaan dunidan ku neefsanayno sida aan uga akhrinayno 1 Tesaloniika 4:3-6aad waxayna leedahay sida tan, “Maxaa yeelay, doonista Ilaah waxaa weeyaan inaad qoduus ahaataan oo aad sino ka fogaataan, in midkiin kastaaba garto siduu weelkiisa ugu hayn lahaa qoduusnaan iyo maamuus, mana aha inuu hammadda damaca xaaraanta ah ku socdo sida dadka aan Ilaah aqoonin; inaan ninna xadgudbin oo walaalkiis xaalkan ku xumayn, maxaa yeelay, Rabbigu waa mid ka aarguda waxyaalahan oo dhan sidaannu mar hore idiinku dignay oo idiinku sii sheegnay.”
III. Waa doonista Ilaah inaan eraygiisa barano, waayo, erayga Ilaah ayaa ah meesha keliya oo aan ka heli karno dhiiri galka, waanada, iyo wax alla wixii aan su’aal kaga qabno nolosha aan dunidaan ku noolnahay oo dhan sida aan uga akhrinayno 2 Timoteyos 3:14-17 waxayna leedahay sida tan, “Laakiinse adigu ku sii soco waxyaalihii aad baratay oo aad hubsatay, adigoo garanaya kuwii aad ka baratay; tan iyo yaraantaadii waxaad garanaysay qorniinka qoduuska ah oo badbaadada kugu garansiin kara rumaysadka Cisie Masiix lagu rumaysto. Qorniin kastaa wuxuu ku ahaaday Ruuxa Ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda, iyo cananashada, iyo hagaajinta, iyo edbinta xagga xaqnimada; in ninka Ilaah u ahaado mid dhan oo aad loogu diyaariyey shuqul kasta oo wanaagsan.”
IV. Waa doonista Ilaah inaan rumaysadkeena dadka kale la qaybsano, waayo, Ilaah nooma badbaadiyo ama doonistiisa nooma cadayo si aan u badbaadno oo aan jannada u galno laakiin wuxuu naga doonaya inaan wixii uu noo bandhigay la sii qaybsano dadka kale anagoo ku shaqaynayno awoodda Ruuxa Qoduuska ah sida aan uga akhrinayno Falimaha Rasuullada 1:8 waxaana dhigan sida tan,
“Laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii Ruuxa qoduuska ahi idinku soo dego; oo markhaatiyaal ayaad iiga noqon doontaa Yeruusaalem, iyo Yahuudiya oo dhan, iyo Samaariya, iyo meesha dunida ugu fog.”
Aayad kalena waxay noo sheegeysa in kuwa badbaaday ay waajib ku tahay inay waxay heleen ay dadka la sii qaysadaan taa oo aan ka akhrinayno 1Timoteyos 2:4-7aad waxaana dhigan sida tan, “Wuxuu doonaya in dadka oo dhammu badbaado oo ay runta gartaan. Waayo, waxaa jira Ilaah keliya iyo dhexdhexaadiyey keliya oo u dhexeeya Ilaah iyo dadka, waana ninka Ciise Masiix ah, oo naftiisii dadka oo dhan furashadooda u bixiyey, oo wakhtigiisii qummanaa loo markhaati furay. Taas daraaddeed baa layga dhigay inaan noqdo mid wax wacdiya oo rasuul ah oo macallin dadka aan Yuhuudda ahayn ugu ah iimaan iyo run. Taasu waa runtay oo been sheegi maayo.” Ayuu yidhi rasuul Bawlos. 2 Butros 3:9 waxaa qoran sida tan, “Rabbigu kama raago inuu ballankiisa oofiyo sida dadka qaarkiis ku tiriyo inay tahay raagid, laakiinse idinkuu idiin dulqaadanayaa, oo dooni maayo in qofnaba haligmo, laakiinse wuxuu doonayaa in kulli la wada toobad keeno.”
Ilaah farxaddiisa ma ahan in hal qofna ha ahaatee uu naarta galo laakiin wuxuu doonayaa in baniaadmiga oo dhan ay jidadkooda xunxun ay ka soo leexdaan oo ay toobad keenaan oo ay u noqdaan kuwa Ciise Masiix la dhaxlaan boqortooyada uu noo wada diyaariyay kuweena toobaad keeni doono oo Rabbi Ciise Masiix ku deyan doonaan ilaa maalinta uu ka soo noqon doono oo uu kuwa kuwiisa ah uu kaxaysan doono oo uu kuwa aan kuwiisa ahayn oo aan isaga rumaysan oo aan adeecin ku odhan doona iga fogaada idin garan maahee. Ilaahay nagama dhigo kuwa uu inkiri doono laakiin ha nagawada dhigo kuwa uu soo dhoweysan doono.
Sida doonista Ilaah loogu ogaado baryada iyo soonka
oo leh sida tan, “oo waxaan wejigayga u jeediyey sayidka Ilaah ah inaan ku doondoono tukasho iyo baryootan, anoo sooman, oo joonyado guntan, oo dambas ku fadhiya. Oo Rabbiga ah Ilaahayga ayaan baryay, oo wax baan u qirtay, oo aan idhi, sayidow, waxaad tahay Ilaaha weyn oo laga cabsado, oo axdi xajiya, oo u naxariista kuwa isaga jecel oo amarradiisa dhawra…” (Daanyeel 9:3-4). Ka dib markii ay Israa’iiliinta Falistiin qabsadeen, maalimihii Yoshuca, Israa’iliinta waxaa lagu siray inay saxiixaan nabad raadin aan sida qoraalka ku taalo ahayn oo waxaa saa yeeleen qolo been ku dhaqato ah. Waxaa qaladkaan sababay si fiican buu qoraalka u sheegaya, waxaana ka akhrin karnaa Yashuuca 9:14 oo leh, “Oo markaasay nimankii wax ka qaateen sahaydoodii, oo Rabbbigana talo ma ay weydiisan.” Runtii kuwan aan diinta lahayn dhibaato weyn bay Israa’iliinta u geysteen maxaa yeelay, haddaan Rabbiga talo saaran runtii wax allaate waxaan ku gacan qaadayno oo dhan waxay ahaanayaan wax aan saldhig lahayn. Haddii aan doonayno inaan doonista Ilaah ogaano waa inaan baryo ku bilawnaa oo tan waa mid Kitaabka uu nagu dhiiri gelinayo sida aan uga akhrinayno Yaquub 1:5 oo dhigayso sida tan, “Laakiin haddii midkiin xigmad u baahan yahay, ha ka baryo Ilaah, kan kulli si deeqsinimo ah u siiya isagoo aan canaanan, oo waa la siin doonaaye.” Haddii aan wax muhimadda baryada ku saabsan sii akhrino waxaan ka akhrin karnaa Sabuurrada 143:8-10 waxaana qoran sida tan, “Aroorta naxariistaada I maqashii, waayo, adigaan isku kaa halleeyaa, ii garansii sidii aan u socon lahaa, waayo, naftaydaan kor kuugu qaadaa. Rabbiyow, cadaawayaashayda iga samato bixi, waayo adaan kugu soo cararaa inaad I qariso. I bar si aan doonistaada u sameeyo, waayo, waxaad tahay Ilaahayga, Ruuxaaga wanaagsanu ha igu dhex hoggaamiyo dalka qummanaanta.”
Yaquub 4:2aadna waxay leedahay sida tan iyadoo isla arinta muhimadda baryada ka hadlayso, “Waad damacdaan, mana lihidiin; waad dishaan, waadna xaasiddaan, mana heli kartaa; waad dirirtaan, waadna dagaallantaan, mana lihidin, waayo, ma aad weydiisataan.” Arinta weydiska waxaa ka soo dhalan karaa su’aal ah, ‘aniga waan weydistaa mana lihi e maxaa jira?’ Waa run waad weydistaa laakiin mqarkaad weydisanaysid maxaad niyeysantahay? Ilaah wuxuu eegaya sida aad wax ku weydisanaysid waayo, aayadda saddexaad haddii aan ka akhrino cutubkan afraad ee Yacquub waxay leedahay sida tan, “Waad weydisataan, mana heshaan, waayo, si xun baad u weydisataan inaad ku bixisaan damacyadiinna aawadood.” Marka qofka rumaysadka leh oo Ilaah rumaysan addeecayana waa inuu xaalad kasta uu noloshiisa kala kulmaa uusan ahan mid baryo la’aan ah. Kitaabka wuxuu tukashada la xiriiriyey soonka taa oo aan haatan u jeesanayno. Ugu horeynta waa maxay soonka? Soonku waa iska reebidda uu qofka waxyaalo muhim ah uu iska reebayo amaba kuwa nolosheena ugu xiisada badan. Maxay tahay sababta loo soomayo? Waxaa loo soomaya in wakhtiyada aad waxyaalahas samayn lahayd ama aad ku stareexi lahayd aad Ilaah baryo kula hadashid oo aad weliba lahaatid wakhti dhan oo aad gaar u dhigtay inaad Erayga Ilaah akhrisatid oo aad isaga ka codsatid inuu si qaas ah kuugula hadlo wuxuu kuugu leeyahay kuu fahamsiyo.
Waxaa jiraan waxaalo badan uu qofka hadduu doonayo inuu soomo uu ka soomi karo oo ay ka mid yihiin:
I. Waxaad ka soomi kartaa hurdada sida aan uga akhrinayno 2 Korintos 6:4-7 oo dhigan sida tan, “Laakiin sida midiidnyada Ilaah ayaannu wax walba isugu caddaynaynaa dulqaadasho badan, annagoo ku dhex jira dhibaatooyin, iyo baahi, iyocidhiidhiyo, iyo karbaashyo, iyo xabsiyo, iyo rabshooyin, iyo hawlo, iyo soo jeedid, iyo soomid, annagoo isku caddaynayna daahirnimo, iyoo aqoon, iyo samir, iyo roonaan, iyo Ruuxa Qoduuskaa, iyo jacayl aan labaweji lahayn, iyo hadalka runtaa, iyo xoogga Ilaah, iyo hubka xaqnimada ee midigta iyo bidixdaba.”
Haddii aan haddana isla buugan 2 Korintos 11:27 ka akhrino waxaan arkaynaa inay leedahay sida tan, “Waxaana ku jiray dhib iyo daal, marar badanna hurdo la’aan iyo gaajo iyo harraad, marar badanna cuntola’aan iyo qabow iyo arrad.”
II. Waxaad ka soomi kartaa iisu tagga xagga jidhka haddii aad tihiin nin iyo naag isqabaan sida aan uga akhrin karno 1 Kor. 7:1-5 waxaana dhigan sida tan, “Waxyaalahaad ii soo qorteen xagooda, waxaa nin u wanaagsan inuusan qof dumar ah taaban. Laakiin si aan loo sinaysan, nin kastaa afadiisa oo qudha ha haysto, naag kastaana ninkeeda oo qudha ha haysato. Ninku afada waxa ku qumman ha siiyo, sidaas oo kale afaduna ninka waxa ku qumman ha siiso. Afadu jidhkeeda uma taliso, laakiin ninkaa u taliya, sidaas oo kale ninku jidhkiisa uma taliyo, laakiin afadaa u talisa. Ha isdiidina, wakhti aad ku heshiisaan inaad soon iyo tukasho u goosataan mooyaane, oo aad haddana isu timaadaan, si aan Shaydaanku idiin duufin iscelin-la’aantiinna aawadeed.”
III. Waxaad ka soomi kartaa cuntada weliba tan aad ugu jeceshahay sida aan uga akhrinayno Mat. 4:1,2 waxaana qoran sida tan, “Goortaasaa Ruuxa Ciise cidlada u kaxeeyey in Ibliisku jirrabo. Oo goortuu afartan maalmood iyo afartan habeen soomanaa, ayuu dabadeed gaajooday.”
Tusaalooyinka soonka ee Kitaabka qoduuska ah ku jiraan haddii aan akhrino xagga Axdigii hore:
v Soonka uu Muuse soomay taa oo aan ka akhrisan karno Sharciga Kunoqoshadiisa 9:9, 18, 25-29 waxaana qoran sida tan, “Oo markaan buurta fuulay inaan soo helo looxyadii dhaqaxa ahaa, kuwaasoo ahaa looxyadii uu ku qornaa axdigii Rabbigu idinla dhigtay, markaasaan buurta joogay afartan moolmood iyo afartan habeen, oo intaasna baadna ma cunin biyana ma cabbin. Markaasaan Rabbiga horiisa ku dhacay oojoogay afartan maalmood iyo afartan habeen sidii markii hore, oo anigu baadna ma cunin, biyana ma cabbin, maxaaa yeelay, sababtu waa dembigiinnii aad dembaabteen oo dhan, markaad samayseen wax Rabbiga hortiisa shar ku ahaa, oo aad isaga kaga xanaajiseen. Oo sidaas daraaddeed ayaan Rabbiga hortiisa ku dhacay, oo afartan maalmood iyo afartan habeen ayaan hortiisa joogay, maxaa yeelay, Rabbigaa yidhi, iyagaan baabi’inayaa. Markaasaan Rabbiga baryay oo waxaan ku idhi, Sayidow, Ilaahow, ha baabi’in dadka dhaxalkaaga ah oo aad weynaantaada ku soo furatay, oo aad gacantaada xoogga badan dadlkii Masar kaga soo bixisay. Bal xusuuso addoommadaaddii Ibraahahim, iyo isxaaq, iyo Yacquub, oo ha fiirin dadkan madaxadkaantooda ama xumaantooda amase dembigooda, waaba intaasoo dadkii aad dalkoodii naga soo bixisay yidhaahdaa, oo nacaybkii uu iyaga u qabay aawadiis ayuu u bixiyey si uu cidlada ugu laayo. Laakiin iyagu waa dadkaagii iyo dhaxalkaagii aad xooggaaga weyn iyo cududdaada fidsan ku soo bixisay.”
Soonka Muuse waxaan aragnay inuusan ahayn iska soon laakiin waxaa jirtay arin isaga aad u dhibtay taa oo ahayd dembiga dadka uu hogaaminayay oo iyaga daraaddood buu u soomay si uu Ilaah u eegin dembiyadooda oo ay inkaartiisa ugu dhicin. Anagana waxaa nagu waajib ah inaan ahaano dad iisu bixiyaa dadka kale aawadood oo aan daraadood Ilaah u hor staagnaa ama arin alla tii aan doonayno inaan Ilaah hor keenno Ilaah diyaar buu u yahay mar alla markaan isaga iisu dhiibno. Sheekadan nebi Muuse haddii aad sii akhrisid waxaad arkaysaa Ilaah oo maqlay baryada Muuse oo dadkii u naxariistay, waayo, Ilaah baryada dadka aaminka ah wuu maqlaa laakiin ma ahan tan uu qofka labawejiilaha ah baryo.
v Soonka uu Eliyas soomay waxaan Boqorradii Kowaad 19:8 waxaana qoran sida tan, “Markaasuu toosay, oo wax cunay, oo wax cabbay, oo cuntadaas itaalkeedii ayuu ku socday afartan maalmood iyo afartan habeen ilaa uu gaadhay Xoreeb oo ahayd buurtii Ilaah.”
v Soonka uu Dani’eel soomay waxaan ka akhrisan karnaa Daanyeel 9:3 waxaana qoran sida tan, “Oo waxaan wejigayga u jeediyey Sayidka Ilaah ah inaan ku doondoono tukasho iyo baryootan, anoo sooman, oo joonyado guntan, oo dambas ku fadhiya.” Aayad kale oo isla arinta soonkii Daani’eel uu soomay ku saabsan waa tan aan ka akhrinayno isla buuga Daanyeel 10:3 waxaana dhigan sida tan, “cunto wanaagsan ma aan cunin, hilib iyo khamrina afkayga ma gelin, mana subkan marnaba ilaa ay saddexdii toddobaad dhammaadeen.”
v Soonka uu Sekaryaah soomay arinta iyada ah waxaan ka akhrinaynaa Sekaryaah 10:6 waxayna leedahay sida tan, “Reer Yahuudah waan xoogayn doonaa, waanan badbaadin doonaa reer Yuusuf, oo mar kalaan soo celin doonaa, waayo, waan u naxariisanayaa, oo waxay noqon doonaan sidii iyagoo aanan xoorin, waayo, waxaan ahay Rabbiga Ilaahooda ah, oo waan maqli doonaa iyaga.” Tan waa mid ku timid baryo iyo soon lagu sameeyey daacadnimada uu qof baryootan leh sameeyey Ilaahna wuu ka jawaabay wuxuuna ku balan qaaday inuu dadkaas reer Yahuudiya xoogayn doono.
v Soonka uu Nexemyaah soomay oo ku dhigan Nexemyaah 1:4 oo dhigan sida tan, “Oo markaan erayadaas maqlay ayaan meel fadhiistay oo ooyay, oo intii ayaamo ah ayan baroortay; waanan soomay, oo waxaan ku tukaday Ilaaha samada hortiisa, oo idhi, Rabbiyow, Ilaaha samadow, Ilaaha weyn oo laga cabsadow, oo axdiga xajiya, oo u naxariista kuwa isaga jecel oo amarradiisa xajiyow, waan ku baryayaaye, dhegahaagu ha maqleen, indhahaagana fur, inaad maqashid baryadayda anoo addoonkaaga ah.”
Waxaan aragnay arimo badan oo loo soomi karo si Ilaah wakhti fiican loola yeesho oo loo baryo iyo wax alla wixii aad doonaysid inaad in mudo ah ka heshid si aad wakhti baryo ugu bedeshid wakhtiyada aad arimahaas samaynayso. Haddii aan saa u yeelayno Ilaah daraaddiis runtii naguma adkaanayso inaan yeelno maxaa yeelay, waxyaalahan oo dhan kuma jiraan wax naga sooci karo jacaylka aan Ilaah u qabno maxaa yeelay, eraygiisa wuxuu Rooma 8:35; 38; 39aad ka leeyahay,
“Yaa jacaylka Masiixa inaga sooci doona? Ma dhibaato, mise cidhiidhi, mise silic, mise baahi, mise arrad, mise khatar, mise seef? Waayo, waxaan hubaa inaan dhimashada, ama nolosha, ama malaa’igaha, ama kuwa madaxda ah, ama waxyaalaha haatan jooga, ama waxyaalaha iman doona, ama kuwa xoogga leh, ama kor, ama hoos, ama uun kaleeto inaga sooci karin jacaylka Ilaah oo ku jira Rabbigeenna Ciise Masiix.”
Sida doonista Ilaah looga ogaani karo Ruuxa qoduuska ah
Runtii sida aan horey uga soo akhrinay Falimaha Rasuullada 1:8aad, Ruuxa qoduuska ah la’aantiis ma jiraan wax aan samayn karno xataa haddii ay noqoto baryada aan Ilaah baryayno. Ciise Masiix wuu ogaa inaanan tabar lahayn oo wuxuu xertiisa u sheegay inay joogaan meel tilmaan leh ilaa uu kan iyaga caawin doono uga yimaado. Maxay tahay sababta ay caawiyaha u sugayeen? Waa si ay badbaadada Ilaah dunida oo dhan u gaarsiyaan intuusan Rabbiga soo noqon. Waa maxay muhimadda Ruuxa qoduusk ah? Su’aashan ayaan u jeesanayaa haatan, waxaa kale oo aan wax ka taaban doonaa sida kuwa uu Ilaah adeegsado ay la’aantiis waxba awoodin haba yaraatee. Waxaan aragnay waxyaala badan oo silica ku saabsan laakiin si kasta oo aan u akhrino wax silica ku saabsan haddii aan Ruuxa Qoduuska ah ee Ilaah uu na siinin fahamka aan ku fahmayno doonista Ilaah, runtii ma jiro qof u gegsan karo dhibatooyinka iyo sileca nolosha lagala kulmo. Wax alaate waxaan ka hadlayno oo ku saabsan nolosha Masixiinta ama nolosha uu Rabbigu naga doonaya inaan ku noolaano, waa inaan cabirka rasmiga ah ku cabirnaa kaa oo ah Kitaabka qoduuska ah. La’aantiis ma ahaani karno haddii aan nahayna waxaan wada nahay kuwa habaabsan waayo, kama aan tilmaan qaadan hogaamiyaha runta ah. Bal aan akhrino Ishacyaah 6:8 kaa oo saldhiga arintaa noo ah waxaana qoran sida tan, “Oo weliba waxaan maqlay codka Rabbiga oo leh, yaan diraa? Yaase noo tegaya? Markaasaan idhi waa I kan e aniga I dir.” Isla marka uu qofka dembiyadiisa qiranayo oo uu toobad keenayo, Ruuxa qoduuska ah waxaa jiraan waxyaala badan uu qofka ku suubinaya laakiin waxaan arkaynaa shan walxood uu suubiyo oo ay ka mid yihiin,
1) Wuxuu bedelayaa qofka oo wuxuu sinaya uun cusub sida aan uga akhrinaynoYooxanaa 3:5,6 waxaana qoran sida tan, “Ciise baa ugu jawaabay, Runtii, runtii, waxaan kugu leeyahay, qof haddaanu ka dhalan biyo iyo Ruuxa, boqortooyadii Ilaah geli kari maayo. Waxa jidhka ka dhashaa waa jidh, waxa Ruuxa ka dhashaana waa ruux.” Titos 3:4-7 waxaa qoran, “Laakiinse markii raxmaddii Ilaaha Badbaadiyeheenna ah iyo jacaylkii uu dadka u qabay muuqdeen, ayuu ina badbaadiyey. Inaguma uu badbaadin shuqullada xaqnimada oo aynu samaynay, laakiinse naxariistiisa aawadeed wuxuu inagu badbaadiyey nadiifinta dhalashadii labaad iyo cusboonaysiinta Ruuxa Qoduuska ah, oo uu aad inoogu shubay oo uu inoogu soo dhiibay Badbaadiyeheenna ah Ciise Masiix; inaynu, innagoo qoduus laynagaga dhigay nimcadiisa, rajada ku noqonno kuwo nolol weligeed ah dhaxla”
2) Wuxuu kuwa rumaysteen ku Baptiisa qalbi cusub oo ku biirinayso Masixiinta kale sida aan uga akhrinayno 1 Kor. 12:13 waxaana dhigan sida tan, “Waayo, Ruux qudha ayaa dhammaanteen jidh qudha inagu baabtiisay, haddaynu nahay Yuhuud ama Griig, ama addoommo ama kuwa xor ah, oo waxaa laynaga waraabiyey Ruux qudha.”
3) Isaga ayaa qofka xukumayaa maxaa yeelay, haddii aan nolosheena oo dhan Ilaah u dhiibno inuu hogaamiyo waxa aan samaynayno oo dhan waa qasab in Ruuxa Qoduuska ah ee Ilaah uu yahay kan hogaanka haya si ay waxaan ku hadlayno, ku ficilqaadayno ama aan ku fikirayno oo dhan ay u ahaadaan wax Ilaah ka farxiyaa sida qoran, “Kuwa jidhka ku dhex jiraan kama farxin karaan Ilaah. Laakiin idinku kuma aad dhex jirtaan jidhka, illowse waxaad ku dhex jirtaan Ruuxa, haddii Ruuxa Ilaah idinku dhex jiro. Laakiin nin hadduusan Ruuxa Masiixa lahayn, de kaasu kiisii ma aha.” (Rooma 8:8, 9) “…ama miyaanaydin ogayn jidhkiinnu inuu yahay macbudka Ruuxa Qoduuska ah ee idinku jira ee aad Ilaah ka hesheen? Oo idinku isma lihidiin, waayo, qiimo weyn baa laydinku soo iibsaday. Sidaas daraaddeed Ilaah jidhkiina ku ammaana.” (1 Korintos 6:19, 20)
4) Ruuxa qoduuska ah wuxuu dedayaa qofka sida qoran, “Oo weliba idinku isagaad ku maqasheen hadalka runta ah, kaas oo ah injiilka badbaadadiinna, oo weliba idinku markii aad rumaysateen ayaa laydinku shaabadeeyey Ruuxa Qoduuska ah oo uu ballan qaaday, oo ah carbuuntii dhaxalkeenna xagga furashada hantida Ilaah in la ammaano cisadiisa. Ha calool xumaynina Ruuxa Qoduuska ah oo Ilaah oo laydiinku shabadeeyey maalinta madaxfurashada.” (Efesos 1:13-14; 4:30)
5) Ruuxa qoduuska ah ayaa qalbiga qofka ka buuxsamayaa sida aan uga akhrinayno aayadahan Falimaha Rasuullada 2:4aad waxaana qoran, “Kolkaasaa waxaa kulligood ka wada buuxsamay Ruuxa Qoduuska ah, oo waxay bilaabeen inay afaf kale ku hadlaan sidii Ruuxu iyaga u siiyey hadalka.” Falimaha Rasuullada 7:55-56aad waxaa qoran sida tan, “Laakiin isagoo Ruuxa Qoduuska ahu ka buuxo ayuu samada aad u fiiriyey, oo wuxuu arkay ammaanta Ilaah iyo Ciise oo midigta Ilaah taagan, oo wuxuu yidhi, bal eega, waxaan arkaya samooyinkii oo la furay iyo Wiilkii Aadanaha oo midigta Ilaah taagan.” Falimaha Rasuullada 13:52 waxay leedahay sida tan, “Xertiina waxaa ka buuxsamay farxad iyo Ruxa Qoduuska ah.” Shantaan shey oo aan kor ku aragnay way dhacaan isla markii uu qofka dembiyadiisa Ilaah ugu toobadkeeno laakiin qaybta shanaad waa inuu qofka qaas ahaan Ilaah uga codsadaa sida aan uga akhrinayno Efesos 5:18 oo dhigayso, “Ha ku sakhraamina khamriga rabshadu ku jirto, laakiinse Ruuxu ha idinka buuxsamo.” Galatiya 5:16 waxaa qoran, “Laakiin waxaan leeyahay, Ruuxa ku socda, kolkaas aydnaan damaca jidhka yeelayne.”
Sida doonista Ilaah looga garto marxaladaha nala soo gudboonadaan
Bal aan horseed ka ka dhigano Maahmaahyada 24:6 oo dhigan sida tan, “waayo, waa inaad talo wanaagsan ku dagaallanta, oo waxaa taliyayaal badan la jirta nabagelyo.” In kasta uu qofka rumaysadka leh ka sareyo marxalad kasta oo la soo gudboonaato, waa inuusan ilowbin inay marxaladaha jiraan oo ay mar uun la soo gudboonaan doonaan. Ilaah wuxuu doonistiisa nagu bari karaa marxaladaha inta badan nala soo gudboonaani karaan. Rasuul Bawlos wuxuu yidhi, “Oo waxaynu og nahay in wax waliba wanaag ugu wada shaqeeyaan kuwa Ilaah jecel, xataa kuwa qasigiisa loogu yeedhay.” (Rooma 8:28) Marxalad kastoo aan la kulannaa waa inaan diwaan gelinaa waayo, ma ogin tan uu Ilaah ku hadlayo ama uu wax nagu barayo, waayo, xataa haddii aan ka akhrino Bilowgii cutubka kowaad wixii ka bilaabato waxaa inoo cad in Ilaah uu wax kasta wanaag u samayay laakiin gadaal bay wax kasta ka qaribmeen taa oo aan doonista Ilaah ahayn. Waxaa jiraan tusaalooyin badan oo arintaan ku saabsan oo aan Kitaabka ka akhrinayno,
v Ilaah wuxuu Ibraahim kula taliyey inuu nolosha wiilka ku badbaadiyo wanka jaqda ku jiray sida aan uga akhrinayno Bilowgii 22:13 waxaana qoran sida tan, “Markaasaa Ibraahim indhihiisii kor u taagay, oo wax fiiriyey, oo wuxuu dabadiisa ku arkay wan geesaha kayn kula jira. Markaasaa Ibraahim tegey oo wankii soo kaxeeyey, oo wuxuu u bixiyey allabari guban meeshii wiilkiisa.”
v Ilaah wuxuu sameyey inay gabadhii Fircoon ay badda ku qabaysato meel u dhow meesha Muuse lagu qariyey si ay u aragto wiilka Muuse oo ay u badbaadiso iyadoo ka dhigatay cunugeeda. Baxniintii 2:1-10 oo leh, “Markaasaa waxaa tegey ini reer Laasi ah, oo wuxuu guursaday gabad reer Laawi iyana ah. Markaasaa naagtii uuraysatay oo waxay dhashay wiil; oo markay aragtay inuu ilmo wanaagsan yahay, ayay qarisay in saddex bilood ah. Oo markay in dambe qarin kari weyday, ayay waxay soo qaadday abxad caws duur ah, oo intay dhoobo iyo daamur ku malaastay ayay wiilkii ku ridday, oo waxay dhex gelisay duur webiga qarkiisa ka baxay. Walaashiisna waxay taagnayd meel ka fog, inay ogaato wixii isaga lagu samayn lahaa. Markaasaa gabadhii Fircoon webiga timid inay maydhato. Gabdhihii addoomada u ahaana waxay socdeen webigii dhenaciisa. Markaasay iyadu waxay aragtay abxadda duurka ku dhex jirta, oo waxay u diratay gabadhii addoonta u ahayd inay u keento. Markaasay furtay, oo waxay aragtay wiilkii; oo bal eeg, yarkii waa ooyay. Kolkaasay u naxariisatay, oo waxay tidhi, kanu waa carruurtii Cibraaniyada midkood. Markaasaa walaashiis waxay gabadhii Fircoon ku tidhi, ma kuugu yedhaa naagaha Cibraaniyadaha middood inay kuugu nuujiso ilmaha? Gabadhii Fircoonna waxay ku tidhi iyadii, Haah, tag. Gabadhiina way tagtay oo waxay u yeedhay yarkii hooyadiis. Markaasaa gabadhii Fircooon waxay ku tidhi iyadii, Tag, oo ilmahan qaad oo ii nuuji, oo anna waxaan ku siin doonaa mushahaaradaada. Markaasay naagtii yarkii qaadday oo nuujisay. Yarkiina waa koray, markaasay u keentay gabadhii Fircoon, oo wuxuu u noqday wiilkeedii. Oo waxay magiciisii u bixisay Muuse, oo waxay tidhi, Maxaa yeelay, anaa biyihii ka soo bixiyey.”
v Waxaa kale oo aan arkaynaa in Markii Bawlos shirqool loo dhigayey uu mid ay isaga wax iisu yihiin uu maqlay uuna ugu digay Bawlos oo saa bay noloshiisa ku badbaaday. Falimaha Rasuullada 23:12-22 waxaa dhigan, “Oo markii ay maalin noqotayna, ayaa Yuhuuddii urur samaysteen oo nidar wada galeen iyagoo leh, waxba cuni mayno, waxbana cabbi mayno ila aan Bawlos dilno mooyaane. Kuwa isku dhaartayna waxay ka badnaayeen afartan. Markaasay u yimaadeen wadaaddadii sare iyo waayeelladii, oo waxay ku yidhaahdee, Nidar weyn ayaannu wada galnay, oo waxaannu isku dhaarsannay inaannaan waxba dhadhamin ilaa aannu bawlos dilno. Haddaba idinka iyo shirkuba waxaad sirkaalka sare garansiisaan inuu isagii idiin keeno sidii idinkoo doonaya inaad aad u sii garataan waxyaalaha ku saabsan isagii; annaguna, intuusan soo dhowaan, diyaar baannu nahay inaannu dilno isagii.
v Laakiin Bawlos wiilkuuu abtiga u ahaa wuxuu maqlay gaadmadoodii, markaasuu yimid oo qalcaddii galay oo Bawlos u warramay. Markaasaa Bawlos wuxuu u yeedhay boqol-u-taliyayaashii midkood oo ku yidhi, wiilkan u gee sirkaalka sare, maxaa yeelay, war buu qabaa inuu u sheego. Sidaas daraaddeed ayuu kaxeeyey oo u geeyey sirkaalkii sare oo ku yidhi, Bawlos oo maxbuuska ah ayaa ii yeedhay, oo wuxuu I weydiistay inaan kuu keeno wiilkan oo war qaba inuu kuu sheego. Markaasaa sirkaalkii sare gacanta ku qabtay isagii oo gees ula leexday oo gooni ahaan u weydiiyey isagoo leh, waa maxay warkaad qabtaa inaad ii sheegtid? Markaasuuu ku yidhi, Yuhuuddu waxay ku heshiiyeen inay kuu weydiistaan inaad berrito Bawlos shirka hor keentid sidii adigoo doonaya inaad u sii weydiisatid wax ku saabsan isagii. Haddaba yaanay ku oggolaysiin; maxaa yeelay, waxaa isagii gaadaya kuwa ka badan afartan nin oo iyaga ka mid ah, kuwaasoo nidar galay inayan wax cunin, waxna cabbin ilaa ay isaga dilaan; haddana diyaar bay yihiin, iyagoo ballanqaad kaa filanaya. Haddaba sirkaalkii sare wiilkii buu iska diray isagoo ku amraya oo leh, Ninna ha u sheegin inaad waxyaalahan ii muujisay.”
v Waa inaan marxalad kastoo aan la kulmayno Ilaah weydisanaa inuu wax naga barayo oo doonistiisa ay tahay iyo in kale laakiin waxaa kale oo aan ku xusuusinaya ha ilowbin in la taliyayaalka badani ay faa’ido badan leeyihiin sida ku dhigan Maahmaahyada 24:6. Haddana in kastoo ay saa tahayna ha ilowbin inay jiraan saddex shay oo muhim ah oo ay ka mid yihiin, Haddii aad tahay mid Ilaah ku tiirsan ama mar kastaba Ilaah isku haleeya, iska jir kuwa kula taliyaan si aynan u ahaanin kuwa aan rumaysad lahayn oo aan Ilaah ka baqaynin, maxaa yeelay, way ku habsaamin karaan oo waxay kuu jiidi karaan xagga doonista dunida taa oo Ilaah doonistiisa kaa fogaynayso. Maahmaahyada 25:19 waxaa qoran, “In wakhtiga dhibaatada nin aaminlaawe ah laysku halleeyo waa sida ilig jaban iyo cag murkacatay oo kale.”
v Maraha qaarkoodna iska jir kuwa aad u malaynaysid inay yihiin kuwa Ilaah adeecsan waayo, waxaa jiraan kuwa kor ka wanaagsan laakiin uurka qurun ka ah oo doonayaan inay dadka Ilaah habaabiyaan sida qoran, “Oo waxay noqotay markii boqorkii gurigiisii degay oo uu Rabbigu nasasho ka siiyey cadaawayaashiisii ku wareegsanaa oo dhan, in boqorkii Nebi Naatan ku yidhi, Bal eeg haatan, anigu waxaan degganahay guri qori kedar ah laga sameeyey, laakinse sanduuqii Ilaah wuxuu dhex yaal daahyo. Markaasaa Naataan wuxuu boqorkii ku yidhi, tag, oo wax alla wixii qalbigaaga ku jira samee, waayo, Rabbiga ayaa kula jira. Oo isla habeenkaas Rabbiga eraygiisii baa Naatan u yimid oo ku yidhi, tag, oo waxaad addoonkayga Daa’uud ku tidhaahdaa, Rabbigu wuxuu ku leeyahay, war guri aan dego ma ii dhisaysaa? Waayo, guri ma degin ilaa maalinti aan reer binu Israa’iil ka soo bixiyeydalkii Masar iyo tan iyo maantadan, laakiinse waxaan ku dhex socday reer binu Israa’iil oo dhan, qabiilooyinka reer binu Israa’iil oo aan ku amray inay quudiyaan dadkayga reer binu Israa’iil ma midkood baan eray kula hadlay oo miyaan ku idhi, war maxaad iigu dhisi weydeen guri kedar ah? Haddaba waxaad addoonkayg Daa’uud ku tidhaahdaa, Rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay, ana kaa soo kexeeyey xeradii idaha iyo idihii aad raacasay, inaad ahaatid amiir u taliya dadkayga reer binu Israa’iil, waanan kula jiray meel kastoo aad tagtayba, oo cadaawayaashaadii oo dhanna hortaadaan ka baabi’iyey. Oo waxaan kuu bixin doonaa magac weyn, oo la mid ah magacyada kuwa waaweyn oo dhulka jooga. Oo dadkayga reer binu Israa’iilna meel baan u dooran doonaa, oo waan ku beeri doonaa inay meeshooda degganaadaan oo ayan mar dambe dhaqdhaqaaqin, ama ayan ilmaha sharku mar dambe dhibin sidii markii hore, iyo tan iyo maalintii aan xaakinno ku amray inay dadkayga reer binu Israa’iil u taliyaan. Oo adiga waan kaa nasin doonaa cadaawayaashaada oo dhan. Oo weliba Rabbigu wuxuu kuu sheegayaa inuu reer kuu yeeli doono. Oo markii cimrigaagu dhammaado, oo aad la seexato awowayaashaa, farcankaaga kaa dambeeya oo kaa soo bixi doona ayaan sara kicin doonaa, oo boqortooyadiisana waan dhisi doonaa. Oo isna guri buu magacayga u dhisi doonaa, oo xoog baan u yeeli doonaa carshiga boqortooyadiisa weligiis.” (2 Samu’eel 7:1-13)
Hase yeeshee, ugu dambaysta qofka waa inuu ogaado qaas ahaan waxa ay doonista Ilaah noloshiisa u tahay. Marka waxaa la gaadhay wakhti kale oo aan eegeyno qaybta ugu dambayso oo ka hadlayso dhibaatooyinka aan nolosha kala kulano taa oo ah ama aan ku magacaabnay shakiga oo waxaan u qabaa inaad aad uga heli doontid oo aad wax uga baran doontid. Shakiga dhibaato weyn ayuu ka geystaa rumaysadka baniaadmiga maxaa yeelay, inta badan wuxuu keenaa niyad jab weyn kaa oo qofka xataa hadduu marka hore Ilaah rumaysnaa uuna adeecsanaa inuu dib u noqdo oo uu dunida iyo starexeeda dhex galo kaa oo in muddo ah keliya ku eg. Dadka markay aad u silcaan waxaa jiraan waxyaala badanoo ay ku fikiraan waxaana ka mid ah,
- Ma anaa habaaran?
- Ma waalidkaygaa habarnaa?
- Miyaan dembaabay?
- Runtii tani ma doonista Ilaah baa? Iyo wixii la mid ah.
Su’aalada noocan ah waxaan ku dari karnaa qaybtan aan haatan ka hadlaya oo ku saabsan shakiga maxaa yeelay, dadka inta badan way ku adagtahay si ay u ogaadaan dhinicii ay u dhigi lahaayeen waxyaalaha qaarkood oo ay noloshooda kala kulmaan ee bal aan aragno sida aan su’aaladan uga jawaabi lahayn.
“Waayo, isagu aad uma xusuusan doono wakhtigii uu noolaa, maxaa yeelay, Ilaah baa farxad qalbigiisa geliya.” (Wacdiyaha 5:20) Shakigu muxuu yahay? Shakigu waa markii qof uusan hubin xaqiiqda wax ku saabsan rumaysadka ama wax aan qumaati dhabteeda aan la hubin. Haddii aan shakiga kaga hadalno xagga kuwa rumaysadka leh ama kuwa Masixiinta ah, waxay ku salaysantahay rumaysadarroda Ilaah iyo eraygiisa loo leeyahay in kasta oo ay suurtagal ahayn in uu qof runta muuqata inkiro sida aan uga akhrinayno Sabuurrada 14:1 waxaana qoran sida tan, “Nacasnku wuxuu qalbigiisa iska yidhaahdaa, Ilaah ma jiro. Iyagu way kharriban yihiin, oo waxay sameeyeen shuqullo karaahiyo ah, ma jiro mid wanaag sameeyaa.” Qofka rumaysadka leh wuxuu shakin karaa markuu dembaabo ama markay xaalad ku adkaato oo uu xagga xiriirka uu Ilaah la leeyahay ay is af garan waa ka timaado sida aan Kitaabka uga akhrinayno qaas ahaan 1 Yooxanaa 3:9aad waxayna leedhay sida tan, “Ku alla kii Ilaah ka dhashay dembi ma falo; maxaa yelay, Ilaah dabiicaddiisu way ku sii jirtaa isga; oo ma dembaabi karo, waayo, wuxuuka dhashay Ilaah.” Qofka rumaysadka leh wuxuu ka shakin karaa awoodda iyo wanaagga Ilaah. Shakiga nocaan ahna waxaa keeni karaan waxyaalahan aan arkayno oo ay ka mid yihiin,
1. Jirrada, silaca, xaqdarrada, ka soo horjeedka qofka macaarad lagu yahay, dhaqaalo xumada, dhibaatooyinka qoyska, dhibaatooyinka wadanka, ama baryo uu Ilaah weli ka jawaabin. Waxyaalahan iyo kuwa lamid ah oo aan meeshaan ku soo koobi karin ayaa ka mid ah waxyaalaha qofka rumaysadka leh ka niyad jebiyaan wanaagga Ilaah.
2. Waa inaan ogaano in inta badan ay adagtahay in doonista Ilaah aan ka ogaano marxaladaha aan kala kulano nolosheena.
3. Shakiga oo dhan haddii dib loo eego wuxuu ku lug leeyahay rumaysadarrada erayga Ilaah loo leeyahay waayo, erayga Ilaah baan wax kasta ka baran karnaa oo xataa waxyaalaha nagu adag Ilaah eraygiisa buu nagula hadlaya si aan u ogaano sida aan ula macaamilmi lahayn dhibtadaasi.
4. Mar alla markuu shaki ku soo gelayo ogow shakiga waa dembi oo waxaa lagaaga baahan yahay inaad Ilaah hor keentid oo aad qiratid dembigas oo tan ayaa ah tilaabada ugu horeyso oo kuu haboon inaad qaadid markuu shaki kuugu dhasho oo aad kaga shakinaysid xiriirka aad Ilaah la leedahay.
Si aan ku ogaano meelaha uu shakiga ka soo askunmay bal aan ka akhrino Xabaquuq 1:2 oo dhigan sida tan, “Rabbiyow, ilaa goormaan kuu qayshadaa, oo adna aad I maqlayn? Dulmi baan kaaga qayshadaa, oo namana aad badbaadisid.” Meesha uu shakiga ka aasaasmay yaa sheegi karaa? Waxaan ka heleynaa Bilowgii 3:1 oo leh sida tan, “haddaba abeesadu way ugu khiyaano badnayd bahal kasta ee duurka jooga oo Rabbiga Ilaah ahu sameyey. Oo waxay naagtii ku tidhi, Ilaah miyuu idinku yidhi, waa inaydnaan waxba ka cunin geed kasta oo beerta ku yaal?” Tan ayaa ahayd meesay ugu horeysa ee uu shakiga baniaadmiga kaga yimid oo sidaa daraaddeed Kitaabka qoduuska wuu noo sheegaya wax kasta oo aan dunidaan kala kulmayno sida ay dunida ku soo gashay waayo, waa erayga Ilaah oo loogu talo galay in baniaadmiga ay hogaanim ka helaan. Shaydaanka waxaa kale oo uu isku deyay inuu Ayuub Ilaah shaki ka geliyo oo uu Ilaah inkaaro taa oo aan iyaduna ka akhrinayno Ayuub 1:11 oo leh, “Laakiinse haddaba bal gacantaada soo fidi, oo wuxuu haysto oo dhan taabo, oo isna sida runta ah, hortaada wax xun buu kaaga sheegi doonaa.”
Shaydaanka wuxuu u joogaa inuu rumaystayaasha Ilaah adeecsan burburiyo iimaankoodana baabi’iyo waayo, Kitaabka ayaa noo sheegaya haddaan ka akhrino 1 Butros 5:8 oo leh, “Feeyignaada oo soo jeeda, waayo, cadowgiinna Ibliiska ahu sida libaax ciyaya ayuu u wareegaa oo uu doondoonaa cid uu liqo.” Shakiga ay kuwa Ilaah rumaysan kala kulmaan noloshooda wuxuu ka yimaadaa xagga xiriirka ay Ilaah la leeyihiin maxaa yeelay, shaydaanka wuxuu doonaya inuu xiriirka isaga ah burburiyo si ay bedelkii ay Ilaah ugu adeegi lahaayeen ay isaga ugu adeegaan. Waxaan ka akhrin karnaa Yaquub 1:8 oo leh sida tan, “laba qalbiiluhu wuu ka rogrogmadaa socodkiisa oo dhan” Tan waxay inoo tilmaamaysa in xataa dadka Ilaah adeecsan haddii ay go’aankooda ay Ilaah ugu adeegayaan ay adkaynin oo ay u ogolaanin in Ruuxa Qoduuska ah ee Ilaah noloshooda oo dhan uu hogaaminin, sheydaanka wuxuu u keenaya rogrogmasho uu noloshooda kaga leexinaya dhabta jirta ee nolosha. Haddana haddii aan sii akhrino Efesos 4:14 waxaan arkaynaa in Bawlos arintaa ka sii hadlayo oo wuxuu leeyahay markay Masixiinta ka shakinayaan wax baridda Masiixnimada weli carruur bay ka yihiin xagga rumaysadkooda oo Shaydaanka si dhaqso ah ayuu iyaga ku dhuufsanaya. Haddii aad rumaystayaasha ka mid tahay oo aad doonaysid inaad shakiga ka hor tagtid, waa inaad Ilaah rumaysatid oo aad weliba u addeecdid isaga si qumaati ah oo ma ahan oo keliya markaar faraxsan.
Haddii aan doonaysid inaad ogaatid daawada shakiga ba aan horta sida caadiga ah horseedkayna ka helno Kitaabka qoduuska ah taa oo aan qaas ahaan kaga akhrinayno Boqorada Kowaad 18:21 oo sidaan qoran, “Markaasaa Eliyaah u soo dhowaaday dadkii oo dhan, oo wuxuu ku yidhi, war ilaa gormaad laba ra’yi u dhexaynaysaan? War haddii Rabbiga Ilaah yahay isaga raaca, laakiinse haddii Bacal ilaah yahay isaga raaca. Oo dadkiina isagii xataa eray keliya uguma jawaabin.” Daaweynta shakiga waxay ku xiran tahay shayga laga shakinayo. Hase yeeshee, dhabta arinta kuma jirto kan laga shakinayo laakiin waxay ku jirtaa kan wax shakinaya. Rumaystayaasha doonayaan inay shakiga ka hor tagaan waxaa jiraan tilaabooyin looga baahan yahay inay qaadaan kuwa oo ay kamid yihiin, Marka ugu horeyso shakigaada oo dhan sida aan hore u soo nidhi waa dembi oo waxaa lagaaga baahan yahay inaad ka toobad keentid maxaa yeelay, qofka hadduu Ilaah iyo eraygiisa shaki uga jiro nolosha oo dhan wuu ka shakinaya. Sidaa daraaddeed waa inaad qirataa dembiga shakiga si uu Ilaah kaaga saaro oo uu jidka saxda ah kuugu toosiyo. Rooma14:23aad waxay arintaan ka leedahay, “Laakiinse kii shakiya, hadduu cuno, waa xukuman yahay, maxaa yeelay, rumaysad wax kuma cuno, oo wax kastoo aan rumasydka ka imaninu wa dembi.” Haddii aan Cibraaniyada 11:6 akhrinana waxay leedahay, “Oo rumaysad la’aantis ma suurtowdo in isaga laga farxiyo, taas aawadeed kan Ilaah u yimaadaa waa inuu rumaysto inuu jiro oo uu yahay kan uu abaalguda kuwa isaga doondoona.”
Ilaah wuxuu naga balan qaaday inuu noo cafinayo dembi kasta oo aan isaga daacadnimo ugu qirano sidaanba horey uga soo aragnay 1 Yooxanaa 1:9aad waxaana dhabteeda dhigan sida tan, “Haddaynu dembiyadeenna qiranno, isagu waa aamin iyo caadil inuu demiyadeenna inaga cafiyo, oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan.” Waa inaad garataa waxyaalaha uu rumaysadka Masixiinta ku salaysan yahay. Masixiinta maadama ay ogyihiin waxa ay aamisanyihiin cabsi haba yaraatee kaga ma jirayso wax alla wixii noloshooda ay kala soo gudboonadaan. Waxaa jiraan waxyaala uu qofna muran ka keeni karin oo ay nolosha Masixiinta ku dhisantahay taa oo ay ka mid yihiin,
1. Sarakaca Masiixa
2. Qabriga maydhan
3. Siduu xertiisa ugu muuqday markuu sarakacay
4. Is bedelkii xertiisa ku dhacay
Maadama uu sarakaca run yahay waxaan rumaysannahay in wax alla wuxuu Kitaabka qoduuska ah sheegayo ay run mooyaane ay wax been ah ku jirin. Xaqiiji xiriirka aad Ilaah la leedahay in runtii aad dembii tahay iyo inaad Ilaah hortiisa daacad ku tahay maxaa yeelay, Kitaabka wuxuu leeyahay haddii aan akhrino 2 Korintos 13:5, “Isjirraba inaad iimaanka ku jirtaan iyo in kale, oo bal istijaabiya. Oo miyeydnaan is-ogayn in Ciise Masiix idinku jiro haddaydnaan ahayn kuwo aan loo bogin.” Badbaadada waxay ka timaadaa rumaysadka la rumaysto Ciise Masiix oo ilaa noloshaada ay ka badbaadeyso oo aad xiriir cusub Ilaah kala yeelaneysid, waxaa kulu soo gudboonaani doonaa dhibaatooyin iyo shaki fara badan. Waxaa lagaaga baahan yahay inaad erayga Ilaah qalbi furan ku akhrisid waayo, Kitaabka wuxuu leeyahay, “Haddaba rumaysadku wuxuu ka yimadaa maqlidda, maqlidduna waxay ku timaadaa hadalka Masiixa.” (Rooma 10:17)
Waxa keliya oo rumaysadkeena noo adkaynayo waa akhriska aan Kitaabka qoduuska ah akhrinayno oo aan ku ficil qaadayno wax alla wuxuu inoo farayo. Hase yeeshee, waa inaan dhabta wax barridda uu Kitaabka barayo aan qabsanaa. Kitaabka wuxuu leeyahay, “Ilaa aan imaado, akhriska iyo waaninta iyo waxbaridda u digtoonow. Nafsaddaada iyo cilmigaagaba u digtoonow. Oo waxyaalahan ku sii soco, waayo, haddaad yeeshid, nafsaddaada iyo kuwa ku dhegaystaba waad badbaadin doontaa.” (1 Timoteyos 4:13, 16 ) “Qorniin kastaa wuxuu ku ahaaday Ruuxa Ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda, iyo cananashada, iyo hagaajinta, iyo edbinta xagga xaqnimada; in ninka Ilaah u ahaado mid dhan oo aad loogu diyaariyey shuqul kasta oo wanaagsan.” (2 Timoteyo 3:16,17). “Laakiinse adigu ku hadal waxyaalaha ku habboon cilmiga runta ah. Oo ayan wax ka xadin, laakiin waa inay aaminnimo wanaagsan oo dhan muujiyaan, inay si kasta cilmiga Ilaaha Badbaadiyeheenna ah ammaan ugu soo jiidaan.” (Tiitos 2:1,10)
Sida keliya oo aad shikiga uga hor imaani kartid waa inaad ahaatid qof noloshiisa ay ku tiirsantahay baryada maxaa yeelay, tukashada badan waxay waaya arag kaaga dhigaysa codsiya aad hore Ilaah uga codsatay oo laguu jawaabay taa oo kuu cadayn doonto in haddii aad shakigaada Ilaah u dhiibtid uu kaa saaraya wuxuuna ku siinaya waxa uu doonaya inaad ka baratid marxaladdaas. Iimaankaada wuu sii barbaaraya. Sida aan horey u soo aragnayba ma inkaarnin laakiin silica aan inta badan dunina kula kulano waxaa weeyaan wax nolosha ka mid ah waayo, haddaanan nala tijaabinin ama aan nala jirrabin de rumaysadkeena sida uu ku dhismayo waa sidee? Sidee baan ku ogaanaynaa inuu Ilaah na caawiyo markaan dhibaysan nahay waayo, dhibka ayaan Ilaah ka barinaa inuu naga saaro ama uu ku guto sida ay doonistiisa tahay ka dibna iimaankeena wuu dhismaya markuu Ilaah baryadeena iyada ah nooga jawaabo. Si kastoo aan u silicno, hal keliya ayaa nagu waajib ah inaan iska dhowrno; waa inaan Ilaah hortiisa wax dembi ah aan ku samaynin maxaa yeelay, haddii aan wax xadgudub ah Ilaah hortiisa ku samaynin runtii kama shakin karno waxyaalaha aan dhex marayno intaan dunidan ku noolnahay.
Baryadu waa habka keliya uu baniaadmiga Ilaah kula xiriiro oo weliba kula hadli karo, waayo, baryada ma ahan keliya Ilaah wax u sheegashada laakiin isaguna wuu nagula hadlaa maxaa yeelay, markaan wax ka barino waa inuu noo jawaabo siduu ku jawaababa. Dhib kasta oo aan nolosha kala kulanaa waa inaan ilowbin waxaan leenahay Aabbaheena jannada ku jira oo wax kasta awooda. Baryada la sheegaya waxay leedahay habab badan sida ay arinba mid kale uga hor imaanayso waxaana ka mid ah,
1. Saraysinta Ilaah Baryadeena waa inaan Ilaah ku saraysiina horta intaanan wax faa’idadeena ah ama dhibaatooyinkeena ula tegin isaga sida aan uga akhrinayno Daanyeel 4:34-35aad waxaana qoran sida tan, “Oo markii wakhtigii dhammaaday ayaan anigoo ah Nebukadnesar indhaha kor u taagay, waxgarashadaydiina way ii soo noqotay, markaasaan ku mahad naqay ka ugu sarreeya, waanan ammaanay oo ciseeyey kan weligiis nool; waayo, dowladnimadiisu waa dowladnimo aan weligeed dhammaanayn, boqortooyadiisuna waxay raagtaa fac ilaa fac; oo kuwa dhulka deggan oo dhammu isaga lama sinna, siduu doono ayuu ciidanka samada iyo dadkadhulka degganba ka yeelaa; mana jiro mid gacantiisa joojin karaa ama ku odhan karaa, maxaad samaynaysaa?”
2. Qirashada dembiga sida aan uga akhrinayno 1 Yooxanaa 1:9aad waxaana qoran sida tan, “Haddaynu dembiyadeenna qiranno, isgu waa aamin iyo caadil inuu demiyadeenna inaga cafiyo, oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan.”
3. In Ilaah loo baryo kuwa amarada leh sida aan uga akhrinayno 1 Timoteyos 2:1-3 waxaana qoran sida tan, “Sidaas daraaddeed ugu horraysta waxaan kugu waaninayaa inaad Ilaah u baridid, oo aad u tukatid, oo aad u ducaysid, oo aad u mahad naqdid dadka oo dhan, khusuusan boqorrada iyo kuwa amarka lehba, inaynu nolol xasillon oo nabdaysan ku noolaanno, innagoo si walba cibaado iyo maamuus u leh. Taasu way wanaagsan tahay, waana mid Ilaaha Badbaadiyeheenna ahu aqbali karo.”
4. Waa inaan dadka kale oo dhibaysan Ilaah u barinaa sida noogala amray Yacquub 5:14-15aad waxaana qoran sida tan, “Mid bukaa ma idinku dhex jiraa? Ha u yeedho waayeellada kiniisadda, oo iyagu ha u duceeyeen, oo saliid ha ku mariyeenmagaca Rabbiga. Ducaddii rumaysad lahu way bogsiin doontaa kii buka, oo Rabbigu waa sara kicin doonaa, oo hadduu dembaabay waa loo dembi dhaafi doonaa.”
5. Ugu dambaysta waa inaan ilowbin inaan Ilaah ugu mahad celino baryada uu naga ogolaaday sida aan uga akhrinayno Filiboy 4:6aad oo dhigan sida tan, “Waxba ha ka welwelina, laakiinse wax kastaba baryadiinna Ilaah ku ogeysiiya tukasho iyo duco mahadnaqid la jirto.” Waxaan soo aragnay tillaabooyinka uu qofka raaci karo markuu baryada gelaya haddana waxaan doonaya inaan wax ka sheego waxa qofka looga baahan yahay inuu guto intuusan Ilaah hor tegin ama uusan baryada bilaabin,
1. Qalbi nadiifsan waa arin muhim ah inuu qofka lahaado qalbi nadiifsan intuusan Ilaah hor tegin maxaa yeelay, Ilaah qalbiga wasakhda ah dad kama lahan hadduusan weli badbaadin sida aan uga akhrinayno Sabuurrada 66:18,19 waxaana qoran sida tan, “Haddaan dembi qalbigayga ku arkay, sayidku ima uu maqleen, laakiinse sida runta ah Ilaah waa I maqlay, oo codkii baryadaydana dhegtuu u dhigay.”
2. Waa inuu qofka rumaysad lahaado inay waxa uu Ilaah ka baryaya ay noqonayso maxaa yeelay, haddaanu rumaysad lahayn wax kasta oo aan samayno runtii suurtagal ma ahan sida aan uga akhrinayno Matayos 21:22 waxaana qoran sida tan, “Oo wax kasta oo aad tukasho ku baridaan idinkoo rumaysan waad heli doontaa.”
3. Waa inaan magaca Ciise Masiix ku weydisanaa wax kasta oo aan weydisanayno sida aan uga akhrinayno Yooxanaa 14:13aad waxayna leedahay sida tan, “Oo wax alla waxaad magacayga ku weydiisataan, waan samayn doonaa in Aabbuhu ku ammaanmo Wiilka.”
4. Waa inaan barinaa si ay doonista Ilaah u ahaato laakiin ma ahan doonisteena annaga baniaadmiga ah maxaa yeelay, wax yaalaha aan annaga isla doonayno waxaa laga yaabaa inta badan inuu Ilaah nala rabin sida aan uga akhrinayno 1 Yooxanaa 5:14,15aad waxayna dhigaysaa sida tan, “Oo tanu waa kalsoonaanta aynu isaga u qabno, taasoo ah haddaynu wax uun doonistiisa ku barinno, isagu wuu ina maqlaa, oo haddaynu og nahay inuu inaga maqlo wax alla wixii aynu ka barinno, waxaynu og nahay inaynu leennahay waxayaalihii aynu isaga ka barinnay.” Tan ka sokow waxaa dhici kartaa dadka qaarkood inay is weydin karaan anigu waxyaalahan oo dhan waan samayey mana helo baryadayda de maxaa iga maqan oo aan samayn? Xaaladda iyada ah waa mid baniaadmi kasta ka haysato waxaanna doonaya inaan lix tillaabatood kaga baxo taa oo aan wax kasta saldhig kaaga dhigaya Kitaabka qoduuska ah,
1. Midda ugu horeysa waxay ahaani kartaa in noloshaada uu dembi ku jiro sida aan uga soo akhrinayba Sabuurrada 66:18, 19 oo dhignayd sida tan, “Haddaan dembi qalbigayga ku arkay, sayidku ima uu maqleen, laakiinse sida runta ah Ilaah waa I maqlay, oo codkii baryadaydana dhegtuu u dhigay.”
2. Waxaa laga yaaba waxa aad baryaysid inay tahay wax aad adiga isla rabtid laakiin ay ahayn wax muhim u ah noloshaada maxaa yeelay, Ilaah wuu og yahay waxa noo wanaagsan maxaa yeelay, isagu waa aabbahayna jannada ku jira sida aan uga akhrinayno Yacquub 4:3 waxaana qoran sida tan, “Waad weydisataan, mana heshaan, waao, si xun baad u weydiisataan inaad ku bixisaan damacyadiinna aawadood.”
3. Waxaa laga yaabaa inaad Ilaah baryaysid laakiin uu qalbigaada shaki kaga jiro in arintaas ay kuu hagaagi doonto sida uu Kitaabka noogu sheegaya isla Yacquubkan cutubkiisa 1:5-7aad oo dhigayso sida tan, “Laakiin haddii midkiin xigmad u baahan yahay, ha ka baryo Ilaah, kan kulli si deeqsinimo ah u siiya isagoo aan canaanan, oo waa la siin doonaaye. Lakiin rumaysad ha ku baryo, isagoo aan shakiyayn, waayo, kii shakiyaa wuxuu la mid yahay hirka badda oo dabayshu kaxayso oo rogrogto. Ninkaasu yuusan u malayn inuu Rabbiga wax ka heli doono.”
4. Waxaa dhici kartaa inay noloshaada ku jirto adeec daro uu Ilaah doonaya inaad horta ka toobad keentid nolosha aad ku nooshahay sida aan uga akhrinayno Maahmaahyadii 28:9 waxayna leedahay sida tan, “Kii dhegtiisa ka leexiya inuu sharciga maqlo, xataa baryootankiisu waa karaahiyo.”
5. Waxaa laga yaabaa inay noloshaada ka muuqato naxariis darro maxaa yeelay, Ilaahay inta badan wuxuu noo barakadayaa inaan barakada uu na siiyey aan dadka kale la sii qaybsano laakiin haddii aan teena oo keliya ka fekerayno waxaa laga yaabaa Ilaah inuu naga gaabsado sida aan uga akhrinayno Maahmaahyadii 21:13 waxayna leedahay sida tan, “Kii dhegihiisa u fureeyaa si aanu qaylada miskiinka u maqlin, isaga qudhiisuna wuu qaylin doonaa, laakiinse lama maqli doono.” Ilaahay naga ma dhigo kuwa naxariis daran oo ay saa inkaarta Ilaah ugu dhacdo laakiin ha naga dhigo kuwa dadka kale u qalbi banaan oo ay naxariista Ilaah ka buuxdo waayo, intaan sii bixinayno ayuu Ilaahna na sii siinaya.
6. Midda qaybtan ugu dambayso oo baryada ka reebi karto inaanan laga jawaabin waxay ahaani kartaa kibir maxaa yeelay, kibirka inta badan wuxuu dadka ka dhigaa kuwa isla weyn oo aan xataa Ilaah aan tala saaran laakiin iyaga uun u malaynayaa inay isku filan yihiin. Markay Ilaah u soo jeestaan Ilaah waxba ugu ma jawaabayo ilaa ay ka toobad keenaan kibirka ah maxaa yeelay, sidaan u soo aragnayba baryada oo dhan waxaa ka horeyaa toobadkeenka dembiyadeena aan ka toobadkeeneyno si ay qalbiyadeena Ilaah hortiisa nadiif ugu ahaadaan oo uu isagu noo qaabilo. Midda kibirka ku saabsan. Kitaabka wuxuu leeyahay, “Farrisigii intuu istaagay ayuu waxyaalahan isugu tukaday, Ilaahow, waxaan kuugu mahad naqayaa inaanan ahayn sida nimanka kale oo wax dulma, iyo kuwa xaqa daran, iyo dhillayaasha, ama xataa sida cashuurqaadahan. Toddobaadkiiba laba kol ayaan soomaa, waxaan haysta oo dhanna toban meelood ayaan meel ka bixiyaa. Laakiin cashuur qaadihii meel fog ayuu ka istaagay, ma uuna doonaynin inuu indhihiisa cirka u qaado, lakiin laabtiisa ayuu garaacay isagoo leh, Ilaahow, ii naxariiso anigoo dembi leh. Waxaan idinku leeyahay, kan iyo kii kale, kan baa gurigiisa tegey isagoo la caddeyey inuu xaq yahay; waayo, mid kasta oo isa sarraysiiiya waa la hoosaysiin doonaa, oo kii is-hoosaysiiyana waa la sarraysiin doonaa.” Luukos 18:11, 12, 13, 14
Ilaah wuxuu nooga baahan yahay inaan ahaano kuwa is hoosaysiiya maxaa yeelay, sarraysiinta waa mid uu isaga ku dan leeyahay, waayo, annaga xataa haddii aan isa sarraysiino meel aan is gaarsin karno ma jirto. Waxaa jirtaa aayad kale oo ka hadlaysaa is hoosaysiinta inay wanaagsan tahay maxaa yeelay, Ilaah kuwa is hoosaysiiya ayuu sarraysiin doonaa waana tan aan ka heleyno 1 Butros 5:6,7aad waxaana qoran sida tan, “Haddaba sidaas daraaddeed gacanta xoogga leh oo Ilaah iska hoosaysiiya, si uu wakhtigiisa idiin sarraysiiyo. Welwelkiinna oo dhan isaga saara, maxaa yeelay, isagu dan buu idinka leeyahay. Runtii Ilaah dan buu naga leeyahay oo dan buu noo uumay danta iyada ahna ma ahan inaan dunidan ku silicno laakiin wuxuu doonaya inaan adeecidda aan isaga addeecayno aan ku sii adkaysano wax alaate wixii nala soo gudboonaadaba. Si kasta oo aan isku deyno nolosheena inaba ma badbaadin karno laakiin waa Ilaah kan badbaadin karo sidaa daraaddeed waa inaan isku deyin inaan awoodeena isku badbaadino si aan nolosheena u waynin. “ Kan doonaya inuu naftiisa badbaadiyo, waa lumin doonaa, oo kan naftiisa u lumiya aawaday wuu heli doonaa. Waayo, nin maxay u taraysaa hadduu dunida oo dhan helo oo uu naftiisa lumiyo? Ama nin muxuu u bixiyaa naftiisa beddelkeeda?” Matayos 16:25-26
Dadka maanta dunida oo dhan haddii aan eegno Ilaah way ilowbeen oo qofba wuxuu ka soo hor jeedaa baniaadmiga kale oo waxaa lagu dirarayaa dunidan laga wada tegi doono kuwa qaarkoodna waxay doonayaan inay hubka ay hagaajiyeen uu ahaado kan dunida oo dhan ugu sareeya si ay magac ugu yeeshaan amaba ay dunida oo dhan qabsadaan. Laakiin waa tan uu Rabbigeena wedinaye e, nin maxay u taraysaa hadduu dunida oo dhan helo oo uu laakiin naftiisa lumiyo oo uu wax rajo ah xagga Ilaah ka lahayn maalinta xukunka?
Intaanan gebgebaynin qoraaladan waxaan doonaya inaan hal shey ku daro kaa oo ah mid dadka inta badan ay xilka iska saaraan kaa oo ah rumaysadka Ilaah la rumaysto. Dadka qaarkood markii ay maqlaan waxyaalaha Ilaah waxay yidhaahdaan, ‘waan isku deyaya inaan rumaysto waxyaalaha aad ii sheegtay ama aan maqlay’. Laakiin akhristow, waxaan kuugu odhan lahaa ha dhihin waan isku deyaya maxaa yeelay, waxaa lagaaga baahan yahay inaad lahaatid RUMAYSAD. Markuu qofka hafi ku jiro, wuu isku deyaa in alla intii tabartiisa ah si uu biyaha uga baxo laakiin uga dambaysta wuu dhimanaya, laakiin hadduu isku halayo badbaadada uu ka helaya kan isaga badbaadinaya wuu badbaadaya. Haddii aan Kitaabka qoduuska ah ka akhrino Ishacyaah 12:2aad waxaa qoran sida tan, “Bal eega, Ilaah waa badbaadadayda! Waan isku hallayn doonaa, mana baqi doono, waayo, Rabbiga Ilaaha ahu waa xooggayga iyo gabaygayga, oo weliba wuxuu ii noqday badbaadadayda.” Ismaaciil wuxuu ahaa wiilka uu Ibraahim ku helay xagga jidhka si uu ku xaliyo balantii uu Ilaah ka balanqaaday. Wuu isku deyay inuu balantaas ku oofiyo sida ay isaga la tahay. Laakiin kan laga balan qaaday wuxuu ahaa Isxaaq oo ay ahayd in lagu helo RUMAYSAD sida aan uga akhrin karno Rooma 4:3, 5aad.
Dhabtii ma jiro shuqul lagu dooran karo ama uu qof samaysan karo oo gaarayso tan uu Ciise Masiix iskutallaabta ku qabtay si aan aniga iyo adiga u ahaano kuwa dhaxlaan boqortooyada Ilaah oo weliba si annaga oo dembilayaal ahayn aan u ahaano kuwa dembigooda laga qaaday uu mid kale xilka iska saaray kaa oo ah Ciise Masiix kan dembi inoo noqday sida aan uga akhrinayno Kitaabka qoduuska ah gaar ahaan Efesos 2:9. Haddii aan akhrino Ishacyaah 64:6aad waxaa iyadana qoran sida tan, “Waayo, kulligayo waxaannu noqonnay sida wax aan nadiif ahay, oo xaqnimadayada oo dhammuna waa sida dhar wasakh ah, kulligayona waxaannu u engegnay sida caleen oo kale, oo xumaantayadiina sidii dabayl oo kale ayay noo kaxaysata.” Haddii aan isku dayno inaan wax samayno waxaa dhici kartaa inaanan ku gulaysanin! Maxaa yeelay, waxaan Kitaabka ka akhriyey sida tan, “Ku alla kii sharciga oo dhan xajiya oo qaynuun keliya ku gafa, kulli wuu ku eedaysan yahay. Waayo, kii yidhi, ha sinaysan; wuxuu kaloo yidhi, Cidna ha dilin. Haddaanand sinaysanin laakiin aad dad disho, waxaad noqotay ku sharciga ku xadgudbay. Sidii kuwo sharciga xorriyadda lagu xukumi doono, u hadla oo u yeela. Xukunka naxariis uma leh kii aan dadka u naxariisan; naxariistu way ka faantaa xukunka.” (Yacquub 2:10-13aad)
Marka tan maxay cadaynaysaa? Dhabtii waxay noo sheegeysaa inaan Ilaah ku tiirsanaano marxalad kastoo aan ku jirnaba maxaa yeelay, Ilaah, eraygiisa (Ciise Masiix) iyo Ruuxa Qoduuska ah la’aantis wax alla wixii aan isku dayno waxay noqonayaan sida hal biciid lagu lisay. Waxaa laga yaabaa inaad is leedahay de maxaan rumaystaa inaan badbaado? In kastoo aan waxyaala fara badan aan kaga soo hadlay qoraalada aad horey u soo akhrisay waxaan doonaya inaan erayo gaaban ku soo koobo su’aasha ah ‘maxaan samayaa si aaan u badbaado?’ Akhristow, Ilaah inankiisa madiga ah ee Ciise Masiix ayuu kuugu siiyey waddada badbaadada sida aan uga akhriyey Ishacyaah 53:5, 6. aayadaan lixaad waxay ku bilaabanaysaa kuna dhamaanaysaa erayga, “dhamaan” taa oo ah badbaado kulli u wada dhan oo dhibaato baniaadmiga wada haysato loogu talagalay. Adiga waxaa lagaaga baahan yahay inaad aqbashid wuxuu Ilaah ku siinaya Ilaahna wuxuu ku siinaya awoodda aad ku noqonaysid waxa uu kaa doonaya inaad ahaatid maxaa yeelay, haddii aan ka akhrino Yooxanaa 1:12-13aad waxay leedahay sida tan, “Laakiin in alla intii aqbashay, wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan, kuwaasu waa kuwii magiciisa rumaystay, oo aan ka dhalan dhiigga, ama doonistii jidhka, ama dad doonistis, laakiin waxay ka dhasheen Ilaah.”
Masiixi noqoshada iyo carruurta Ilaah noqoshada waa laba arimood oo aan kala maarmin. Markaad Ilaah noloshaada u xilsaaraysid isaguna noloshaaduu bedelaya oo wuxuu kaa dhigaya uun cusub sidaa daraaddeed qaybta Ilaah isla qaybtaada ayay muhim u tahay sida aan uga akhrin karno Yooxanaa 3:7aad. Rumaysadka badbaadada wuxuu kuugu soo gaaraya erayga Ilaah maxaa yeelay, eraygiisa ayaa noo sheegaya sida tan, oo dhigan sida tan, “Runtii, runtii waxaan idinku leeyahay, kii hadalkayga maqla oo rumaysta kii I soo diray, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah, xukunna geli maayo, laakiin dhimashadii ayuu ka soo gudbay oo nolosha u soo gudbay.” (Yooxanaa 5:24) Badbaadadaada waxay ku jirtaa rumaysadka aad rumaysanaysid wuxuu Masiixa ku sameyey. Miyuu ama miyuusan kuu dhiman Ciise Masiix? Waxaad ka akhrin kartaa Falimaha Rasuullada 16:31aad. Waxyaalaha ay dadka ku dhaqmaan si loo arko waa wax aan macna lahayn haddii uu qalbiga nadiif ahayn maxaa yeelay, waa markuu qalbiga qofka nadiif yahay markuu ficilkiisana wanaagsanaani karo. Badbaadada waa sida guurka. Majiro aroos dhici karo haddaysan dhabta ka ahayn labada is guursan rabaan oo ay qalbigooda iska jeclaysan. Maxaa yeelay, waa markuu qalbiga labada ruux ay arinta gasho markay dunida oo dhan u sheegi karaan inay is jeclaadeen oo ay doonayaan inay is guursadaan sida ku qoran Rooma 10:9-19aad.
Ilaah wuxuu badbaadiyaa kuwa dembiilayaasha ah keliya. Adigu ma dembiilaad tahay? Miyaad u baahantahay inaad,
1. BADBAADO heshid oo aad weliba
2. NADIIF ahaatid?
Wax alla wuxuu Ilaah baniaadmiga kale ugu talagalay adiguna wuu kuugu talagalay inaad heshid maxaa yeelay, ku alla kii magaca Rabbiga u yeertaa wuu badbaadi doonaa sida aan uga akhrinayno Rooma 10:13.
Ciise Masiix wuxuu sii sheegay inay jiri doonaan cudurdaar iyo sheegidda wax aan jirin laakiin taasi qofna sabab uma ahaanayso inuu ahaado mid aan ka toobad keenin dembiyadiisa. Baal aan kuugu soo xiro erayadaan aan ka heleyno Kitaabka qoduuska ah oo ahayd sheeko uu Ciise Masiix ugu sheekeeyey xertiisa taa oo aan qaas ahaan uga akhrinayno Luukos 14:16-24aad waxaana qoran sida tan, “Wuxuuse ku yidhi, nin baa casho weyn sameeyey, oo dad badan u yeedhay, oo saacaddii cashada ayuu addoonkiisii u diray inuu kwii loo yeedhay ku yidhaahdo, Kaalaya, waayo, haatan wax waluba waa diyaar. Markaasay kulligood waxay bilaabeen inay fikir keliya ku marmarsiiyoodaan. Kii u horreeyey ayaa ku yidhi, Beer baan iibsaday, oo waa inaan tago oo aan soo arko. Waxaan kaa baryayaa inaad iga raalli ahaato. mid kale ayaa yidhi, waxaan iibsaday shan qindi oo dibi ah, oo waan tegayaa inaan intixaamo. Waxaan kaa baryayaa inaad iga raalli ahaato. mid kale ayaa yidhi, naag baan guursaday, sidaa darteed ma iman karo. Markaasaa addoonkii yimid, oo waxaas ayuu sayidkiisii u sheegay. Kolkaasaa sayidkii gurigu cadhooday, oo wuxuu addoonkiisii ku yidhi, dhaqso jidadka iyo surimmada magaalada u bax oo soo kaxe masaakiinta iyo kuwa laxaadka la’ iyo indhoolayaasha iyo curyaannada. Kolkaasaa addoonkii ku yidhi, Sayidow, waxaad amartay waa la yeelay, oo weli meel baa bannaan. Markaasaa sayidkii wuxuu addoonkii ku yidhi, Jidadka iyo wadiiqooyinka oodaha u bax, oo dadka ku qasab inay soo galaan, si uu gurigaygu u buuxsamo. Waayo, waxaan idinku leeyahay, nimankaas loo yeedhay midloodna cashadayda dhadhamin maayo.”
Maalinta waa maanta saacaduna waa la joogaa oo kan ay nagu waajib tahay inaan dembiyadeena u qirano oo aan uga toobadkeeneynana waa Rabbiga yaqaana qalbiga dadka oo dhan kaa oo aan dadka u ban dhiqin maalinta qiyaamaha oo baniaadmiga oo dhan la xukumi doono laakiin wuxuu noo cadayay inuu soo laaban doono si aan diyaar u wada ahaano si aan mar alla markuu yimaado uu noo yimaado annagoo diyaar u ah xukunka xaqnimada. Haddii aad go’aankaas gaartay waxaan kaa codsanaya inaad qirashadan Masiixeed oo la yidhaahdo QIRASHADA IIMAANKA aad qiratid:
Waxaan rumaysanahay Ilaaha Aabbaha ah, Oo ah Qaadirka uumay samada iyo dhulka, Iyo Ciise Masiix, oo ah inankiisa madiga ah, inuu yahay Sayidkeenna, In Ruuxa Qoduuskaa laga uuraystay,
oo uu ka dhashay Maryan oo bikrad ah, oo uu ku hoos silcay Bontiyos Bilaatos, oo iskutallaabta agu qodbay, oo uu dhintay, oo la aasay, inuu maalintii saddexaad soo noolaaday, oo samada aaday, oo uu haatan fadhiyo gacanta midigta ah oo Ilaaha Aabbaha Qaadirka ah; oo halkaasuu ka iman doonaa inuu xukumo kuwa nool iyo kuwa dhintayba. Waxaan rumaysanahay Ruuxa Qoduuska ah, Kiniisadda Ciise Masiix oo caalamiga ah, ururka awliyada, cafiga dembiga, sarakicidda jidhka, iyo nolosha daa'imiska ah. Aamiin.
Intaanan gebagebada buugan aan u guda gelin waxaan doonaya inaan wax ka taabto arin ku saabsan jaalnimada. Markaad waxyaalahan oo dhan akhrisatay waxaan u malaynaya inay hartay arin kale oo muhim ah taa oo ay kuugu qasban tahay inaad xoogga saartid. Jaalnimada waxaa saldhigga u ah Kiniisadda. Waxaa laga yaaba inaad isweydinaysid su’aasha ah, ‘maxay tahay jaalnimada? Jaalnimada waa wada wadaagga wax kasta oo la haysto.
Hadda waxaad ku biiri kartaa masixiinta kale si aad wax u wada wadaagtaan maxaa yeelay, keligaa ma dhismi kartid maxaa yeelay erayga Ilaah wuxuu leeyahay, “Oo hadduu nin ka adkaado mid keligiis ah kollay laba way hor joogsan doonaan. Xadhig saddex qaybood laysugu soohay dhaqso uma kala go’o.” (Wacdiyaha 4:12) Waa maxay waxyaalaha la wada wadaagayo oo xagga qalbiga laga wada dhismi karo?
1. Maxaa saldhig u ah waxyaalaha la wada wadaago?
I. Dan guud – Tan waxaan ku salaysin karnaa Kitaabka qoduuska ah qaas ahaan Sabbuurada 133:1-3 waxaana qoran sida tan, “Bal eeg, siday u wanaagsan tahay oo ay u wacan tahay inay walaalo wadajir ku degganaadaan! Waa sida saliidda qaaliga ah ee madaxa, oo ku soo dareertay gadhka, Kaasoo ahaa gadhkii Haaruun, oo waxay soo gaadhay daraftii dharkiisa. Waana sida dharabka buur Xermoon, oo ku soo dega buuraha Siyoon, waayo, Rabbigu wuxuu amray inay halkaas ku dhacdo barako, Taasoo ah nolosha tan iyo weligeedba.”
II. Rumaysadka – Runtii rumaysadka waa wax la wada wadaago oo aan hal ruux aan ku ekayn maxaa yeelay, markuu Ilaah dadka u indha furaya si ay u gartaan waxyaalaha doonistiisa ah wuxuu ugu sii tala galay inay kuwii loo indha furay ay kuwa kale la sii qaybasadaan. Falimaha Rasuullada 2:42aad waxaa qoran, “oo waxay ku sii adkaysteen rasuulladu waxay bari jireen iyo xidhiidhka ka dhexeeyey iyaga, iyo kibista jebinteeda iyo tukasho.”
III. Xukunka – Haddii aan sii eegno waxyaalaha wada wadaagga saldhiga u ah waxaan Kitaabka qoduuska ah ka sii arkaynaa in xukunka uu yahay qayb ka tirsan waxyaalaha saldhigga u ah jaalnimada. Butrooska kowaad 3:8aad waxaa qoran sida tan, “Ugu dambaysta waxaan idinku leeyahay, Kulligiin isku maan ahaada, oo isu jixinjixa, oo sida walaalo isu jeclaada, oo isu naxariista, oo is-hoosaysiiya.”
IV. Rajada – Qofku hadduusan rajo lahayn way adagtahay inuu lahaado niyadda wax wada wadaagidda sidaa daraaddeed ayaan Kitaabka qoduuska ah uga arkakynaa in rajada ay tahay ximin ka tirsan saldhigga wada wadaagga sida aan uga akhrinayno Cibraaniyada 11:39,40 waxaana dhigan sida tan, “Kuwaas oo dhammu, iyagoo loo markhaati furay rumaysadkoodii daraaddiis, ayaanay helin wixii loo ballan qaaday; waayo, Ilaah wuxuu hore u arkay wax ka wanaagsan oo inagu saabsan, inaan la’aanteen iyaga kaamil laga dhigin.”
V. Iimaan – Samuelka kowaad 20:30-42 waxaa qoran sida tan, “Markaasaa Saa’uul aad ugu cadhooday Yoonaataan, o wuxuu ku yidhi, Kaagan naag qalloocan oo caasiyad ah inankeed ahow, war sow ma aan ogi inaad wiilka Yesay dooratay adoo ceeb u soo jiidayay naftaada iyo cawrada hooyadaa? Waayo, inta wiilka Yesay dhulka ku noo yahay, aidga iyo boqortooyadaada midna dhismi maayo. Sidaas daraaddeed u cid dir oo soo kexee, waayo, hubaal wuu dhimanayaa. Markaasaa Yoonaataan wuxuu u jawaabay aabbiihiis Saa’uul oo ku yidhi, maxaa loo dilayaa? Oo bal muxuu sameeyey? Kolkaasaa Saa’uul warankiisii ku soo gantaalay si uu u dilo. Sidaasaa Yoonaataan taas ku ogaaday in aabbiihiis maaganaa inuu Daa’uud dilo. Oo Yoonaataanna miiskuu kala kacay cadho kulul, oo bisha maalinteedii labaadna waxba ma cunin, waayo, wuxuu u calool xumaaday Daa’uud aawadiis, maxaayeelay, aabbihiis baa ceeb ku sameeyey. Oo subaxdii dambe ayuu Yoonaataan duurka tegey wakhtigii Daa’uud la ballamay isagoo wata wiil yar. Markaasuu wiilkii yaraa ku yidhi, Orod hadda oo soo doondoon fallaadhaha aan ganayo. Oo intii yarkii sii ordayay ayuu falladh shishadiisa ku ganay. Oo yarkii markuu yimid meeshii Yoonaataan falladhii ku soo ganay ayaa Yoonaataan ka soo daba qayliyey yarkii, oo ku yidhi, War sow falladhii kaama sii shishayso? Oo haddana Yoonaatan wuxuu ka soo daba dhwaaqay wiilkii oo ku yidhi, war dheeree oo dhaqso oo ha joogsan. Markaasaa Yoonaataan yarkiisii soo ururiyey fallaadhihii oo sayidkiisii u yimid. Laakiin yarku waxba ma ogayn Yoonaataan iyo Daa’uud keliya ayaase xaalka ogaa. Markaasaa Yoonaataan hubkiisii yarkii u8 dhiibay, oo ku yidhi, Tag, oo magaaladii gee. Oo isla markiiba kolkii yarkii tegey ayaa Daa’uud ka soo baxay meel Yoonaataan xagga koonfureed ka ahayd, markaasuu wejiga dhulka ku dhuftay oo saddex jeer sujuuday, wayna isdhunkadeen oo isla ooyeen ilaa Daa’uud sii badiyey. Markaasaa Yoonaataan wuxuu Daa’uud ku yidhi, Nabad ku tag, maxaa yeelay, labadeennuba waxaynu isugu7 dhaarannay magaca Rabbiga, innagoo leh, Rabbigu ha inoo dhexeeyo aniga iyo adiga, iyo farcankayga iyo faracnkaaga weligiisba. Markaasaa Daa’uud kacay oo tegey, oo Yoonaataanna magaaladuu galay.”
VI. Silaca – Runtii haddii aan doonayno inaan wax wada wadaagno si aan u cadayno jaalnimadeena waa inaan ogolaano inuu silaca yahay wax saldhig inoo ah sida aan uga akhrinayno Kitaabka. Daanyeel 3:16-30 waxay leedahay, “Markaasaa Shadrak, iyo Meshaak, iyio Cabeednegoo u jawaabeen boqorkii, oo waxay ku yidhaahdeen, Nebukadnesarow, annagu uma baahin inaannu kaaga jawaabno xaalkan. Haddaba hadday saas tahay, Ilaahayaga aannu u adeegnaa waa awoodnaa inuu naga samato bixiyo foornada dabka ah oo ololaysaa; oo isagu waa naga samato bixin doonaa gacantaada, Boqorow. Laakiinse haddaanay ahay, Boqorow, haddaba ogow, inaannaan u adeegayn ilaahyadaada, ama aannaan u sujuudayn ekaanta dahabka ah oo aad qotomisay. Markaasaa Nebukadnesar aad ugu cadhooday Shadrak, iyio Meeshak, iyo Cabeednegoo, wejigiisiina waa beddelmay; kolkaasuu hadlay oo wuxuu ku amray in foornada laga sii kululeeyo toddoba jeer intii hore loo kululayn jiray. Oo wuxuu ku amray niman xoog badan oo ciidankiisa ku jiray inay xidhxidhaan Shadrak, iyo Meeshak, iyo Cabeednegoo, oo ay ku dhex tuuraan foornada dabka ah oo ololaysa. Markaasaa nimankii l axidhixiday iyagoo qaba sirwaaladoodii, iyo khamiisyadoodii, iyo go’yaashoodii, iyo dharkoodkii kaleba, oo waxaa lagu dhex tuuray foornadii dabka ahayd oo ololaysay. Boqorka amarkiisu wuxuu ahaa degdeg, foornaduna aad iyo aad bay u kululayd, sidaas daraaddeed ololkii dabku wuxuu dilay nimankii waday Shadrak, iyio Meeshak, iyo Cabeednegoona waxay iyagoo xidhxidhan ku dhex dheceen foornadii dabka ahay oo ololaysay. Markaasaa Boqor Nebukadnesar yaabay, oo haddiiba kacay; oo intuu hadlay ayuu ku yidhi waaniyayaashiisii, miyaynaan saddex nin oo xidhxidhan dabka ku dhex ridin? Markaasay u jawaabeen oo waxay boqorkii ku yidhaahdeen, Taasu waa run, Boqorow, kolkaasuu jawaabay oo yidhi, Bal eega, waxaan arkaa afar nin oo furan, oo dadka ku dhex socda, ee aan waxyeello gaadhin; oo midka afraad soojeedkiisu wuxuu u egt yahay mid ka mid ah wiilasha ilaahyada. Markaasaa Nebukadneesar wuxuu ag yimid foornada dabka ahayd oo olollaysay afkeedii, oo intuu hadlay buu yidhi, Shadrak, iyo Meeshak, iyo Cabeednegoow, Ilaaha ugu sareeya addoommadiisow, soo baxa, oo halkan kaalaya. Markaasaa Shadrak, iyo Meeshak, iyo Cabeednegoo dabkii ka soo dhex bexeen. Markaasaa amiirradii, iyio taliyayaashii, iyo saraakiishii, iyo boqorka waanaiyayaashiisii, iyagoo isku urursan, waxay arkeen inaanu dabku ka adkaan nimankaas jidhkooda, ama aanu timahoodiina halow marin, ama aan sirwaalladoodii beddelmin, ama aan dadka rutiisii gaadhin. Markaasaa Nebukadnesar hadlay oo wuxuu yidhi, Mahad waxaa leh Ilaaha Shadrak, iyo Meeshak, iyo Cabeednegoo, oo u soo diray malaa’igtiisa, oo badbaadiyey addoommadiisa isagu isku halleeyey, oo beddelay hadalkii boqorka, oo jidhkooda bixiyey, inayan u adeegin, ama u sujuudin ilaah kale Ilaahooda mooyaane. Sidaas daraaddeed waxaan amar ku bixinayaa in dadka kasta, iyuio quruun kasta, iyo kuwa kasta oo kala af ah, oo wax xukun kaga hadla Ilaaha Shadrak, iyo Meeshak, iyo Cabeednegoo, la googooyn doono, guryahoodana laga dhigi doono meel digo lagu tuulo, maxaa yeelay, ma jiro ilaah kale oo sidaas wax u badbaadin karaa. Markaasaa boqorkii Shadrak, iyo Meeshak, iyo Cabeednegoo derejo sare ku siiyey gobolkii Baabuloon.”
VII. Baahida – Runtii waa inay baahi jirtaa si looga fekero sidii wax loo wada wadaagi lahaa sida aan uga akhrinayno Korintooska labaad 8:1-15 waxaana qoran sida tan, “Haddaba walaalayaalow, waxaan idin ogaysiinaynaa nimcada Ilaah oo la siiyey kiniisadaha Makedoniya, si, markii dhib lagu tijaabiyey, farxaddooda badan iyo miskiinnimadooda weyni ay ugu badnaadeen hodantinimada deeqsinimadooda. Waayo, waxaan u marag furayaa finay tabartooda ku siiyeen, oo weliba si dhaafsiisan tabartooda, siday u doonayeen, iyagoo aad nooga baryaya inaannu ka gudoonno hadiyadda qaybta ku leh adeegidda xagga qoduusiinta, oo mana haa sidaan rajaynay, laakiin hortii way isa siiyeen Rabbiga iyo annagaba sidii Ilaah doonayay. Sidaas daraaddeed Tiitos waannu ka barinnay, in siduu hortii u bilaaba, sidaas oo kale uu idiinku dhammeeyo nimcaddatan. Laakiin sidaad wax kasta badnaan uga haysaan xagga rumaysadka, iyo hadalka, iyo aqoonta, iyo dadaalka oo dhan, iyo jacaylka aad noo qabtaan, waa inaad nimcadanna badnaan uga haysaan. U hadli maayo amar ahaan, laakiin inaan dadaalka kuwa kale ku caddeeyo lillaahinimada jacaylkiinna. Waa garanaysaan nimcada Rabigeenna Ciise Masiix in isagoo hodan ah uu aawadiin miskiin u noqday, inaad miskiinnimadiisa hodan ku noqotaan. Oo sidaan ayaan idinkula talinayaa, waayo, tanu way idiin dhaantaa idinkoo ah kuwii sannaddii hore ugu hor bilaabay inay sameeyaan, mana aha inaad samaysaan oo keliya, laakiin waanand doonaysaa. Laakiin hadda shaqaddii dhammeeya, in sidaad diyaar u ahaydeen, aad haddana ugu dhammaysaan waxaad awooddaan. Waayo, haddii diyaar la yahay, sida loo haysto ayaa loo aqbalaa ee ma aha sidaan loo haysan. Waayo, tan u odhan maayo in kuwa kale la daayo oo idinka laydin dhibo, laakiin sida ay isku-midnimadu tahay, wax ka siiya waxa badan ee aad wakhtigan la joogo haysataan, waayo, way baahan yihiin, inay waxooda badan wax idinka siiyaan markaad baahataan, si ay isku-midnimo u dhacdo, sida qoran, Kii wax badan soo gurtay, waxba uma hadhin, kii wax yar soo gurtayna, waxba kama dhinmin.”
2. Akhristow, waxaa jirtaa su’aal kale oo aan u malaynaya in laysweydin karo markuu qof buuggan akhrisanaya, ‘waa kuwee kuwa wax wada wadaaggi karaan?’
I. Waxaa wax wada wadaaggi karaan Aabbaha, Wiilka iyo Masixiinta sida aan kaaga soo jeedin karo Yooxanaha kowaad 1:3 iyo 4aad waxayna leedahay sida tan, “Wixii aannu aragnay oo aannu maqalnay ayaannu idiinka warramaynaa, si aad idinkuna noo soo heleisaan; oo wehelnimadeennu waa mid la jirta Aabbaha iyo Wiilka Ciise Masiix ah. Oo waxaannu waxyaalahan idiinku soo qoraynaa si ay farxaddiinu u buuxsanto.”
II. Masiixa iyo Masixiinta sida ku dhigan Kitaabka qoduuska ah qaas ahaanayd Korintooska kowaad 1:9 waxayna leedahay sida tan, “Ilaah waa aamin, kan xaggiisa laydiinku yeedhay xidhiidhka Wiilkiisa Ciise Masiix ee Rabbigeenna ah.”
III. Ruuxa Qoduuska ah iyo Masixiinta sida ku dhigan Filiboy 2:1,2 “Haddaba haddii ay Masiixa ku jiraan dhiirogelin iyo qalbiqabowjis jacayl ah iyo haddii ay ku jirto walaalnimo xagga Ruuxa iyo haddii ay ku jiraan jixinjix iyo naxariis, farxaddayda buuxiya, inaad isku maan ahaataan oo aad isku jacayl lahaataan, idinkoo isku niyo ah oo isku maan ah.”
IV. Rumaystayaasha sida aan uga akhrinayno Yooxanaha kowaad 1:7 “Laakiin haddaynu nuurka ku socono siduu isaguba nuurka ugu jiro, wehelnimo ayaynu isla wada wadaagnaa, oo dhiigga Cisie, oo Wiilkiisa ah, wuxuu inaga nadiifiyaa dembi oo dhan.”
Rasuullada sida aan uga akhrinayno Falimaha Rasuullada waxaana qoran sida tan, “oo waxay ku sii adkaysteen rasuulladu waxay bari jireen iyo xidhiidhka ka dhexeeyey iyaga, iyo kibista jebinteeda iyo tukasho.”
3. Arinta saddexaad oo aan doonaya inaan wax ka sheego oo ku saabsan jaalnimada waxay tahay su’aal akhristaha uu isweydin karo taa oo ah, ‘maxaa ka mid ah waxyaalaha la wada wadaagi karo?’ Waxaa jiraan shan shey oo aan ka odhan karo anigoo Kitaabka qoduuska ah saldhig ka dhiganaya,
I. Waxaa la wada wadaagi karaa alaab sida aan uga akhrinayno Korintooska labaad 8:1-5aad waxaana qoran sida tan, “Haddaba walaalayaalow, waxaan idin ogaysiinaynaa nimcada Ilaah oo la siiyey kiniisadaha Makedoniya, si, markii dhib lagu tijaabiyey, farxaddooda badan iyo miskiinnimadooda weyni ay ugu badnaadeen hodantinimada deeqsinimadooda. Waayo, waxaan u marag furayaa finay tabartooda ku siiyeen, oo weliba si dhaafsiisan tabartooda, siday u doonayeen, iyagoo aad nooga baryaya inaannu ka gudoonno hadiyadda qaybta ku leh adeegidda xagga qoduusiinta, oo mana haa sidaan rajaynay, laakiin hortii way isa siiyeen Rabbiga iyo annagaba sidii Ilaah doonayay.”
II. Waxaa la wada wadaagi karaa silaca sida aan uga akhrinayno Filiboy 3:10 waxayna leedahay sida tan, “…inaan ogaado isaga iyo xoogga sarakiciddiisa iyo wadawadaagidda xanuunsigiisa, anigoo isaga xagga dhimashadiisa ugu ekaanaya…” Ma ahan inaan dhexdeena iska silcayno laakiin Ciise naftiisa ayaa noo silcay sida uu Kitaabka qoduuska ah noo sheegaya haddii aan qaas ahaan uga akhrino Korintooska labaad 5:21aad waxayna leedahay sida tan, “Wuxuu isaga oo aan dembi aqoonin ka dhigay inuu dembi noqdo aawadeen, inaynu noqono xaqnimada Ilaah ee ku jirta isaga.”
III. Waxaa la wada wadaagi karaa faafinta Injiilka sida aan uga akhrinayno Galatiya 2:9aad waxaana dhigan sida tan, “…oo kolkay ogaadeen nimcada lay siiyey, Yacquub iyo Keeyfas iyo Yooxanaa, iyagoo loo sharfay sida tiirar, waxay aniga iyo Barnabas na siiyeen gacanta midigta oo wehelnimada, inaannu annagu u tagno dadka aan Yuhuudda ahayn, iyaguna ay u tagaan kuwa gudan.”
IV. Waxaa la wada wadaagi karaa fududaynta Injiilka sida aan uga akhrin karno Filiboy 1:5aad waxaana qoran, “…wehelnimadiinna xaga ka wada shaqaynta Injiilka aawadeed maalintii ugu horraysay ilaa haatan.”
V. Waxaa kale oo la wada wadaagi karaa cillanaadda Injiilka sida ku dhigan Efesos 3:9 oo dhigan sida tan, “…iyo inaan dadka oo dhan garansiiyo waxay tahay talogelidda qarsoodigii weligiis ku qarsoonaa Ilaaha ah kan wax walba abuuray.”
Wax kasta oo la wada wadaagaba waa inaanan ilowbin inuu Rabbigeena Ciise Masiix yahay kan keliya oo aan baahideena oo dhan kaga gudbi karno sida isagu uu noo sheegayba haddii aan ka akhrino Injiilka sida ku dhigan Yooxanaa 6:33-35 oo leh sida tan, “Waayo, kibista Ilaah waa kan samada ka soo degay oo dunida nolosha siiya. Haddaba waxay ku yidhaahdeen, Sayidow, kibistan mar walba na sii. Markaasaa Cisie wuxuu ku yidhi, Anigu waxaan ahay kibista nolosha. Kii ii yimaadaa ma gaajoon doono, kii I rumasytaana ma harraadi doono weligiis.” Tan waxaa kale oo ay sii cadaynaysaa inuu Ciise yahay kibista oo ma ahan keliya inuu na siinaya kibis nagu filan oo mid alla kii isaga caqbalaana runtii wuxuu helay kibista nolosha siduu sheegayba.
4. Arinta ugu dambayso oo aan kaga jawaabi karo su’aasha laga soo jeedin karo arintaan ku saabsan jaalnimada waxay tahay in dadka oo dhan ay noqdaan kuwa ka qayb qaataan wada jirka iyo wada wadaagga wax alla wixii aan sheegnay iyo wixii la mid ah. Ilaah hortiisa ma jiro addoon ama xor ama nin ama naag ama duq ama dhalanyar maxaa yeelay, Kitaabka qoduuska ah wuxuu sheegaya sida tan, “Laakiin waxanu waa wixii lagaga dhex hadlay nebi Yoo’eel, Ilaah baa yidhi, Maalmaha ugu dambaysta waxyaalahanu waa noqon doonaan, Ruuxayga ayaan ku shubi doonaa dad oo dhan; oo wiilashiinna iyo hablihiinnu wax bay sii sheegi doonaan, Raggiinna dhallinyarada ahuna wax bay arki doonaan, odayaashiinnuna riyooyin bay ku riyoon doonaan; Haah, oo maalmahaas addoommadayda, rag iyo dumarba, Ruuxaygaan ku shubi doonaa, iyaguna wax bay sii ksheegi doonaan. Oo waxaan samada sare ka mujin doonaa yaabab, dhulka hoosena waxaan ka muujin doonaa calaamooyin, kuwaas oo ah dhiig iyo dab iyo uumiskii qiiqa. Qorraxdu waxay u beddelmi doontaa gudcur, dayaxuna wuxuu u beddelmi doonaa dhiig, Intaanay iman maalinta Rabbigu, taas oo ah maalin weyn oo caan ah. Oo waxay noqon doontaa in ku alla kii magaca Rabbiga ku dhawaaqa, uu badbaadi doono.” Falimaha Rasuullada 2:16-21
Arintaan waxay na tusaysaa inay Kiniisadda ay waajib nagu tahay inaan ka tirsanaano oo weliba waxaa jiraan waxyaala ay waajib ku tahay Kiniisadda inay samayso maxaa yeelay, haddii aan ka akhrino Matayos 28:19-20aad waxaa inoo cad in arinta ugu degdegta badan ay tahay doonista abaabulaheeda ixtiraamto kaa oo ah Ciise Maasix. Sida keliya oo ay Kiniisadda doonista Ciise Masiix ku fulin karto waxay tahay laba shey inay samayso,
1. Erayga Ilaah dunida oo dhan gaarsiso - Matayos 28:19-20aad.
2. Sida ay Kiniisadda Erayga Ilaah ku baafin karto waxaa ka mid ah laba shey oo aayadahan aan ka akhrin karno waxaana ka mid ah inay dadka ku babtiisto magaca Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa qoduuska ah dabadeedna waa inay dadka bartaa nolosha looga baahan yahay inay ku noolaadaan haddiiba ay Masiixnimo isku sheegaan. Marka tan waxay tusaysaa inuusan jirin qof keligii noolaan karo maxaa yeelay, waa laysu wada baahan yahay.
Arima badan ayaan ka soo hadlay laakiin haddii aan soo koobo inta aan ka soo hadlay oo dhan waa inaan ogaano in dembiga uu yahay arinta ugu sareyso ee dhibaatada iyo sileca noo keento, haddana waa inaanan ilowbin ina dhibaatooyinka iyo silica aan la kulmayno haddii aan rumaystayaal nahay ay ku jiri karto doonista Ilaah. Sidaa daraaddeed waa inaan ogaano waxa ay tahay doonista Ilaah intaanan is nicin oo aanba Ilaah kaga soo hor jeesan dhibaatooyinka nala soo gudboonaado.
Waa inaan ahaano dad uu shaki badan kaga abuurmin xagga awoodda ama aaminka aan Ilaaha Aabbahayna ah oo na uuntay uu ka leeyahay marxalad kasta oo nala soo gudboonaato intii aan dunidan ku noolnahay. Sidee baan saa ku yeeli karnaa ama shakiga uga gudbi karnaa annagoo wax alla wixii nagu hareersan ay yihiin dhibaatooyin? Waa inaan baryada badsano oo aan ahaano kuwa uu rabbigga tijaabiyey oo uu hubsaday inay yihiin kuwa hortiisa nadiif ku ah dabadeedna runtii waad ka hor imaan kartaa silec kasta oo ku soo gaaro. Waa haddana inaad akhrisatid erayga Ilaah oo kuu ah dhiiri galka maalin kasta iyadoo Ruuxa Qoduuska ah ee Ilaah uu kuu cadaynayo waxyaalaha aad ka akhrin doontid Kitaabka iyo waxyaalaha uu Ruuxa Qoduuska ah ee Ilaah uu kuu ban dhigayo.
Waa inaan ogaano in Ilaah uu yahay kan xukunka leh oo wax alla wixii aan baniaadmiga ka qarin karno aan isaga ka qarin karin sidaa darraaddeed haddii aan Ilaah hortiisa daacad ku nahay waxaan nebi Daa’uud la odhan karnaa sida tan, “Ilaahow, I baadh, oo qalbigayga garo, I tijaabi, oo fikiradayda ogow, oo bal fiiri inuu jid xumaan ahu igu jiro iyo in kale, oo igu hoggaami jidka weligiis ah.” Aamiin alahayow taa nooga dhig baryadeena iyo nolosha aan maalin walba ku noolnahay. Haddii aad acalinka imtixaanka xaqnimada kaa qaadaya uu yahay Ilaah runtii waxaad tahay ama aanu wada nahay baniaadmi is hubaa waana sida uu Ilaah naga doonaya.
Waxaan kaa codsanaya inaad haddii aad buugan akhrisatay aad baryadan baridid si ay wax alla wixii aad akhrisay ay u noqdaan wax qalbigaada sii dhisaan. Waa aayado aan ka soo xigtay Kitaabka qoduuska ah qaas ahaan Matayos 6:9-13aad waana baryadii uu Ciise xertiisa baray isagoo leh, “Haddaba sidatan u tukada, Aabbahayaga jannada ku jirow, magacaagu qoduus ha ahaado. Boqortooyadaadu ha timaado, doonistaada dhulka ha lagu yeelo sida jannada loogu yeelo. Kibis maalin nagu filan, maanta na sii. Oo naga cafi qaamahayaga sidaannu u cafinnay kuwa noo qaamaysan. Oo jirrabaadda ha noo kaxayn, laakiin sharka naga du. Waayo, boqortooyada iyo xoogga iyo ammaanta adigaa leh weligaa. Aamin.”
Nimcada Rabbigeena Ciise Masiix iyo jacaylka Ilaah iyo wehelnimada Ruuxa Qoduuska ahi kuligiin ha idinla jireen. Aamin.
Waxaa qoray oo xaq kasta u leh Sharmaarke. Haddii ay jiraan wax su’aal, tallo, codsi ama cabasho ah waxaa lagala soo xiriiri karaa idaacadda CODKA WADADA NABADA sanduuqa boosto waa 76001 - 00508 Nayroobi Kenya .
© 2005 Sarmaarke
P. O. Box 451336